3550s एबीसी न्यूज प्राइम: COVID-19 अस्पताल भर्ती, बन्दका आवाज, फ्रन्टलाइन्समा डाक्टरहरू images and subtitles
>> संसारमा एक क्र्याक तल सबैभन्दा ठूलो डेमोक्र्यासी, पुलिस इन भारत वेल्डिंग ब्याटन्स, चार्ज गर्दै लॉकमा मानिसहरू तर्फ गाडीहरू रोक्दै, बनाउँदै मानिसहरू गर्दै PUSHUPS जब तिनीहरू BREAK नियमहरू तिनीहरू सबै प्राप्त गर्न कोसिस गरे OUTBREAK धम्की दिन बन्द गर्नुहोस् तिनीहरूको जनसंख्या। यहाँ सेनेटमा पुग्नुहोस् $ २ ट्रिलिजन सम्बन्धमा एउटा सम्झौता प्याकेज केहि कानून बनाउनेहरू अझै छन् रिजर्भेसन। अमेरिकामा ,000०,००० केसहरू छन् आधा न्यू योर्कमा। अमेरिकाको कोवीमा नम्बर EPICENTER। यहाँ आशाका चमकदारहरू छन् सामाजिक को प्रभावहरु DISTANCING। अधिक अमेरिकाको आधा तथ्या्कहरू बन्द गर्नुहोस् अव्यवसायिक व्यवसाय। >>> OVERSEAS, प्रिन्स चार्ल्स छ COVID-19 को लागी पोजिटिभ पोजिटिभ। >>> राम्रो इभनिंग, सबैजना। धेरै स्ट्रीमिंग को लागी धेरै धन्यवाद हामी संग। म लिन्से डेभिस हुँ। हामी कहाँ दिन अगाडि हेर्छौं हामी केहि रिपोर्ट गर्न सक्दछौं बिभिन्न, तर फेरि फेरी, कोरोनाभाइरस केसहरू जारी राख्नुहोस् RISE। द न्यू योर्क सरकारले भने अस्पतालहरु यहाँ चाँडै हुनेछ थप बिरामीहरू भन्दा बिरामीहरू र कोरोनाभाइरस सूचनाहरू छैनन् अर्कोको लागी अनुभवी तीन हप्ता र एउटा हस्ताक्षर कि कोही पनि चाहँदैन कुनै पनि शहरमा हेर्नुहोस्, टेन्टेड, नयाँ शिर्षकहरू बनाउँनुहोस् यार्क सिटी। अधिकारीहरूले केसमा मात्र भन्दछन्। यी निश्चित रूपमा नियमित छन् र चेतावनी समय सामान्य तथ्या AD्कहरू के तिनीहरू प्रस्तुत छन्, आशा गर्दै यसमा टुरिस्टहरू आकर्षण गर्नुहोस् आगन्तुकहरू भ्रमण गर्नुहोस्। अब हावई पर्यटन माग्दै छ सम्पूर्ण महिनाको लागि बाहिर रहनुहोस्। अलास्का बाहिरी दर्शकहरूलाई इम्प्लायर गर्दैछ १ 14 दिन र को लागी क्वारेटिन फ्लोरिडा कुनै पनि कसैलाई भनिरहेको छ न्यू योर्क, न्यू जर्सी र सेल्फ-क्वारेन्टिनमा जडान गर्नुहोस् दुई हप्ताका लागि। तर राम्रो समाचार, खोज्दै चाँदी लाइनहरु आयो सबैका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अमेरिकाको, आज नयाँ योर्क सरकारले भने कि प्रारम्भिक हो सूचकांक सामाजिक सिफारिश छुट्याउनको लागि झट्टै देखिन्छ भाइरस को फैलियो। एबीसीको टम लालामास स्टार्ट अफ अफ। >> रिपोर्टर: आज एउटा ग्रिम साइन इन गर्नुहोस् यो प्यान्डिक धेरै टाढा छ। टीमहरू म्याकशिफ्ट सेट अप गर्दै मोर्गे न्यू योर्कको बाहिर BELLEVUE अस्पताल। उनीहरूको अवधि9/ ११ को हो र हरिकन सैंडी। औसत, कम्तिमा 5,000,००० नयाँ राज्य मा केस, र एक अस्पताल एक्लो, १ P व्यक्ति DYING केवल २ 24 घण्टामा। अस्पताल भनिरहेको भाइरस हो एक अविश्वसनीय टोल लिँदै। तर आशाको आजको एक स्लिभर, अत्यधिक सामाजिक आपतकालिन उपायहरू काम गरिरहेका हुन सक्छन्। अस्पतालको दर थोरै स्लाइडि।। >> यो एक धेरै राम्रो हस्ताक्षर हो एक सकारात्मक हस्ताक्षर फेरि, म १००% IT होल्डहरू वा होइन यो अचम्मित छ, तर तीरहरू सहीमा ध्यान दिइन्छ डायरेक्शन >> रिपोर्टर: तर शासक कुमो भन्दछ हामी अझै पनी सप्ताह सक्छौं न्यूयोर्कमा चुहावटलाई हेट गर्दै CITY एक CENARIO जो कूलिड कोल्ड राष्ट्रपतिको नयाँ संग टाइमलाइन, EASE लाई प्रपोज गर्दै ईस्टर आइतबार द्वारा प्रतिबन्धहरू, त्यो अप्रिल १२ औँ हो। >> यो कस्तो ठूलो समय हो हुन सक्छ। ईस्टर हाम्रो समय छ। के एक महान समय। >> रिपोर्टर: तर जे होस् राष्ट्रको शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञहरु सिफारिश गरीरहेको छैन कुनै मिति >> त्यो वास्तवमै एकदमै लचिलो छ। हामीसँग एउटा कुराकानी थियो ओभल अफिसमा राष्ट्रपति बारेमा कुरा गर्दै, तपाईंलाई थाहा छ, तपाईं सक्नुहुन्छ एक मितिमा हेर्नुहोस्, तर तपाईं पाउनुभयो धेरै लचिलो हुनुहोस्। सम्भाव्यताको मूल्या TO्कन गर्न तपाइँ के गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ। >> रिपोर्टर: न्यू योर्क, द अमेरिकामा एपिसेन्टर, अझै पनि थप ठाउँ र अधिक आवश्यक छ आपूर्ति। चौथाई अस्पतालहरू अन्तर्गत मार्ग, र ती पनी आवश्यक छ नाजुक जीवन रक्षा उपकरणहरू, भेन्टिलेटरहरू। सरकारको संख्या ११,००० बाटोमा छन्, तर उनले A लाई आवश्यक छ 30०,००० को कुल। कुमोले उनीहरू के गर्दै छन् भन्दै ITALY DID, भेन्टेलर विभाजित गर्नुहोस्। एक उपकरण, दुई PATIENTS। >> हामी स्प्लिटिंग स्प्लिट गर्दैछौं। जहाँ एक जना भेलावालले गर्नु पर्छ दुई PATIENTS। इटाली यो कारण गर्न थियो तिनीहरूले यो गर्न जबरजस्ती गरे। >> रिपोर्टर: ती वेंटलिटरहरू विरामीहरुलाई रोगीहरु को लागी आवश्यक छ 25-YEAR-Old Jack ALLARD जस्तै उत्तर डाकोटा जो ए मा छ मेडिकलली इन्डकुटेड कोमा। >> यो भाइरस साँच्चै हो खतरनाक। उनी धेरै, धेरै बिरामी छन्। >> रिपोर्टर: २ 26-वर्ष-ओल्ड FORMER ल्याक्रोस प्लेयर WOKE UP पछाडि ACHES र एक राम्रो संग चाँडै हप्ता अगाडि। >> उनले कहिल्यै लुकाएनन्। ऊ कहिल्यै धूम्रपान गर्दैन। ऊ आफ्नो स्वास्थ्य धेरै छ गम्भीर मँ हो, ऊ एक खेलाडी हो। >> रिपोर्टर: अब ज्याकको डक्टरहरू का लागि एक व्यावहारिक ड्रगको प्रयास गर्दै इबोला। उसको पारिवारिक आशामा यो बचत हुनेछ HIM न्यू योर्क शहरमा,% 46% कोरोनाभाइरस केसहरू मानिसका उमेर हुन् १ TO देखि। 44। भाइरस सबै उमेरलाई हेट गर्दै। 62२% मृत्यु मर्द र% 54% को हुन्छन् भाइरसबाट मर्ने व्यक्तिहरू O 75 भन्दा बढि हो। त्यो के हो ब्रुड्रिजमा, नयाँ जर्सी आज AN ० भन्दा बढी बसोबासहरू ट्रान्सफर गरियो भित्रबाट यो भित्र राख्नुहोस् घर NURSING। अमेरिकी नौसेनालय शिप "दयालु" हेडिंग टुवर्ड लॉस एंगेल्स मेडिकल क्रू तयारी तयारी बेडहरू र उपकरण सार्नको लागि उपकरण माथि 1,000 PATIENTS अफशोर। सहायता गर्न आज नयाँ प्रभाव उत्तर क्यारोलिनाबाट कोलोराडोमा। VETERINARIAN अहिले DONATING चिकित्सा उपकरण समावेश भेन्टिलेटरहरू। >> यो केवल एक अधिक उदाहरण हो एक सहयोग र हामीलाई भइरहेको छ हाम्रो संग पार्टनर गर्न को लागी पर्याप्त छ मानव पक्षमा साथीहरू। >> रिपोर्टर: अब नयाँ तातो क्षेत्र पपिंग गर्दै देश पार गर्नुहोस्। आज डिसास्टर घोषणा टेक्सास र लुइसियानाका लागि। नयाँ अर्लिन्समा, मार्डी ग्रस जस्ट हप्ताहरू यसकासाथ एउटा सेलेब्रेशन ठूलो संख्यामा दिन र दिनहरू पार्टीिंग एक कारण हुन सक्छ कोरोनाभाइरस अब प्रशस्त छ द्रुत यहाँ जे भए पनि ग्रहमा। >> मेरो EMS विभाग, O०% भन्दा बढि मेरा मानिसहरू अहिले छन् क्वारन्टीन, र यति मात्र हामी पनि लक गरिएको थप स्रोतहरू राज्य स्तर, राज्य क्यान कुनै लामो समय बाहिर जानुहोस् अतिरिक्त - फेडरल बिना यस समयमा सहयोग गर्नुहोस्। >> रिपोर्टर: र अब भाइरस पहिले टोल लिँदै जवाफ दिनेहरू। >> यो एकदम व्यक्तिगत छ। प्रत्येक र हरेक दिन म एक हुन्छु रिपोर्ट र संख्या क्लाइम्ब। >> रिपोर्टर: अधिक न्यू योर्क मा NYPD भन्दा २०० सदस्यहरू संग प्रभाव भएको छ भाइरस। कम दुई अधिकारीहरु मा DETROIT मा मरेको छ। र अमेरिकी सेनाको लागि नयाँ संगै काम गर्न गृह डेलिभरीहरूमा केस गर्नुहोस्, केसहरू भाइरसको अब रिपोर्ट गरियो NINE AMAZON WAREHOUSES। >> र टम लालामास हामीलाई अब सम्मिलित गर्दछ। टम, न्यू योर्क सरकार एन्ड्रयू कुमो आज उसले भन्यो राज्य हो अब होटस्पट अधिकार। IT स्रोतको आवश्यकता छ तर IT अर्कोलाई मद्दत गर्न तयार तथ्या .्कहरू जब तिनीहरू नयाँ हुन्छन् HOTSPOTS। >> रिपोर्टर: हो, त्यो सही छ, LINSEY। ऊ A का लागि भनिरहेको छ अब दिन को कपल। जरूरी छ कि ऊ बनाउन चाहन्छ निश्चित गर्नुहोस् उनीहरूले यो समस्या ठीक गर्न सक्छन्, मद्दत बाहिर महामारी र एकचोटि तिनीहरू सबै सिक्छन् CAN, र एक मात्र अन्य हट زونहरू लुसिआना जस्ता पप्पिंग सुरू गर्नुहोस्, तिनीहरू केहि स्थानान्तरण गर्न सक्छन् उपकरण, केही ज्ञात र आशाले अरूलाई मद्दत गर्नुहोस् देशबाट तथ्या .्क। >> अब केहि को लागी जानु पर्छ आशावादी समाचारहरू अस्पतालमा दरहरू छन् नयाँ यार्कको कारण तल झेलिदै सामाजिक आपतकालिन। त्यो ट्र्यान्डलाई अनुभवी छ जारी राख्नुहुन्छ? >> रिपोर्टर: हो, तपाईलाई थाहा छ, यो एक सानो सिल्भर लाइनिंग र हो सरकार कुमो, हरेक रात उहाँ मलाई बताउँछ उहाँ सबैलाई हेर्नुहुन्छ तथ्या AND्क र डेटा र PRESENTS अर्को समाचार कन्फरेन्सहरूमा DAY यो एक SILVER लाइनिंग उहाँ हुनुहुन्छ म्यान्टेड। अस्पताल दर गयो हल्का तल बट, फेरि, उहाँ अझै भन्दछ हामी नजिकै छौं दुई सबै हप्ताबाट तीन हप्ता केस जब तिनीहरूले हिट अस्पतालहरु, त्यसैले हामी धेरै, धेरै नयाँ योर्क शहरमा शुरुमै प्यान्डमिक। LINSEY? >> NONETHELESS, हामी लिनेछौं चादीको घेरा। टम लालामास, धन्यवाद। >>> धेरै अमेरिकीका लागि यो छ तथ्याIC्कहरूको बारेमा लामो समय सम्म वास्तविक परिवार र विक्टिम यसमा । अनमोरमा थप्दै हृदय BREAK, धेरै बिरामी छन् अब शारीरिक रूपमा अलग बाट तिनीहरूको यो लडाई मन परेको छ पृथकमा लडाई। अन्य परिवारहरू भाईरसको पहिले नै फैलिएको छ। हाम्रो म्याट गटम्यानले यी साझेदारी गर्दछ हार्ट बन्चिंग स्टोरीहरू। >> रिपोर्टर: आज राती 17-वर्ष पुरानो खरीद LOS बाट एG्गलहरू युवा बनेका छन व्यक्ति हुनको लागि देश मा COVID १ TER पछि मरे। >> यस समुदायमा सबै मारिए, तिनीहरू बढेका छन्। मान्छेहरू गृह रहन सक्दछन्। म अर्को गुमाउन गइरहेको छु यस शहरमा बच्चा। >> रिपोर्टर: सीडीसी आज रात छ को कारण भित्र हेर्दै TEENAGER को मृत्यु। उनको फादर, एक उबर ड्राइभर, पनि प्रभावित र SAN DIEGO मा, दुई सूचनाहरू सकारात्मक परीक्षण गर्दै। र डक्टरहरूबाट चेतावनी आज राती >> बिरामीहरू भित्र आउँदैछन् धेरै अलग संग साधारणतया उजुरीहरू, तर धेरै जसो कम, गाह्रो र छोटो BREATH म वास्तवमै त्यो कुरा सम्झन्छु चाखलाग्दो, बिरामीहरू आउँदैछन् नौसिआ संग, बान्ता र DARRHEA, केहि हामी गर्छौं RESPIRATORY का साथ अनुभव गर्नुहोस् ILLNESSES। >> रिपोर्टर: उनको 40s मा टेरी र भाइरस सम्म सक्रिय गर्नुहोस् यसमा फेला पर्‍यो। >> म जिममा काम गर्दै थिएँ र फेबेर र नौसेलाले लात हाले IN >> रिपोर्टर: दिन ती She थियो अस्पतालमा राखिएको। >> ठीक छ, मसँग यो मेरोमा गइरहेको छ १ 16 औं दिन अब। >> रिपोर्टर: पूर्ण समय उनले उसको पतिलाई देख्दैन र तीन बच्चाहरु >> उसले ढोकामा खानेकुरा छोड्छ। मसँग मेरो परिवारको साथ सन्तुष्टि छ। र मेरो बच्चाहरु नोटहरू छोड्नुहोस् र सानो - मेरो लागि सानो शिल्पहरू ढोकामा। तर मसँग तिनीहरू छुइनको छैन वा यससँग उनीहरूसँग कुनै पनि समय खर्च गर्नुहोस् पूर्ण क्वारेन्टाइन। >> रिपोर्टर: एक हो SYMPTOMS, SMELL LOSS, WHICH साथै YVETTE लाई सम्पन्न भयो। >> रिपोर्टर: एउटा कुरा मैले सूचना परिवर्तन गरेँ, I मेरो भावना पूर्ण रूपमा हराउनुहोस् SELL। >> रिपोर्टर: र यो धेरै भयो विश्व यो -०-वर्ष पुरानो सेना VET थियो अस्पतालमा राखिएको। उनी रिलीज र वास्तवमै थियो भाइरस सम्म अझ राम्रो लाग्छ ट्रिगर न्यूमोनिया। अन्ततः उनी भन्छन् डाक्टरहरु उनको एक एन्टि-मलियियल ड्रग कल HYDROXYCHLOROQUINE A को भागको रूपमा प्रयोगसाला परिक्षण। मिसूरी पाँच परिवार सदस्यहरू तपाईं यो चित्रमा देख्नुभयो भाइरस। पहिलो, विवाह जेन वाइनहाउस। JASON, भाई, बहन-भित्र-कानून र बुबा माइक। तिनीहरू सबै आईरहेछन्। ती पनी तीन जनाले अनुभव गरिरहेका छन् निमोनिया। भाइरस पनि तिनीहरू मार्फत एरिकाको परिवार। एबीसीको कुराकानी गर्दै "यहाँ सुरू गर्नुहोस्" पोडकास्ट उनी अनुसन्धान गर्दछन् हराएको उसको हसबन्ड जर्वे केवल उहाँको दिनहरू अघि .th औं दिन BIRTHDAY। >> म सहयोग महसुस गर्दछु। म के गर्न चाहन्छु? >> रिपोर्टर: एकचोटि उहाँ परिक्षण गर्नुभयो सकारात्मक, चिकित्सकहरू अलग तिनीहरूका दुई बच्चाहरूबाट जर्वे र एरिकाबाट उनीसँग राम्रो भन्न को लागी कहिल्यै छैन। >> विभिन्न DUFFICULT STOIES TO सुन्नुहोस्। हामी अब म्याट गुटम्यानद्वारा सम्मिलित छौं। म्याट, तपाईं COVID-19 रिपोर्ट PATIENT, TERRY CHASELY, FELT अझ राम्रो र फेरि बिरामी पर्दछ। केहि तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ बेच्ने तरंगहरू बारे? >> रिपोर्टर: हामी छौं। मान्छे रोलरमा कल गर्दैछन् कोस्टर प्रभाव उनीहरू कहाँ सोच्दछन् तिनीहरू मेंडमा छन्, हुनसक्छ हप्ता वा दस दिन वा दुई हप्ता पहिले GETTING SYMPTOMS AND पछि केही दिन पछि उनीहरू पछि यस द्वारा फेरि एकैसाथ जानुहोस् भाइरस। फेरि, यो धेरै समस्या हो यसका साथ रोप्ने कुरा डाक्टरहरू कसरी सिक्ने छन् यो भाइरस व्यवहार गर्दछ। >> के बारे मा कि गुमाउँछ SMELL? चाखेर पनि हार्दिक हार। ती हुन् लक्षणहरू हुन् संग सम्बद्ध हुन विश्वास छ यो भाइरस। >> रिपोर्टर: तिनीहरू हुन्, र त्यो ती चीजहरू मध्ये एक हो त्यो हो यस भाइरसको बारेमा सोरपिस गर्दै, तर डाक्टरहरूले वास्तवमै यसो भन्छन् होइन कि सर्पिस गर्दैछ। विभिन्न लक्षणहरू। हामी हृदयका मानिसहरू बान्ता गर्दैछौं र नौसेआ र हेडचेस एंड BACK ACHES, र OBVIOUSLY न्यूमोनिया सामान्य, तर म के यहाँ सेन्सेड प्रोभेष्टमा बताइएको थियो। जोसेफ मेडिकल केन्द्र त्यो हो ESSENTIALLY भाइरस को आक्रमण तपाईंको सम्पूर्ण प्रणाली। त्यसो गरेर, यो जरूरी छ तपाइँको अमानवीय प्रणाली पठाउनुहोस् हाइपरड्राइभ। यो OVERREACTAS र तपाइँलाई आक्रमण गर्छ आफ्नै शरीर हामी किन धेरैजना देखिरहेका छौं यसको लागि VARIED SYMPTOMS खास भाइरस। हामी केहि बिन्दुमा आशा गर्न सक्छौं एउटा खोप लगाउनुहोस् र ती पाउनुहोस् उपचारहरू जुन हामी जान्दछौं काम LINSEY? >> सबै सही। म्याट गुटमान, तपाईंको लागि धन्यवाद रिपोर्ट गर्दै। हामी यसको कदर गर्छौं। >>> अब रिपल प्रभावहरूको यो भाइरस टाढा छन्। हामी भन्दै थियौं, धेरै परिवार सदस्यहरू यहाँबाट राखिन्छन् तिनीहरूको पुरानो प्रेमले हामीलाई घरहरु NURSING र सहायता हप्ताको लागि अहिले जीवित केन्द्रहरू। त्यो जेल र को लागी केस हो पछिल्लो टेलर। तपाइँलाई धन्यवाद दिन चाहानुहुन्छ अमेरिकामा सामेल। >> तपाइँलाई अमेरिकाको लागि धन्यवाद। >> हामीलाई अमेरिकाका लागि धन्यबाद, LINSEY। >> जेल, तपाईंको आमा चार्लोट एमा नयाँ जर्सी जीवित सहयोग केन्द्रले उनको th th औं मान्यता प्राप्त गर्‍यो जन्म र आज तपाईंले सिक्नु भयो उनले पोजिटिभ परीक्षण गरे कोरोनाभाइरस। हामीलाई भन्नुहोस् उहाँ कसरी समाप्त हुनुभयो परीक्षण गरिएको छ। उसको लक्षण के थियो? तपाइँ यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्दै हुनुहुन्छ केवल केही घण्टा देखि रिभोलिएसन अब त्यो भाइरस छ कि? >> हो। SATURDAY मा तँ मेरो बोल्छ आमा, र मैले त्यो याद गरें केवल एक सानो साथ ध्वनि। एकदम थकित। म फोनमा उसलाई होल्ड गर्दिन लामो, तर मलाई केहि थाहा थियो बिभिन्न आइतबार मैले सुनें घर पालना, तिनीहरूले मलाई भने उनीसँग लगभग १०० को कम छ। र मैले भने, HMM, OkAY, कसैको आज्ञाकारी हुँदै गइरहेको छ। उनीहरूले मलाई पत्र लेखे तापमान TOAT सम्म तल गयो। सोमबार तिनीहरूले मलाई भेटे उनीहरू १०२ लाई छनौट गरियो। त्यसो भए म डाक्टरलाई बोलाउँदछु र म बोले, सूचीबद्ध, तीन कुराहरु, उनी 89।, उनी भर्खरै छिन घर र उनी एक कम छन। म उसको जाँच गर्न चाहान्छु। त्यसैले उहाँ सहमत हुनुहुन्छ। र तिनीहरूले मलाई आज मलाई बोलाइयो मलाई त्यो सकारात्मक परीक्षण गरिएको छ। त्यसोभए, म शकमा छु। म स्तब्ध छु। मलाई लाग्छ मेरो भाग थियो त्यो टेस्ट सोच्नुहुन्न पछाडि पोजिटिभ कारण हुनु पर्छ हेरचाह गर्ने घर, तिनीहरू छन् एक जोडी को लागी रोकिन्छ हप्ताको अब। मैले हेर्ने मौका पाएँ उनको, मेरो हसबन्ड र म, उनको BIRTHDAY, तर हामी अलग थियो ग्लास द्वारा। >> ठीक। >> त्यसो त कुनै शारीरिक थिएन सम्पर्क गर्नुहोस्। त्यसो भए म मात्र हुँ, तपाइँलाई थाहा छ, शंकित म दुखि छु; मलाई पिर परेको छ। तर हामी ईसाई र मानिसहरू हौं विश्वासको, यति हामी विश्वास गर्छौं प्रार्थनाको शक्ति, तर निश्चित रूपमा धेरै संकुचित। >> र तपाईंको आमा हुनुहुन्छ अन्डरलिइनिंग सर्तहरू। त्यसो भए अब त्यो लागि मार्गनिर्देशन हो उनले स्ट्याट पुट वा खोज्नु पर्छ अस्पतालमा उपचार गर्नुहोस्? >> त्यसो हो, तर यो जस्ट सुरू भयो, उनी पट्टि लाग्नेछन्। अहिले नै उसको प्रतीकहरू छन् चाँडो र मात्र उनको भावना थकित। मेरो आमा दुई पटक ल L्ग क्यान्सर हुनुहुन्छ सर्भर उनी पनि डायबेटिक। त्यसैले, पाठ्यक्रम को, त्यहाँ छ, तपाईं थाहा छ, कि मा ठूलो ध्यान क्षेत्र, र हामी संग परामर्श गरेका छौं एक प्रभावशाली रोग विशेष। त्यसैले ऊ मनमा केहि चीजहरू छन् र हामी जान्दछौं, कुराकानी गर्नुहोस् उहाँसँगको अझ बढीमा। तर अब उनी पट्टि लाग्नेछन्। उनी सुस्पष्ट छ। उनीसँग एउटा रोमिटेट छ कि उसको घरबाट हटाइएको छ। >> र यो असुविधाजनक हुनेछ समाचारहरू, OWVIOUSLY अन्डर कुनै पनि CIRCUMSTANCE, तर कसरी अधिक विविध यो हुन्छ जस्तो छ तपाईं वास्तविक रूपमा हेर्न सक्षम हुनुहुन्न र उनीसँग भेट्न आउनुहोस्? >> त्यो हो - हो, यो छ नहुनुको सबैभन्दा बेग्लाबेग्लै भाग यहाँ उनको साथ हुन सक्ने। मेरो आमाको जोडी बिरामी परेको थियो महिना अगाडि र म त्यहाँ सबै थिए एकल दिन दिनभरि। उनी वास्तवमै हुनु पर्छ अस्पताल र ट्रान्सपोर्ट गरिएको मेरो हसबन्ड र म, हामी सबै खर्च गर्छौं उनको साथ दिन। त्यसोभए हामी वास्तवमै ह्यान्ड्स अन गर्छौं। म NURSES मा कुरा गर्न पाएँ, डाक्टरहरू, तपाईंलाई थाँहा छ, म वास्तवमै थियो ठीक चीजहरूमा दर्ता गर्नुहोस्, त्यसैले म वास्तवमै उनको आवाज हुन। मेरी आमा पनि डेमेन्टीआ छ। त्यसो त वास्तवमै हो, साँच्चै DOFFICULTO हुन सक्षम हुनु हुँदैन त्यहाँ, तपाइँलाई थाहा छ, समर्थन गर्नुहोस् उनको र पनि उनको आवाज हुन। >> र अर्को चरणहरू के हुन्? के प्रकारको नियन्त्रण तपाइँ गर्नुहुन्छ एक डिस्टान्स देखि ALBEIT, छ? >> त्यसो हो, धेरै छैन, वास्तवमा। अब तपाइँ थाँहा, ठीक, अब, फेरि, उनी स्टेबल छन्। तिनीहरू उसका लक्षणहरूको उपचार गर्दैछन्, तपाइँ जान्नुहुन्छ, टाइलनाल र चीजहरू जस्तो मन पराउनुहोस्। उनीहरू मलाई भन्दछन् कि उनले पनि एक यूटीआई छ। त्यसोभए उनीहरूसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ स्वागत छ। तर यो केवल सामग्री कलिंग, म NURSES कल गर्दै। मेरी आमा अचम्मको छ डाक्टर ऊ उनको लागि नयाँ छ। ऊ उनीसँग भएको थिएन उनको प्रेमीको रूपमा लामो, तर यो GUY म वास्तवमै मन पराउँछु। ऊ - जब तपाईं यस नम्बरमा कल गर्नुहुन्छ, ऊ फोनको जवाफ दिन्छ। त्यसोभए तपाईंलाई कस्तो लाग्छ भनेर जान्नुहोस्। तर वास्तवमा यो एक दोस्रो दोस्रोमा हो एक समय, एक दिन एक समय मा। हामी कसरी जान्छौं भन्ने छ अहिले। >> पास्टर टेलर, एक मानिस को रूपमा कपडा, कम्मर के शब्दहरू के तपाईं यसमा तपाईंको पत्नी दिदै हुनुहुन्छ? MOMENT? >> ठीक छ, फेरि, उनले हामीलाई भने विश्वासका मानिसहरू, त्यसैले हामी विश्वास गर्छौं प्रार्थना र हामीको शक्तिमा भएको छ, तपाईंलाई थाँहा छ, प्रार्थना गर्दै उनको। उनी एक कडा महिला, पनि, र उनी - म उनीसँग झगडा गर्छु भनेर विश्वास गर्दछु उनको, तर तपाईलाई थाहा छ, हामी हौं केवल हातमा यो राख्ने अब प्रभु ठीक हुनुहुन्छ। हामी वास्तवमै केही पनि होइनौं हामी गर्न सक्दैनौं THERE। हामी उनलाई हेर्न सक्दैनौं। हामीसँग निर्भर छौं कम्युनिकेसन। र म भन्न सक्दछु सुविधा छ तिनीहरूको सर्तहरूमा उत्कृष्ट पारियो अमेरिका संग कुराकानी, मा जेलको साथ खास। हामी केहि सोध्न सक्दैनौं अझ राम्रो। तर यो पर्याप्त छैन जस्तो हुँदै छ केहि देख्नको लागि। >> ठीक। >> हामी तपाईलाई धेरै पछी धन्यवाद दिन्छौं यस अवधिमा हामीसँग बोल्दै DIFFICULT TIME। >> धन्यबाद। >> हामी छिटो जाँच्दैछौं प्राप्ति र राम्रो स्वास्थ्य सम्पूर्ण परिवार। >> धन्यवाद, लाइन। धन्यवाद। >> धन्यबाद। >> र अब वाशिंगटन, कहाँ कONG्ग्रेस अहिले पनि हथौड़ा गर्दैछ त्यो $ २ ट्रिलियनको विवरण आर्थिक बचत गर्न बिल दिनुहोस्। सेनेट एक सम्झौता पुगेको स्वीपिंग डिलमा अधिक त्यो विश्वास प्रदान गर्नेछ लाखौं व्यक्तिलाई कठोर हिट द्वारा सबैभन्दा धेरै व्यवसायहरूको बन्द, प्रत्यक्ष भुक्तानहरू सम्मिलित गर्दै धेरै अमेरिकीहरू। तर सेनेट कुनै हिट थियो तिनीहरू प्राप्त गर्न को दौडको रूपमा रोडबल्क अमेरिकी मतदान जारी राख्नुहोस् पर्खनु। एबीसी समाचार छापा गोरा घर CORRESPONDENT जोनाथन कार्ल छ नागोशनमा भर्खरको। >> रिपोर्टर: आज राती कांग्रेसनल नेताहरू आशा गरिरहेका छन् सबैभन्दा ठूलो आर्थिक पास गर्न रिलीफ अमेरिकी इतिहासमा बिल। >> एक लडाई हाम्रो आयो शोरहरू। हामी यसलाई खोजेनौ। हामी यो चाहँदैनौं। तर अब हामी यसलाई जित्न गइरहेका छौं। >> रिपोर्टर: P २ को भागको रूपमा ट्रिलियन डिल, पीपुल्स ईर्निंग $ 75,000 एक वर्ष वा कम प्राप्त हुनेछ A $ 1,200 चेक प्लस $ 500। ती कमाई $ 99,000 मा वर्ष एक सानो चेक प्राप्त गर्नेछ। >> मद्दत तरीकामा छ। द्रुत सहायता, ठूलो सहयोग। >> रिपोर्टर: एलिजाबेथ को लागी, A हराउन एन्जलसमा RIT, IT'S एकैछिन पनि। >> मलाई थाहा हुनु पर्छ कि म गइरहेको छु ठीक छ र त्यसैले मेरो बच्चाहरु हुनेछ BE यदि हामी बिरामी हौं भने अब। >> रिपोर्टर: बिल अन्तर्गत मानिसहरू अनमोल प्राप्त गर्नेछन् T E हप्ताहरूका लागि लाभहरू २ 26 को स्थापना गर्नुहोस्, र आकार एक अनमोल चेक अप हुनेछ चार महिनासम्म $ 600 द्वारा। त्यहाँ सानो को लागी पनि मद्दत व्यवसायहरू। डायन र LLY स्वामित्वको पसल उत्तर क्यारोलिना। >> हामी सम्भवतः 20-प्लस थियो घटनाहरू रद्द गर्नुहोस् वा पोष्ट गर्नुहोस्। धेरै विवाहहरू। >> रिपोर्टर: बिल ए समावेश गर्दछ $ 7$7 बिलियन PROण कार्यक्रम को लागी थोरै कारोबार गर्ने व्यक्तिले Lण नलिएको तिनीहरूका कामदारहरू बन्द। र FOR 500 बिल को लागी ठूलो हार्ड-हिटमा कर्पोरेसनहरू इंडस्ट्रीज एयरलाइन्स मनपर्दछ र होटलहरू त्यहाँ $ १०० भन्दा बढि छ अस्पताल र अस्पतालको लागि सहयोगमा बिल स्वास्थ्य केयर प्रणाली, र पैसा तिनीहरूको तथ्या OF्कहरू मद्दत गर्न घाटा। >> र जोन कार्ल अब हामीलाई सामिल हुन्छन् वाशिंगटन। जोन, त्यसोभए स्ट्यान्ड गर्नुहोस् अब यसमा एक समय भोटमा अधिकार दिनुहोस् बिल र राष्ट्रपति के हो यो पालनाको बारेमा भन्दै अन्तिममा? >> ठीक छ, यो मन पर्छ यो अन गरिरहेको छ औसत केही अन्तिम-मिनेट HICCUPS त्यहाँ अफरको साथ छन् मुख्य कानुनीकरणका आधारहरू, तर मेरो संवेदना यो चलिरहेको छ तर्फ पासवर्ड, यदि आज छैन सेनेटमा टमोर्रोद्वारा। र त्यसपछि घर अनुसरण गर्नेछन् छोटो छोटो पछि। >> र धेरै अमेरिकीहरू छन् फ्रिस्ट्रेटेड कि यो लिदैछ धेरै पछि। म एउटा चार्ट राख्न चाहन्छु यदि हामी त्यो देखाउन सक्नुहुन्छ कि मोर्गन स्टेन्ली MIL लाख भन्दा बढीको पूर्वानुमान अमेरिकीहरूले फाइल गर्न सक्छन् बितेको समयमा बितेको दाबी हप्ता कांग्रेसलाई बुझ्दछ तत्काल त्यो धेरै अमेरिकी भावनाहरू छन् र तिनीहरूलाई सहयोग चाहिन्छ अहिले? >> ठीक छ, मँ थाहा छैन सबै कांग्रेस मा बुझ्दछु कि, तर म खासै विश्वासका आधारमा नेताहरूले बुझ्दछन् कि। म मतलब, LINSEY, यदि तपाईं लिनुहुन्छ पछाडि जानुहोस् र हेर्नुहोस् के हो यहाँ खुशी हुँदैछ, यो एक $ २ हो ट्रिलियन आर्थिक रिकवरी बिल। यो भन्दा धेरै ठूलो छ क EV्ग्रेसले कहिले पास भयो पहिले। तपाईंले कम्बर्सन औटो बेलआउटको साथ। यो एक हो - यो एउटा ठूलो हो यहाँ अन्तर्क्रिया गर्दै, TR २ ट्रिलियन र यो पास गर्दै छ काONG्ग्रेसल स्ट्यान्डर्डहरूसँग लाइटनिंग गति। यस्ता अनियमित सन्दर्भमा लाभ, यो एक मुख्य विशेषता बिल, जसरी मैले मन्तव्य गरेको थिएँ समयको लम्बाइ विस्तार गर्दै त्यो मान्छे सक्षम हुन सक्छ अनपेक्षित, तर पनि थप्दै EM 600 कि अनियमित जाँच गर्नुहोस् प्रत्येक महिना चार महिनाको लागि। त्यसो भए - यो एक ठूलो बिल हो। आईटीले विस्तृत ब्यापारिसन गर्दछ कांग्रेस मा समर्थन, तर केही छैन सँधै द्रुत रूपमा उद्धृत गर्छ तपाईलाई यो क्यापिटलमा मनपर्‍यो HILL। >> त्यो सही छ। ल। जोनाथान कार्ल अमेरिका को लागी IN WASHINGTON, DC धन्यवाद, जॉन। >> धन्यबाद। >> र जब हामी पछाडि आउछौं भिडियो तूफान चेसर्स ट्रिफाइ गर्दै डगिंग डेब्रिस एक टोरनाडो पछि दक्षिण मार्फत रिप्स। >>> प्रिन्स चार्ल्स परीक्षण कोरोनाभाइरसका लागि सकारात्मक। कसरी उसको नजिक भयो? क्विन? >>> र हामी एक कूलर हेर्नेछौं प्रभाव मा गुप्त -१। इमरजेन्सी सानो छ व्यवसायहरू। >>> त्यो भन्दा बढि मेरो लागि मेरा सहकर्मीहरूको 30० वटा साथ औपचारिक ढंग बन्द INDEFINITELY। कम्पनीमा शून्य जवाफ थियो हाम्रो प्रश्नहरू को कुनै पनि, यसै गरी यो जान कती लामो जान्छ? को लागि? यस LAYOFF पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्दछ हाम्रो बाँच्ने तरिका। तपाइँ जान्नुहुन्छ, यो गाह्रो लाग्छ अब दुई आय प्राप्त गर्नुहोस्, तर अब ममाथि भरोसा राख्नको लागि योग्य हुन साझेदारी पूर्ण अनसेटिLIN छ। तपाईंलाई थाहा छ, तपाईं सोध्नुहोस् आफैलाई, हामी अब गइरहेका छौं खाना किन्नको लागि पर्याप्त छ? हामी भुक्तानी गर्न सक्षम भइरहेका छौं हाम्रो भाडा अन्तमा महिना? हामी सक्षम हुन गइरहेका छौं अफफोर्ड कार भुक्तानहरू, बीमा? कुनै पनि कर्मचारीलाई जुन त्यो हो ध्यान दिनुहोस् LAYOFFS, मेरो सल्लाह तपाइँ खुला र रूपमा हुनु पर्छ तपाईका रोजगारदाताहरूसँग नै आदर गर्नुहोस् POSSIBLE तिनीहरूलाई मार्गनिर्देशन दिनुहोस्। जसरी उनीहरुलाई सहयोग दिनुहोस् उनीहरूलाई आवश्यक रूपमा आवश्यक छ दिनको अन्त्यमा, यदि हामी बुझ्छौं कि तपाईं के हुनुहुन्छ यसका माध्यमबाट जाँदैछ, र हामी सबैलाई सोध्छौं फिर्ती त्यो हो जुन तपाईं बुझ्नुहुन्छ हामी के माध्यम बाट जाँदैछौं स्वागत छ। >> सबै द्वारा धेरै बन्धित यो र केहि खोज्दै क C्ग्रेस अन्तिम रूपमा प्रतिस्पर्धा त्यो $ २ ट्रिलियन आर्थिक उत्तेजक योजना। तिनीहरू प्राप्त गर्न दौडिरहेका छन् व्यवसायहरूलाई धेरै आवश्यक छ त्यो 500 भन्दा कम रोजगार कामदारहरू। अमेरिकाको MIL० मिलियन सानो क्याटरिO शपका व्यवसायहरू, वेब डिजाईन एफआईआरएम, बुकस्टोर र, हो, इभान आज्ञा क्लब्स। डेभन ड्वायर पत्ता लगायो कोरोनाभाइरस टोल लिदैछ ती जोहरु प्राथमिक उद्देश्यमा हामीलाई हाँसो बनाउनु हो। >> रिपोर्टर: स्ट्यान्ड-यूपी आज्ञा छ राष्ट्रको चुपचापमा जानुहोस् ठूला >> यो रमाईलो छैन। त्यो स्पष्ट हुनु हुँदैन। >> रिपोर्टर: महामारी नम्बर सानो व्यवसायहरुका लागि जोक ALSON JAFFE जस्तो छ जो भयो मानिसहरूलाई उनीहरूको सहयोगमा हाँसो उनको डीसी कमेडी क्लब मा तनाव करीव २० बर्षको लागि। >> यो स्वस्थ हुनको लागि पनि छैन कुल डर र आतंकमा, तपाइँ थाँहा छ, यो अधिक गर्न गइरहेको छ तपाईंलाई हानि। >> हो। >> भाइरस दुखमा गइरहेको छ तपाईं, तर त्यो महसुस गर्न गइरहेको छ तपाइँलाई पनि चोट पुर्‍याउनुहोस्। >> रिपोर्टर: NOVEL पछि कोरोनाभाइरस हिट, उनले रद्द गर्नुभयो अपकमिंग ऐक्टहरू, फिर्ती टिकहरू र उनको सबै 50 बाहिर कर्मचारीहरू, समावेश सहित हसबन्ड। >> हामी जान्दछौं तर म आउँदैछु JUST, तपाइँ जान्नुहुन्छ, यो गर्नुभयो र उहाँ भन, ठीक छ, यो पहिलो हो समय मैले यस महिना राखेँ, हो तपाईं जानुहुन्छ। तपाईलाई के हुन्छ कमेडी क्लब र विवाहमा काम गर्नुहोस् एक COMEDIAN। तिनीहरू जस्तै छन् - जुन मजाको थियो। SO म SAD थियो र त म हाँसे र तब म मन पराउँछु, सबै ठीक, हामी यसलाई मार्फत प्राप्त गर्दछौं। यो एक रातको भयो। यो भएको थियो - म मात्र - शब्द त्यो मसंग बोल्दै र भनिरहेछु होर्फिक छ। >> रिपोर्टर: धेरै अमेरिकी सानो व्यवसायिकहरू भन्छन् उनीहरू धेरै छन् बचाउको बारेमा चिन्तित। अनुभवहरू विश्वास मानेर ती डरहरू डरलाग्दो छ अहिले अमेरिकी अर्थव्यवस्था स्थिर गर्दै नि: शुल्क मा। >> यो संकट एक हो सबैभन्दा खराब चीजहरू जुन म सधैँ देखेको छु सानो कारोबार। >> रिपोर्टर: क्यारेन मिलहरू एलईडी अमेरिकी लघु व्यवसाय महान माध्यम बाट प्रशासन प्राप्ति र प्राप्ति। >> आईटी वास्तवमा टाढा बाहेक हामीले २०० IN मा भएको समस्या र यसको कारणले आधा हुन्छ मानिसहरू जो यस देशमा काम गर्छन् सानो वा सानो को लागी काम व्यवसाय। आधा हाम्रो नौकरी छ। र तिनीहरूले धेरै कम नगद छ BUFFERS। औसतमा, तिनीहरू २ 26 को बारेमा छन् दिनको क्यास >> त्यसैले यो वास्तवमै एक हो - यो बाँच्नको लागि वास्तवमै एक दौड हो। >> बिल्कुल। जब तपाईं नकद बाहिर भाग्नु हुन्छ सानो व्यापारको रूपमा, तपाईं हुनुहुन्छ मरेको। >> रिपोर्टर: क्यास क्रन्च WORRIES ADAM, एक प्रयोग गरिएको बुकस्टोर DC मा मालिक उनले केवल एउटा प्रमुख पूर्ण गरे उनको पसल र यसको नविकरण सानो रिजर्भमा बचत गर्दै। >> मान्छेहरू आउँदैछन् स्पेसको लागि आवश्यक छ स्वास्थ्य र सुरक्षा, तर यो नाटकीय रूपमा बन्द छ। >> नाटक कसरी छ व्यवसाय बन्द ड्रप? %०%? %०%? >> म सम्भवतः बन्द गर्न चाहन्छु % 75%। >> रिपोर्टर: उनले चारवटा बन्द छ यस महिनालाई रोजगार दिनुहोस्। उहाँ सबै गरिरहनु भएको छ तीन अन्य पेरलमा। उनी लिने बारे अनन्त छन् नयाँ Wण संग अधिक ,ण, तर भन्छन् कि नयाँ प्रोत्साहन योजना मद्दत। >> आईटी जस्तो लाग्न सक्छ हुन्छन्, जुन मलाई लाग्छ महत्त्वपूर्ण तिनीहरू प्राप्त गर्दै छोटा प्रविधिको सानो व्यवसायहरू। >> रिपोर्टर: कONG्ग्रेस छ SE AN$० भन्दा बढी पठाउनको लागि अनुभवी बिलियन आपातकालीन Lण मा लघु व्यवसायिकहरू र A सँग प्रमुख PERK। तिनीहरू पछाडि भुक्तान गर्न सक्दैनन् सरकार यदि तिनीहरू पैसा प्रयोग गर्छन् भाडा तिर्न वा तिनीहरूका कामदारहरूलाई। >> मँ लिन्छु कि कुनै पनि दिन सम्झौता हामीलाई ती कार्यहरू गर्न अनुमति दिनुहोस् Bण लिनेहरू तिनीहरू हुनेछन् क्षमा गर्नुहोस्। >> रिपोर्टर: उनी मध्ये एक छ केवल महिला-स्वामित्व डिस्टिलियर्स भित्र विश्व उनी उनको शिल्प भोड्का र बनाउँछिन् को छायाँ मा BOBON अमेरिकी क्यापिटल जहाँ उनले प्रयोग गरे सेनाको प्रमुख को रूप मा काम कONG्ग्रेसवोमन गाभी गिफर्डहरू। >> क्राइसिस मैनेजमेन्ट मेरो भयो जीवनको कलिंग र, तपाईलाई थाहा छ, स्ट्याइ C कलम निश्चित रूपमा हुन्छ महत्वपूर्ण कारक। कसरी मोमन्तेहरू फेला पार्ने आउट स्पष्ट रूपमा अर्को - तर प्रश्न छोटो आत्मा हो उत्पादकहरू हामीलाई बचाउन मनपराउँछन्? अवलोकन गर्न सकिन्छ। >> रिपोर्टर: अब बचाउनका लागि मतलब हात SANITIZER बनाउने। >> हामी अद्वितीय स्थानमा छन् एक हुनको लागि हातमा छ मुख्य बनाउने हातहरूमा सफा गर्नुहोस्। >> रिपोर्टर: डिस्टिलरी सानो बोल्डहरू बन्द आउट गर्दै होममेड जेल, भर्नुहोस् A 1,000-गैलन अर्डर यो बस डीसी सरकार बाट हप्ता पुलिस र ईएमएस को लागी। >> मानिसहरू तलतिर जान्छन् नि: शुल्क र भाइरस फैलनुहोस्, त्यस्तै म एउटा सानो व्यापारी हुँ जो हो SUFFERING। म धेरै हुन, धेरै खुसी छु सुनिश्चित गर्नुहोस् कि हामी जारी राख्छौं हामी यसलाई मार्दैनौं तब सम्म बन्द गर्नुहोस् THING। >> रिपोर्टर: सेतो घर र केही अर्थशास्त्रीहरू धकेल्छन् व्यवसाय बन्द रूप मा लिफ्ट जति सक्दो चाडो। राष्ट्रपति ट्रम्प लक्ष्य सेट ईस्टरको, अप्रिल १२, हप्ता धेरै सार्वजनिक स्वास्थ्य को अहेड मद्दतहरू सुरक्षित हुन सक्छ। >> के तपाईं समर्थन गर्नुहुन्छ? >> मँ केही भन्न चाहान्दिन। यो सुरक्षित छैन। म चाहन्न - त्यो म हैन मेरो लागि उत्तरदायी सोच्नुहोस् A को रूपमा व्यवसायिक। मलाई थाहा छैन त्यो ट्रम्पको गइरहेको छ त्यो जान्न। म सुन्न चाहन्छु सुन्नुहोस् - मँ डीसी बाट RATHER सुन्न म मुख्य कुरा सुन्न चाहन्छु BOWSER र अन्य DC स्वास्थ्य औपचारिकहरु म उसलाई चाहन्थें। >> के तपाईं यस आतंकमा हेर्दै हुनुहुन्छ? त्यो तपाईं जानुहुन्छ राम्रोको लागि बन्द गर्नुहोस्? >> त्यसोभए, मँ धेरै बाँच्न कोशिस गर्दैछु सकारात्मक म पावरमा विश्वास गर्दछु COMEDY आईटी अवलोकन गर्न निराश छ पूर्ण खाली, तर म त्यो जान्छु हामी सधैं यो हुदैनौं। >> रिपोर्टर: त्यो आत्मा D सँग DETERMINATION A सम्मिलित गरियो सरकारबाट वित्तीय बढावा, ख्यातिप्राप्त ऑप्टिमिज्म को लागी खर्च। एक वित्तीय शरीर झुकाव छोड्नुहोस् भाइरसबाट, लघु व्यवसायहरू बचाउन र जारी राख्न सक्नुहुन्छ फलफूल >> मलाई थाहा छ हामी भर्न सकौं मान्छेहरू फेरि हुन चाहन्छन् यहाँ, त्यो हाँस्न चाहन्छ कि, त्यो हँसिनु पर्छ, र म अगाडि हेर्छु त्यो दिन >> मलाई पनि। >> र आशावादी रूपमा अर्को पछि हो। >> मलाई पनि। >> रिपोर्टर: एबीसी समाचार लाइभ को लागी, म वासनिंगमा डेभन ड्वायर हुँ। >> हो, हामी सबै सर्तमा पर्छौं राम्रो हाँसो प्रयोग गर्नुहोस्। हाम्रो लागी धन्यवाद। हामी अझ धेरै प्राप्त गर्न सक्दछौं INTO। >>> यो अर्को होरिफिक भयो बढि इU्गालीसँग दिन मरेको। आज हामी डाक्टरहरूसँग बोल्छौं ITALY मा। के उनीहरूको अनुहार। के के पाठहरु को लागी उनीहरु छन् यहाँ उनीहरुका सहयोगीहरु AMERICA? >>> त्यहाँ धेरै छ MISINFORMATION यस दौरान OUTBREAK। हामी BREAK तथ्यबाट तल झर्दछौं FICTION। >>> तर पहिलो, हाम्रो TWEET को DAY एप्पलको ठूलो संख्या। >> हामी तपाईंलाई यो बताउन चाहन्छौं बिहान कि एप्पलको स्रोत छ, प्रोक्वार्ड गरिएको छ र १० हो मिलियन मेडिकलमा मास्क गर्दछ संयुक्त राज्य मा कम्युनिटी। >>> हेलो, सबै। म इलिजाबेथ मेजिया हुँ। म एक सर्भर हुँ र भित्र छु लगभग आठ को लागी कम्पनी बर्ष मैले पाठ सन्देश प्राप्त गर्‍यो प्रबन्धक कि रेस्टोरन्ट बन्द हुनेछ। अर्को आउन नभुल्नुहोस् काम घरमै बस। सुरक्षित रहनुहोस्। एचआर हामीलाई अमेरिका जान्न दिनुहोस् रेगर्डिंग LAYOFFS, काम गर्न पछाडि जानुहोस्, SANITIZE, केही, तर यो छ चार दिन भयो। मलाई उत्तरहरू चाहिन्छ। मलाई थाहा छ कि म गइरहेको छु ठीक छ र मेरो बच्चाहरू भइहाल्छ। यदि हामी बिरामी हौं भने अब, हामी स्वास्थ्य छैन बीमा र हामीसँग छैन पैसा ब्यागहरू, स्वास्थ्य बीमा, हामीलाई आवश्यक छ IT >> धेरै धेरै अमेरिकी स्ट्रगलिंग द्वारा अनियमित कारणले COVID-19, र केहि प्रतीक्षा गर्दै कांग्रेसबाट विश्वास गर्नुहोस्। बिलको विवरणहरू हुन् अझै IRONED आउट भइरहेको छ, यो हुनेछ ठूलो हुनुहोस्। त्यसोभए हामी के हेर्छौं नम्बरहरू द्वारा जान्नुहोस्। नजिकैको TR २ ट्रिलिजन सम्बन्ध प्याकेज पछाडि ठूलो हुनेछ । १.4 ट्रिलिजन विच्छेदन पूरा को लागी योजना २०२० मा फेडरल सरकार। यो $ 7$7 भन्दा बढि हो बिलियन स्टिमूलस प्लान पास २०० THE लाई महान लडाई गर्न RECESSION। वर्तमान बिलको केन्द्र प्रत्यक्ष AY ०% को भुक्तानीहरू ER १,२०० को साथ अमेरिकी टेक्सपेयरहरू प्रत्येक व्यक्ति जो कमाउँछन् $ 75,000 भन्दा कम वा4२4०० को लागि CO १,000,००० सम्म कमाईको एक जोडी। र $ 500 सम्म बच्चाहरू थप्नेछ अरू पनि दिनुहोस्। । २IL बिलियन एक मा जान्छ नाटकको विस्तार अनपेक्षित लाभ, अतिरिक्त १ UN हप्ता द्वारा वर्तमान अनियमितता बढावा दिएका लाभहरू। अधिक $ B$ बिलियन जान्छ सानोको लागि आपातकालीन Oणहरू व्यवसायहरू र $ 425 बिल बिल फन्ड गर्नुहोस् र ठूलोमा नगद दिनुहोस् कम्पनीहरू, एएन समावेश गर्दै थप $ 75 बिलियनको लागि उद्योगहरू HIT HARDEST, एयरलाइन र होटलहरू समावेश गर्दै कडा सर्तहरूको साथमा अवलोकन COMPARISON द्वारा, २०० A बेलआउट अमेरिकन अटो उद्योगको पछिल्लोमा $ B० बिलियनको बारेमा खर्च गर्नुहोस् सामान्यतया पैसा तिर्ने को लागि सरकार। हामी सुरक्षित रहनको लागि सुरक्षित रहनेछौं बिलको रूपमा भर्खरको विवरणहरू फाइनलाइज्ड हुन्छ। >>> र हामी अझै धेरै गर्छौं प्राप्त गर्न। अरु क्राइज इमरजेन्सी। P 77 मानिसहरू यसमा फेलिनेछन् FLU-LIKE SYMPTOMS ANDE OFF दक्षिण अमेरिका को कस्ट, फ्लोरिडा गर्नका लागि यसको मार्ग बनाउँदै। जहाजले केहि पनि गर्दैन COVID-१ T परीक्षा बोर्डमा। >>> र क्रसिकल मेडिकल इटालीमा कम आपूर्तिहरू। हामी केहि निर्णयहरु सुन्नेछौं डक्टरहरु त्यहाँ बनाउन को लागी तिनीहरूले आफ्नो वीर लडाई राख्नुहोस् जीवित बचत गर्न। >>> तर पहिले, यहाँ केहि हुन् ट्रेन्डिंग हेडलाईनहरू सक्रिय छन् ABCNEWS.COM। ♪♪ >>> सेनेट सहायता गर्न कार्य गर्दछ यस देशका मानिसहरु यस आँधीबेहरी। >>> क्यापिटोल हिलमा, सेनेट नेताहरू क TO्ग्रेसका लागि चिन्तित छैनन् र व्हाइट हाउस एक पुग्यो एक असीमित ON २ मा सम्झौता ट्रेलि SP प्याकेज पेज खर्च गर्दछ कामदारहरूलाई विश्वास प्रस्ताव गर्नुहोस् व्यवसायिक अन्तर्गत SUPFERING गोप्य १ P प्यान्डिक। >> यो प्रस्ताव, अनपेक्षित बीमामा बीमा हुनेछ सबैभन्दा ठूलो विस्तार अनपेक्षित लाभहरू DECADES। सामाजिक सुरक्षा नेट वाइड लाखौं पकड्न उत्साह दिनुहोस् अमेरिकी कामदारहरू जो हुन् अनपेक्षित वर्चुअल ओभरनेइट। >> त्यो मार्केट अपको लागि हो दोस्रो दृढ दिन, तर लामाकर्मीहरू त्यहाँ जाँदैछन् ड्राफ्ट र रिपोर्टर गर्दै छन् एक खण्डमा भाषा। >> यो बिल तपाईंलाई अधिक तिर्दैन यदि तपाइँ हुनुहुन्थ्यो भने काम गर्न काम गर्दै >> कोभिड १ P प्यान्डिक यसका अग्रि बढाएर जारी राख्नुहोस् एक्रोस अमेरिका र पछाडि। सब भन्दा चाँडो सूचना दर राज्य मा छ लुइसियाना >> हामीमा छौं कि यात्रा धेरै समस्याग्रस्त छ। हामीसँग ग्रोथ दर क्षमता देखीरहेको छ वितरण स्वास्थ्य देखभाल। >> स्वास्थ्य अधिकारीहरु पनि सशस्त्र नयाँमा प्रभाव दर यार्क सिटी। न्यू योर्क, को एपीसेन्टर CONONAVIRUS OUTBREAK, ACCOUNTS यसको आधा भन्दा बढीको लागि राष्ट्रको ,000०,००० केस। राज्य सरकार एन्ड्रयू कुमो भन्छन् उनीका हस्ताक्षरहरू, सोच्नुहोस्, त्यो दृढ अडानमा गृह उपायहरू सुरू हुँदैछन् काम >> न्यू योर्कको मेडिकल परिक्षक टेम्पोररी सेट अप शुरू भयो MANGUES MANHATTAN, TEMPORARY टेन्ट्स र रेफ्रिजरेसन ट्रक, यदि आवश्यक छ भने। न्यू योर्क 30०,००० पुष्टि भएको छ कोरोनाभाइरस केसहरू। अन्य तथ्या AL्कहरू पनि यस्तै छन् परीक्षण विस्तार रूपमा उठ्नुहोस्। >>> CR 77 मानिस बोर्डमा एक क्रस फ्लोरिडा क्षेत्रका लागि शिप हेडिंग फ्लू-जस्तो लक्षणहरूसँग बिरामी छ। >> PASSENGERS तिनीहरू भन्छन् जहाजबाहेक अरू धेरै छैन दस दिन तिनीहरूको भोजन प्रत्यक्ष वितरण गरियो तिनीहरूको रूमहरूमा। उत्तरमा धेरै प्रतीक्षा गर्दै आउने दिनहरू। >> तिनीहरूको 70 को दशकमा र धेरै मानिसहरू यो शिपमा s० दशक। >>> -१-वर्ष पुरानो प्रिन्स चार्ल्स, ब्रिटिश सिंहासनको उत्तराधिकारी चिन्ता लिनु भयो उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ COVID-19 को लागी। ऊ मिलको प्रदर्शन गर्दैछ SYMPTOMS, तर अरू नै रहन्छ राम्रो स्वास्थ्य र उहाँ हुनुहुन्छ घर बाट काम गर्दै अन्तिम दिनहरू प्रयोगको रूपमा। एक स्पोकेस्मैन एडिंग प्रिन्स चार्ल्स 'वाइफ क्यामिला, द CORNWALL को खरीद, पनि छ परीक्षण गरिएको छ तर छैन भाइरस। >> ट्रयाकि SE विभिन्न तूफानहरू। कन्फर्मेड EF-1 टच डाउन मिसिसिपी र इलिनोइस। यी बाहिरबाट समाचारहरू हुन् TUPELO, MISSISSIPPI >> पछाडि स्वागत छ।3683 आज इटलीमा हराउँछ एक्लो चिकित्सक र मा नैउर्स फोर्टफ्रन्ट एक भरपर्दो लडाई, तिनीहरूको लाइभ लाइनमा राख्ने को बचत गर्न को लागी को PATIENTS कि उहाँ बाट आउँछ ढोका। म्याग्गी रुली यो रिपोर्ट छ। >> रिपोर्टर: विगत केहीका लागि हप्ता यो भेटियो इटाली हराइरहेको थियो युद्ध अदृष्य शत्रु संग, तर पछिल्ला तीन दिनहरूमा, इटालीका रिपोर्ट गरिएका केसहरू छन् खाली। आशाको लागि एक ग्लिमर परिस्थिति सधैंको लागि डायरेक्ट छ। अधिक 70०,००० संक्रमित, बढी 7,000 मृत। यो एक अन्तर्राष्ट्रिय लिन्छ EFFORT सुरु गर्न सुरु गर्नुहोस् ITALY का केसहरू। चाइनीज उनीहरूको भेन्टिलेटरहरू। रसियनहरूले औषधि निकाले र आपूर्ति। अमेरिकी पोस्ट गरियो फ्रन्ट लाइनहरु। >> हामी केवल समाप्त महिलाको युद्ध, दिदै बिहानका औषधिहरू। हामी उनीहरूलाई जान दिन सक्षम छैनौं का लक्षणहरू सम्म कोरोनाभाइरस समाधान भयो। त्यसोभए उनीहरू यहाँ छन् केहि समय छोड्नुहोस्। जसको लागि चुनौती दिन सकिन्छ उनीहरु। अब हामी भित्र पप हुँदै जान्छौं आईसीयू र तिनीहरूलाई जाँच गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् उनीहरू के गर्दै छन् र कस्तो प्रकारको छन् तिनीहरूलाई आवश्यक छ। >> रिपोर्टर: एक प्रतिस्पर्धी जाति यसका लागि राख्नुहोस् यस लडाईको फोरफ्रन्ट। हरेक मिनेट क्रिटिकल। >> अनुवादक: म त्यो भन्न चाहन्छु हामी हाम्रो अन्त्यमा छौं प्रतिबन्ध हामी सफ्टवेयर गर्दैनौं संसाधन र विशेष स्टाफ सबैबाट अपार्टमेन्ट बनाउनुहोस् ELSE, अब कर्मचारी छन् सिक्न सुरु गर्नुहोस् >> रिपोर्टर: र आपूर्ति संग सधै कम चलिरहेको, सबै निर्णय सल्लाह। यस केसमा, आईटीको मतलब छ अर्डरमा आधारभूत आवश्यकताहरू सुरक्षित गर्दै जीवित बचत गर्न। >> हरेक अस्पताल रासन छ संरक्षणको यी दिनहरूमा, जस्तै मुखौटा, को लागी आवरणहरू जूत्ता। हामी सक्दैनौं, उदाहरणका लागि, DURING हाम्रो शिफ्ट शौचालयमा जानुहोस् किनकि यसले परिवर्तन गर्न सक्दछ र फेरि परिवर्तन गर्न। र यो म कसरी भन्न सक्छु संरक्षणको ठूलो। >> रिपोर्टर: मद्दत दिनुहोस् अरूबाट, यो अझै पनी छैन अत्यन्तै। इटाली पासनर शिप सार्दै एक फ्लोटिंग अस्पतालमा। >> हामी खासै ठाउँहरू पाउँदैनौं सबैका लागि। >> रिपोर्टर: तर यो धेरै छ स्थानहरु जुन बिरामीको ख्याल राख्छन् त्यो को लागी बेड हुन को लागी जानकारी। धेरैको जीवन लिँदै राष्ट्रका क्यारेक्टरहरू। इटालीमा, कम्तिमा DO० डाक्टरहरू मरिसकेपछि आउनुहोस् BREAK। औपचारिक चेतावनी दिईएको थियो A समयको मामला स्प्यान से तिनीहरूको नम्बर स्काइरोकेट, पनि। र तिनीहरू छन्। देश रिपोर्टिST एस्टाउन्डि। संख्या त्याग्नुहोस् लक गर्नुहोस्। करीव ,000०,००० केस, ती मध्येका स्वास्थ्य देखभाल कामदारहरूको हजारौं प्रभावित >> अनुवादक: जब म त्यो गर्छु लिनको १२ घण्टाको साथ तिनीहरूले मलाई कल गर्दै थिए जाँच गर्नुहोस्, म थाहा पाउनुहोस् केहि सही थिएन र त्यो म सकारात्मक थियो। >> रिपोर्टर: यो भिडियो सामाजिक मीडियामा सर्कलिंग, यसको फर्शमा धैर्यताहरू अस्पताल, केहि हृदय कगिंग। FIELD HSPSPALALS कि मन पर्छ तिनीहरू अब युद्ध क्षेत्र मा सम्बन्धित A साधारण हस्ताक्षर त्यहाँ, पनि। र युरोप तयारी को लागी खराब आउन। इटाली प्रमाण हो कि यो हो तात्कालिक त्यो असुविधा देशहरूले अझ बढी प्राप्त गर्दछ परीक्षण, थप बेडहरू, अधिक डक्टरहरु, अधिक उनीहरु लाई आपूर्ति उस्तै उस्तै FATE र उही समान हृदयको काम हेर्नुहोस् कास्केटका दृश्यहरू चुपचाप बसिरहेका छन् आराम गर्नु लाई पल्टेको। >> म्याग्गी रुली हामीलाई अब सम्मिलित हुन्छ। MAGGIE, JUST AWFUL SITUATION त्यहाँ र आराम गर्न चेतावनी संसारका डाक्टरहरुका लागि फ्रन्ट लाइनहरु। अब पुनःप्रदर्शनमा, उनीहरूले सोच्नुहोस् तिनीहरूले केहि गर्न सकेन थप तिनीहरूलाई तयार पार्नुहोस्? >> रिपोर्टर: ये, लाइन, तपाई मलाई थाहा छ, म यी केहि संग स्पोकु आज सुरुका चिकित्सकहरू। दुई मिलियन अस्पताल बाहिर त्यो यत्ति कठोर छ। उनीहरूले मलाई पनि भने कुरा, तिनीहरू संग अधिक थियो समय तयार गर्न, AEAD प्राप्त गर्न यो तिनीहरूले थप बेडहरू चाहिन्छ। उनीहरूले बढि वेंटलिटरहरू चाहिन्छ। उनीहरूले त्यो व्यक्तिको बढी चाहिन्छ संरक्षण उपकरण उनीहरूले बढि डाक्टरहरू चाहिन्छ। अधिक तालिम पाएको नुरसहरू। सबै भन्दा बढी। तिनीहरू केवल थकित छन्। वास्तवमै मेरो साथ के चिप्लन्छ, तपाई थाहा छ, अमेरिकामा हेर्दै, EUROPE को आराममा हेर्दै, तपाईं तयारी गर्न समय छ, यसमा पुग्नको लागि समय। तपाइँले अझ बढी भवन बनाउनु पर्छ अस्पताल भर्खरै। तपाईं अधिक प्राप्त गर्न पर्छ यी आईसीयू बेडहरू। तपाईले अरु धेरै पाउनुहुन्छ भेन्टिलियर्स, अधिक प्रशिक्षण नर्स त्यसोभए उनीहरूले वास्तवमै क्षति पुर्‍यायो मुख्य बुँदा, अब समय छ आईटी तयारी गर्न। यो अझ ढिलो छैन। तर यो त्यहाँ भइरहेको छ। यदि तपाईं यी चीजहरू गर्नुहुन्न भने, तपाईं सम्भवतः समाप्त गर्न गइरहनु भएको छ इटाली जस्तै। टुअग टु हियर, लाइन। >> सुन्न टुग गर्नुहोस्, तर हामीमा शब्दहरू दिनुहोस् सम्भावना सुन्नु आवश्यक छ तयार पार्नु। म्याग्जी, स्विच गियर। हामी सुन्दा एउटा चेतावनी दिइरह्यौं विश्व स्वास्थ्य संगठनको बारेमा देशहरू सम्भावित पुन: खोल्दै अति नै पहिले। >> रिपोर्टर: यो छ चाखलाग्दो, LINSEY। विश्व स्वास्थ्य संगठन आउँदै औंल्याउनको लागि वास्तवमा क्रमबद्ध गर्नुहोस् देशहरूमा फिंगर उनीहरूले भनिरहेका छन् प्रारम्भिक खोल्न चाहन्छ। सम्झाउने देशहरू यो सहमति जनाउँदछन् सम्भावित खतरनाक हुनुहोस्। अधिक मानिसहरूलाई प्रभाव पार्नुहोस्। यो तिनीहरूको लागि सहयोगी हुनेछैन विश्व यदि देशहरू खोल्न सुरु हुन्छ UP तिनीहरूले वास्तवमा घरलाई चोट पुर्‍याए औंल्याउनुहोस् जुन देशहरूलाई चाहिन्छ बन्द रहनुहोस्, तिनीहरूलाई आवश्यक छ अभ्यास सामाजिक छुट, अभ्यास स्वयं-अलग। यो उनीहरूको अनुरूप हो हामी केवल सुरु गर्न गइरहेका छौं यो भाइरस पिट्नुहोस्। >> सबै सही। अमेरिकामा लन्डनमा म्याग्गी रुली। धन्यवाद, MAGGIE। >>> र बढेको समयको साथ धेरै मानिस हामीसँग छन्, तिमी मसँगै छौ थप समय खर्च गर्नुहोस् फेसबुक, ट्वीटर र यूट्यूब, तपाईंको फीडमा मनपराउने मानिसहरू छन् कोरोनाभाइरसको बारेमा पोष्ट गर्दै, तर तपाईं कसरी तथ्य छुट्याउनुहुन्छ FROM FICTION? हाम्रो डायना एमए डायन मास >> ईभन कसरी जाँच गर्न कोरोनाभाइरस। उनीहरूको समस्या धेरै सत्य छैन। यो मौलिक पोष्ट दावी पानी पिए १ M मिनेट तपाईंको भित्र भाइरस फ्ल्यास हुनेछ STOMACH, जहाँ एसिड मार्नेछ IT सत्य -- >> त्यसो भए, त्यो मान्यता वास्तवमै गर्दैन प्यान आउट आउट यो IT को अधिक A को लागी जवाफ दिनुहोस् RESPIRATORY समस्या। >> अन्य भाइरल पोष्ट दाबी विशेष पानी पिए भाइरसको बिरूद्ध प्रभावकारी छ। >> मलाई लाग्छ कि मानिसहरु आउँछन् यो सम्भावनाको कारणले अपग्रेड गर्नुहोस् त्यहाँ केहि कुराकानी भएको छ भाइरस प्रतिलिपि अधिकार भित्र हाम्रो थ्रोट्स। तर फेरि, यो भाइरस एक हो RESPIRATORY भाइरस। >> पिउने पानीको स्थापना गर्नुहोस्, यो पोष्ट गलत दाबी ग्यारेजि। नुन पानी वा VINEGAR संग भाइरसको ELIMINATES। >> सर्ट उत्तर हैन, तर म मानिसहरू जो फोर-फोर छन् थ्रोट्स, जुन एउटा लक्षण हुन सक्छ COVID-19 भाइरस को, खोज्नुहोस् यो मद्दतको लागी उनीहरुको लागी थ्रोट्स। यदि त्यो केस हो भने, आईटीको लागि जानुहोस्। >> केहि YUUTUBE SUGGEST मा चमत्कारिक खानु पिउने समाधान वा MMS जो हो जरूरी क्लोरीन डायऑक्साइड। >> मार्न इयान डायऑक्साइड हत्याहरू हरेक पठान, सबै भाइरस, कोरोनाभाइरस समावेश गर्दै। >> तर FDA WARNS INGESTING यो उत्पादन पियक्कड जस्तो छ ब्लीच र सम्भाव्य छ जीवन-धम्की दिने पक्ष प्रभावहरू। तपाइँ के चाहानुहुन्छ यदि तपाइँलाई थाहा छ भाइरस छ? एउटा सबैभन्दा धेरै मन्त्रीहरू तपाईंले लिनुपर्दछ एक ड्राई कग र कुनै भाग्यमान छैन। तर हाम्रो आफ्नै KAYLEE हार्टंग जो भाइरस को लागी सकारात्मक परीक्षण गरिएको स्पष्ट छ कि सत्य छैन। >> आईटी वास्तवमै सबैको साथ शुरू हुन्छ ए भाग्यमानी नाक एक हप्ता अघि, र त्यो म पछि चार दिन थियो हप्ताको अवधिमा फर्कियो स्याटल मेरो लागि के नोटिबल थियो म लक्षणहरू थिएनन् यहाँ नजिकै एक संगठित भएको थियो कोरोनाभाइरस संग। म कुनै प्रकारको AAV गर्दै थियो ड्राई कउ। मसँग कुनै छोटो कुरा थिएन BREATH म कुनै दबाब महसुस गर्दिन छाती। त्यसोभए पहिले मेरो लागि सहज थियो सोच्न यो केही होईन। यो केहि हुनु हुँदैन बारेमा चिन्तित। >> एक आपातकालीन भौतिक चिकित्सकको रूपमा, मैले देखेको छु मानिसहरूसँग सम्पूर्ण प्रकारका लक्षणहरू, समावेश सहित SELL को अभाव, DARRHEA, त्यसैले छोटो उत्तर छ, प्रत्येक व्यक्ति सम्भवतः भिन्नता छ COVID-19 भाइरस को प्रतीक, धेरै जसो हुन सक्छ मिल >> अर्को पोष्ट झूटा दाबी तपाईं प्रभाव पार्न सक्नुहुन्न यदि तपाईं सक्नुहुन्छ अझ बढीको लागि तपाईंको ब्रिटो होल्ड गर्नुहोस् दस कगडी बिना दोस्रो। >> केवल केही देशहरू हुन् एक जोडको साथ प्रस्तुत गर्दै। म मान्छे गर्न चाहन्न तिनीहरूको लामो पकड। यदि तपाईंले फेला पार्नुभयो लक्षणहरू SIMLAR एक FLU वा COLD, मा यस समयमा यो पोइन्ट, केवल सहायक तपाईलाई कभिड १ 19 र छ आफूलाई अलग राख्नुहोस्। >> त्यसो त धेरै जानकारी संग बाहिर, कसरी तपाईं स्पट एक नक्कली? पहिलो ड्राफ्ट समाचारमा हाम्रा पार्टनरहरू कसरी आफैलाई सोध्नुहोस् सन्देश तपाईंलाई महसुस गर्छ? के यो तपाईंलाई खरीद गर्न चाहन्छ केहि, मनपर्‍यो, यस बारे साझेदारी गर्नुहोस् सदस्यता लिने हो? यो तपाइँलाई डर वा घृणा बनाउँछ केही या तपाईं मजा लाग्छ वा शक गर्दै? यी प्रत्येकको रूपमा ए सेवा गर्न सकिन्छ चेतावनी दिँदै कि तपाईलाई हेर्दै हुनुहुन्छ MISINFORMATION, र WHENEVER मा POSSIBLE, तपाईंको जानकारी A बाट प्राप्त गर्नुहोस् Vedted मेडिकल स्रोत लाई मन पर्छ सीडीसी, विश्व स्वास्थ्य संगठन वा राष्ट्रीय संस्थाहरूको स्वास्थ्य >> एउटा अधिक तपाई गर्न सक्नुहुन्छ को आपूर्ति गरिएको स्रोत जाँच गर्नुहोस् जानकारी। पोष्टहरू मध्ये एक हामी मन्टेनेशन गर्दछौं STANFORD बाट आउनका लागि दावी अस्पताल, तर तपाईं जानुहुन्छ भने स्ट्यानफोर्डको फेसबुक पृष्ठ, तपाइँ यो सन्देश हेर्नुहोस्, पोष्ट गर्नुभयो स्टानफोर्ड मेडिसिनबाट आउँदैन। त्यसोभए यदि तपाईंसँग प्रश्नहरू छन् COVID-१,, जानुहोस् कडा A रिपोर्टेबल स्रोत वा आफैलाई सोध्नुहोस् डाक्टर LINSEY? >> सुपर सहयोगी सल्लाहहरु। हामी तपाईंलाई धन्यवाद, DIANE। जब हामी फर्कन्छौं, एउटा आवश्यक व्यवसाय किपिंग पीपल फेड खाद्य सेवा उद्योग रीलहरू। >>> यी केहि पागल समयहरू छन्, तपाईंलाई थाहा छ, रेस्टोरन्ट उद्योग सबैभन्दा बढी द्वारा प्रभावित छ त्यो, र म तपाईंलाई भन्न सक्छु कि FIRSTHAND म लगभग AY० को बिदा गर्न छु एक दिनमा रोजगार। र तिनीहरूबाट एक्रोस सिट गर्दै, I नसोच्नुहोस् म कहिले क्रिसित छु मेरो सम्पूर्ण जीवनमा धेरै। तपाईंलाई थाहा छ, मानिसहरूलाई बताउनुहोस् तपाईं उनीहरूको साथ राख्दै हुनुहुन्छ अनौठो जब तिनीहरू हुन् आउने पछाडि केहि छ कि म कुनै पनि गर्न चाहनुहुन्न। हामीसँग ID भन्दा बाहिर आधिकारिक छ विगतमा लाखौ कर्मचारीहरू हप्ता, सोच्न को लागी पागल हो बारेमा। रेस्टोरन्टहरू यस्तो अवस्थामा अपरेट गर्दछन् सानो रेजर-थिन मार्जिनहरू कुनै पनि आउन नसक्ने दुई हप्ता मोस्टका लागि विकास गर्दै। यो के हो मलाई साँच्चिकै स्क्यारिंग गर्न सही अब भविष्य छ, तपाईं थाहा? मलाई लाग्छ कि मानिसहरू जाँदैछन् एक धेरै राम्रो, आउनुहोस् बढी SUF-SUFFICIENT। तपाईंलाई थाहा छ, यी चीजहरू जुन हामी हौं मान्छे तिर्न को लागी, को लागी यो लन्ड्री वा कपालहरू, हामी हौं अब कसरी गर्ने सिक्ने हाम्रो सेवाहरू, र ती हुन् केहि सकारात्मक अवस्था बाट लिनुहोस् यो तर हामी सँगै आउन आवश्यक छ एक मानिस र हुन >>> हामी कसरी धेरै संकुचित छौं हामी हाम्रो बिल भुक्तान गर्न गइरहेका छौं र हाम्रो स्वास्थ्य बीमा गुमाउँछ। वास्तवमा, हामी यसका साथ मोलतोल गर्दैछौं कम्पनी हामी कसरी गइरहेका छौं हाम्रो स्वास्थ्य बीमा राख्नुहोस्, केहि हुँदैन जुन कहिले पनि हुँदैन खुशी हुँदैछ। यो वास्तवमै SAD छ। यो वास्तवमै धेरै भन्दा धेरै छ सेवा र वर्ष को रेस्टोरन्ट - सर्वश्रेष्ठ मध्ये एक शहरमा रेस्टोरन्टहरू, तपाईं थाहा छ, यो टाँसको मात्र प्रकारको छ तपाइँको पछाडि तपाइँ, तपाइँलाई थाहा छ? यो छुने प्रकारको हो। म उनीहरूको जवाफको लागि कुर्दै छु। र म आशा गर्छु केहि राम्रो आउँछ यो बाहिर। म नयाँ कम्पनीहरूलाई लाग्छ अमेरिकामा मद्दत गर्नेछ, त्यसैले म आशा गर्दछु तिनीहरू माथि उठ्छन् र अगाडि आउँछन् हाम्रो लागि। >> जब हामी आवश्यक बारे सुन्न सक्छौं काम गर्नेहरू जो उनीहरुमा छन यी ईमर्जन्सीको क्रममा रोजगारहरू अर्डरहरू, हामी सोच्दछौं चिकित्सक र पुलिस अफिसहरू, तर खाना खानु भन्दा पहिले के गर्ने? Lauren ACEA एक व्यवसाय चलाउँछ आवश्यक कामदारहरू को हुन् मान्छे फेड राख्नु। एकचोटी हेर्नु। >> नमस्ते, म फाउन्डर र सीईओ हुँ नि: शुल्क र झुकावको, एक तयार खाना बनाउने कम्पनी EAT। यस समयमा DURING, यो एकदम हो केवल हामीलाई नभनको लागि आयात गर्नुहोस् हाम्रो सुरक्षा पक्का गर्नुहोस् EMPLOYEES BUT ALLO ENSures IN हाम्रो उत्पादनहरूको सुरक्षा जुन हामी गर्छौं हाम्रो ग्राहकहरु लाई वितरण गर्दै छन्। हामी एक आवश्यक व्यवसाय हो, त्यसोभए यो समयमा हामी लिँदै छौं त्यो धेरै गम्भीर कुरा हो। हामी धेरै हौं, धेरै सुन्दर हामी छौं भनेर स्थिति मा रहनुहोस् एक आवश्यक व्यवसाय हुनुमा। समुदायको साथ, हामी गर्छौं धेरै अन्य व्यवसायहरू छन् र कम्पनीहरूलाई चाहिन्छ तिनीहरूको ढोका बन्द गर्न। र त्यहाँ धेरै मानिसहरू छन् त्यो रोजगारको आवश्यकता छ। भनिएको छ साथ, हामी छौं हेयरिंग। यी कठिन समयमा, हामी को लागी यहाँ हुन अमेरिकी जनता र हामी गर्छौं हाम्रो उत्तम सुनिश्चित गर्न हामी के हौं बाहिर पुटिंग गर्दै छन् सुरक्षित छ र त्यो हामी पुनःनिर्माण गर्दैछौं सबैको सुरक्षा। धन्यवाद। >> र लरेन अमेरिका बस्दछ। >> तपाइँलाई मेरो लागी धन्यवाद। >> विस्थापित धेरै उद्योग कानून पाउँदैछन् तपाईंको कम्पनी बन्द छ। तपाईले धेरै भन्नु भयो। कस्तो प्रकारका रोजगारहरू तपाईं हेरिरहेका हुनुहुन्छ को लागि? >> हामी सबैको लागी हेरिरहेका छौं PRESUMPTION बाट, KITCHEN JOBS, VEGETABLE PREP, MEAT PREP, यसमा पूर्ण कामदारहरू WAREHOUSE। JANITORIAL, SANITATION। त्यसोभए हामी प्रशस्त हेरी गर्दैछौं हरेक स्थिति प्लान्ट वर्तमानमा विनिर्माण। >> तपाइँसँग कुनै पनि चिन्ता छ बारे मा स्टाफ गर्न सक्षम हुनु यो समयको अवधिमा वा तपाइँ सोच्नुहुन्छ यो सजिलो हुनेछ? >> म मतलब, यो कहिल्यै सजिलो छैन। तर, म मतलब, हामी यति धेरै छैनौं CONCERNED। मलाई लागिरहेको सबैको साथ लाग्छ सही अब हामी सुनुवाई गरिरहेछौं धेरै मानिसहरुका बारे छन्, अनौठो, उनको बन्द गर्नुहोस् ढोका। र यो कठिन समयको लागि हो धेरै मानिसहरू। त्यसोभए हामी चलाउँदैछौं, तपाईंले थाँहा दिनुहुन्छ हामी सहयोग गर्न सक्दछौं। हामी धेरै तरिकाले गर्न सक्छौं। >> यी दिनहरू हामी चाहँदैनौं कुक गर्न, हामी अर्डर गर्न OR मा उद्धारक। वास्तवमै तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ? अतिरिक्त हुन सक्छ तपाईं हुन सक्नुहुन्छ खाना बनाउने बनाउने डेलिभरीहरू तिनीहरू सुरक्षित छन् POSSIBLY हुन सक्छ? >> हामी वास्तवमै सरकार द्वारा सरकार एक हौं सरकार एजेन्सीहरूको धेरै दिन-देखि-दिन, हामी पछ्याउँछौं र धेरै सख्त खाना द्वारा एबेड गर्नुहोस् नियमहरू विनिर्माण। हाम्रो खाद्य सुरक्षा नम्बर एक हो। हाम्रो सबै प्लान्टहरूमा। हामी पनि त्यो दिन-देखि-दिन गर्छौं, औपचारिक रूपमा अब यो एक छ अतिरिक्त कन्सर्न, विशेषसँग सेना, त्यसोभए म त्यो गर्छु भनेर हामी भन्दछौं धेरै अतिरिक्त लिनुभयो हाम्रो स्टाफमा अभ्यास। सबैजनालाई जाँच गरियो जब तिनीहरू निर्माण भित्र आउनुहोस्। यदि कुनैले कुनै पनी प्रकार देखाईरहेछ भने SYMPTOMS, MECUSE ME, तिनीहरू हुन् घर पठाइयो र हामी तपाईलाई थाहा छ, CDC मार्गनिर्देशन र अनुसरण गर्दै हामी रहन सक्छौं धेरै काम गर्दै सुरक्षित, तर हामी अतिरिक्त लिइरहेका छौं उपायहरू जब यो सुरक्षामा आउँछ र HIGIENE, SANITATION र त्यहि अतिरिक्त सुरक्षा सुरक्षा। >> एक व्यक्तिगत मनपर्ने Go-TO खाना? >> म मतलब, हाम्रो सल्मन वास्तवमै हो राम्रो। म मतलब, हुन सक्छ म पूर्वाग्रहित छु, तर I सबै खाना खानुहोस् SINCE म मेरो समय को धेरै खर्च गर्दछन् यहाँ अफिस मा। हाम्रो साल्मन महान छ। हामी भेगन भोजमा विशेष प्रयोग गर्दछौं। हामीसँग धेरै नै असल छ मेनुमा स्टफ। >> तपाईलाई धेरै कुराको लागि धन्यवाद तपाईं गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईंको समय हामीलाई बताउँदै। हामी यसको कदर गर्छौं। >> तपाइँ धेरै धेरै धन्यवाद। >>> र एक पछिल्लो खाना आज हामी जानु अघि, हाम्रो छवि DAY आउटडोर खाने अवधि ए प्यान्डमिक। यी FINKS मा चीन रमाईलो ए पाल टाँगो तान्न पार्क। जुनसुकै यो प्रभावकारी वा हो हैन, हामी वास्तवमै भन्न सक्दैनौं, तर न्यूनतम तिनीहरू बनाउँदैछन् EFFORT। यो यस घण्टाको लागि हाम्रो शो हो। एबीसीमा रहनको लागि सुरक्षित हुनुहोस् समाचार विश्लेषण र शीर्षको लागि लाइभ स्टोरीहरू। म लाइन डेविस हुँ, धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग स्ट्रीमिINGको लागि र A हो महान रात।
एबीसी न्यूज प्राइम: COVID-19 अस्पताल भर्ती, बन्दका आवाज, फ्रन्टलाइन्समा डाक्टरहरू
< start="25.124" dur="4.105"> >> संसारमा एक क्र्याक तल >
< start="27.026" dur="4.705"> सबैभन्दा ठूलो डेमोक्र्यासी, पुलिस इन >
< start="29.362" dur="3.771"> भारत वेल्डिंग ब्याटन्स, चार्ज गर्दै >
< start="31.864" dur="3.937"> लॉकमा मानिसहरू तर्फ >
< start="33.266" dur="5.305"> गाडीहरू रोक्दै, बनाउँदै मानिसहरू गर्दै >
< start="35.935" dur="3.136"> PUSHUPS जब तिनीहरू BREAK >
< start="38.705" dur="4.804"> नियमहरू >
< start="39.205" dur="5.205"> तिनीहरू सबै प्राप्त गर्न कोसिस गरे >
< start="43.643" dur="1.601"> OUTBREAK धम्की दिन बन्द गर्नुहोस् >
< start="44.544" dur="3.136"> तिनीहरूको जनसंख्या। >
< start="45.378" dur="8.041"> यहाँ सेनेटमा पुग्नुहोस् >
< start="47.813" dur="5.973"> $ २ ट्रिलिजन सम्बन्धमा एउटा सम्झौता >
< start="53.553" dur="8.041"> प्याकेज >
< start="53.92" dur="8.141"> केहि कानून बनाउनेहरू अझै छन् >
< start="61.727" dur="1.068"> रिजर्भेसन। >
< start="62.195" dur="1.367"> अमेरिकामा ,000०,००० केसहरू छन् >
< start="62.929" dur="4.304"> आधा न्यू योर्कमा। >
< start="63.696" dur="3.937"> अमेरिकाको कोवीमा नम्बर >
< start="67.366" dur="1.935"> EPICENTER। >
< start="67.766" dur="2.904"> यहाँ आशाका चमकदारहरू छन् >
< start="69.435" dur="1.635"> सामाजिक को प्रभावहरु >
< start="70.803" dur="1.569"> DISTANCING। >
< start="71.203" dur="3.17"> अधिक अमेरिकाको आधा >
< start="72.505" dur="3.136"> तथ्या्कहरू बन्द गर्नुहोस् >
< start="74.506" dur="2.437"> अव्यवसायिक व्यवसाय। >
< start="75.775" dur="3.67"> >>> OVERSEAS, प्रिन्स चार्ल्स छ >
< start="77.076" dur="3.97"> COVID-19 को लागी पोजिटिभ पोजिटिभ। >
< start="79.579" dur="2.536"> >>> राम्रो इभनिंग, सबैजना। >
< start="81.18" dur="1.635"> धेरै स्ट्रीमिंग को लागी धेरै धन्यवाद >
< start="82.248" dur="1.468"> हामी संग। >
< start="82.949" dur="2.535"> म लिन्से डेभिस हुँ। >
< start="83.849" dur="2.903"> हामी कहाँ दिन अगाडि हेर्छौं >
< start="85.618" dur="2.302"> हामी केहि रिपोर्ट गर्न सक्दछौं >
< start="86.886" dur="2.67"> बिभिन्न, तर फेरि फेरी, >
< start="88.053" dur="1.803"> कोरोनाभाइरस केसहरू जारी राख्नुहोस् >
< start="89.689" dur="1.768"> RISE। >
< start="89.989" dur="2.736"> द न्यू योर्क सरकारले भने >
< start="91.59" dur="2.536"> अस्पतालहरु यहाँ चाँडै हुनेछ >
< start="92.859" dur="2.803"> थप बिरामीहरू भन्दा बिरामीहरू र >
< start="94.259" dur="2.137"> कोरोनाभाइरस सूचनाहरू छैनन् >
< start="95.795" dur="3.37"> अर्कोको लागी अनुभवी >
< start="96.529" dur="6.139"> तीन हप्ता >
< start="99.299" dur="5.238"> र एउटा हस्ताक्षर कि कोही पनि चाहँदैन >
< start="102.802" dur="3.002"> कुनै पनि शहरमा हेर्नुहोस्, टेन्टेड, >
< start="104.67" dur="1.702"> नयाँ शिर्षकहरू बनाउँनुहोस् >
< start="105.938" dur="2.069"> यार्क सिटी। >
< start="106.505" dur="4.138"> अधिकारीहरूले केसमा मात्र भन्दछन्। >
< start="108.141" dur="2.936"> यी निश्चित रूपमा नियमित छन् र >
< start="110.777" dur="2.969"> चेतावनी समय >
< start="111.211" dur="3.469"> सामान्य तथ्या AD्कहरू के >
< start="113.879" dur="2.937"> तिनीहरू प्रस्तुत छन्, आशा गर्दै >
< start="114.813" dur="2.77"> यसमा टुरिस्टहरू आकर्षण गर्नुहोस् >
< start="116.949" dur="2.469"> आगन्तुकहरू भ्रमण गर्नुहोस्। >
< start="117.717" dur="3.57"> अब हावई पर्यटन माग्दै छ >
< start="119.552" dur="4.004"> सम्पूर्ण महिनाको लागि बाहिर रहनुहोस्। >
< start="121.421" dur="3.403"> अलास्का बाहिरी दर्शकहरूलाई इम्प्लायर गर्दैछ >
< start="123.69" dur="2.402"> १ 14 दिन र को लागी क्वारेटिन >
< start="124.957" dur="3.137"> फ्लोरिडा कुनै पनि कसैलाई भनिरहेको छ >
< start="126.225" dur="2.87"> न्यू योर्क, न्यू जर्सी र >
< start="128.227" dur="1.501"> सेल्फ-क्वारेन्टिनमा जडान गर्नुहोस् >
< start="129.228" dur="2.269"> दुई हप्ताका लागि। >
< start="129.862" dur="3.104"> तर राम्रो समाचार, खोज्दै >
< start="131.63" dur="2.236"> चाँदी लाइनहरु आयो >
< start="133.099" dur="2.602"> सबैका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण >
< start="133.999" dur="4.239"> अमेरिकाको, आज नयाँ योर्क >
< start="135.834" dur="3.571"> सरकारले भने कि प्रारम्भिक हो >
< start="138.371" dur="1.868"> सूचकांक सामाजिक सिफारिश >
< start="139.538" dur="3.904"> छुट्याउनको लागि झट्टै देखिन्छ >
< start="140.372" dur="5.673"> भाइरस को फैलियो। >
< start="143.576" dur="3.87"> एबीसीको टम लालामास स्टार्ट अफ अफ। >
< start="146.179" dur="3.369"> >> रिपोर्टर: आज एउटा ग्रिम साइन इन गर्नुहोस् >
< start="147.58" dur="3.871"> यो प्यान्डिक धेरै टाढा छ। >
< start="149.682" dur="3.571"> टीमहरू म्याकशिफ्ट सेट अप गर्दै >
< start="151.584" dur="2.535"> मोर्गे न्यू योर्कको बाहिर >
< start="153.386" dur="2.636"> BELLEVUE अस्पताल। >
< start="154.253" dur="3.87"> उनीहरूको अवधि9/ ११ को हो >
< start="156.155" dur="3.537"> र हरिकन सैंडी। >
< start="158.257" dur="3.404"> औसत, कम्तिमा 5,000,००० नयाँ >
< start="159.825" dur="3.537"> राज्य मा केस, र एक >
< start="161.794" dur="3.637"> अस्पताल एक्लो, १ P व्यक्ति DYING >
< start="163.495" dur="3.17"> केवल २ 24 घण्टामा। >
< start="165.565" dur="3.97"> अस्पताल भनिरहेको भाइरस हो >
< start="166.799" dur="5.94"> एक अविश्वसनीय टोल लिँदै। >
< start="169.669" dur="3.737"> तर आशाको आजको एक स्लिभर, >
< start="172.872" dur="1.701"> अत्यधिक सामाजिक आपतकालिन >
< start="173.539" dur="3.237"> उपायहरू काम गरिरहेका हुन सक्छन्। >
< start="174.707" dur="3.303"> अस्पतालको दर >
< start="176.909" dur="2.903"> थोरै स्लाइडि।। >
< start="178.144" dur="6.739"> >> यो एक धेरै राम्रो हस्ताक्षर हो >
< start="179.946" dur="7.307"> एक सकारात्मक हस्ताक्षर >
< start="185.017" dur="4.705"> फेरि, म १००% IT होल्डहरू वा होइन >
< start="187.386" dur="4.037"> यो अचम्मित छ, तर तीरहरू >
< start="189.855" dur="1.969"> सहीमा ध्यान दिइन्छ >
< start="191.557" dur="1.902"> डायरेक्शन >
< start="191.957" dur="3.17"> >> रिपोर्टर: तर शासक कुमो >
< start="193.592" dur="3.637"> भन्दछ हामी अझै पनी सप्ताह सक्छौं >
< start="195.261" dur="2.268"> न्यूयोर्कमा चुहावटलाई हेट गर्दै >
< start="197.362" dur="2.737"> CITY >
< start="197.663" dur="3.07"> एक CENARIO जो कूलिड कोल्ड >
< start="200.232" dur="1.602"> राष्ट्रपतिको नयाँ संग >
< start="200.866" dur="2.536"> टाइमलाइन, EASE लाई प्रपोज गर्दै >
< start="201.967" dur="2.703"> ईस्टर आइतबार द्वारा प्रतिबन्धहरू, >
< start="203.536" dur="3.103"> त्यो अप्रिल १२ औँ हो। >
< start="204.804" dur="2.635"> >> यो कस्तो ठूलो समय हो >
< start="206.772" dur="1.702"> हुन सक्छ। >
< start="207.573" dur="1.902"> ईस्टर हाम्रो समय छ। >
< start="208.608" dur="2.435"> के एक महान समय। >
< start="209.609" dur="3.536"> >> रिपोर्टर: तर जे होस् >
< start="211.177" dur="3.337"> राष्ट्रको शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञहरु >
< start="213.278" dur="1.669"> सिफारिश गरीरहेको छैन >
< start="214.647" dur="1.468"> कुनै मिति >
< start="215.081" dur="2.402"> >> त्यो वास्तवमै एकदमै लचिलो छ। >
< start="216.249" dur="3.436"> हामीसँग एउटा कुराकानी थियो >
< start="217.616" dur="3.437"> ओभल अफिसमा राष्ट्रपति >
< start="219.819" dur="2.502"> बारेमा कुरा गर्दै, तपाईंलाई थाहा छ, तपाईं सक्नुहुन्छ >
< start="221.187" dur="6.773"> एक मितिमा हेर्नुहोस्, तर तपाईं पाउनुभयो >
< start="222.455" dur="6.94"> धेरै लचिलो हुनुहोस्। >
< start="228.094" dur="2.602"> सम्भाव्यताको मूल्या TO्कन गर्न >
< start="229.528" dur="2.069"> तपाइँ के गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ। >
< start="230.83" dur="2.636"> >> रिपोर्टर: न्यू योर्क, द >
< start="231.73" dur="3.871"> अमेरिकामा एपिसेन्टर, अझै पनि >
< start="233.599" dur="2.369"> थप ठाउँ र अधिक आवश्यक छ >
< start="235.734" dur="1.636"> आपूर्ति। >
< start="236.101" dur="3.037"> चौथाई अस्पतालहरू अन्तर्गत मार्ग, >
< start="237.503" dur="4.037"> र ती पनी आवश्यक छ >
< start="239.271" dur="2.703"> नाजुक जीवन रक्षा उपकरणहरू, >
< start="241.673" dur="2.27"> भेन्टिलेटरहरू। >
< start="242.107" dur="2.903"> सरकारको संख्या ११,००० >
< start="244.076" dur="3.37"> बाटोमा छन्, तर उनले A लाई आवश्यक छ >
< start="245.144" dur="4.304"> 30०,००० को कुल। >
< start="247.58" dur="3.97"> कुमोले उनीहरू के गर्दै छन् भन्दै >
< start="249.581" dur="4.238"> ITALY DID, भेन्टेलर विभाजित गर्नुहोस्। >
< start="251.684" dur="5.405"> एक उपकरण, दुई PATIENTS। >
< start="253.953" dur="4.938"> >> हामी स्प्लिटिंग स्प्लिट गर्दैछौं। >
< start="257.223" dur="2.535"> जहाँ एक जना भेलावालले गर्नु पर्छ >
< start="259.024" dur="3.204"> दुई PATIENTS। >
< start="259.892" dur="4.371"> इटाली यो कारण गर्न थियो >
< start="262.362" dur="2.935"> तिनीहरूले यो गर्न जबरजस्ती गरे। >
< start="264.397" dur="2.969"> >> रिपोर्टर: ती वेंटलिटरहरू >
< start="265.43" dur="4.739"> विरामीहरुलाई रोगीहरु को लागी आवश्यक छ >
< start="267.499" dur="5.006"> 25-YEAR-Old Jack ALLARD जस्तै >
< start="270.303" dur="3.669"> उत्तर डाकोटा जो ए मा छ >
< start="272.638" dur="3.27"> मेडिकलली इन्डकुटेड कोमा। >
< start="274.106" dur="2.202"> >> यो भाइरस साँच्चै हो >
< start="276.041" dur="0.968"> खतरनाक। >
< start="276.442" dur="1.935"> उनी धेरै, धेरै बिरामी छन्। >
< start="277.143" dur="2.603"> >> रिपोर्टर: २ 26-वर्ष-ओल्ड >
< start="278.51" dur="2.87"> FORMER ल्याक्रोस प्लेयर WOKE UP >
< start="279.879" dur="5.872"> पछाडि ACHES र एक राम्रो संग >
< start="281.513" dur="6.907"> चाँडै हप्ता अगाडि। >
< start="285.885" dur="3.036"> >> उनले कहिल्यै लुकाएनन्। >
< start="288.554" dur="1.635"> ऊ कहिल्यै धूम्रपान गर्दैन। >
< start="289.054" dur="1.502"> ऊ आफ्नो स्वास्थ्य धेरै छ >
< start="290.322" dur="1.802"> गम्भीर >
< start="290.689" dur="3.804"> मँ हो, ऊ एक खेलाडी हो। >
< start="292.258" dur="3.737"> >> रिपोर्टर: अब ज्याकको डक्टरहरू >
< start="294.626" dur="1.769"> का लागि एक व्यावहारिक ड्रगको प्रयास गर्दै >
< start="296.128" dur="1.868"> इबोला। >
< start="296.529" dur="1.734"> उसको पारिवारिक आशामा यो बचत हुनेछ >
< start="298.13" dur="1.969"> HIM >
< start="298.397" dur="2.803"> न्यू योर्क शहरमा,% 46% >
< start="300.232" dur="2.903"> कोरोनाभाइरस केसहरू मानिसका उमेर हुन् >
< start="301.334" dur="4.604"> १ TO देखि। 44। >
< start="303.269" dur="5.738"> भाइरस सबै उमेरलाई हेट गर्दै। >
< start="306.072" dur="3.937"> 62२% मृत्यु मर्द र% 54% को हुन्छन् >
< start="309.141" dur="3.437"> भाइरसबाट मर्ने व्यक्तिहरू >
< start="310.142" dur="4.739"> O 75 भन्दा बढि हो। >
< start="312.712" dur="4.537"> त्यो के हो ब्रुड्रिजमा, नयाँ >
< start="315.014" dur="4.004"> जर्सी आज AN ० भन्दा बढी >
< start="317.382" dur="3.438"> बसोबासहरू ट्रान्सफर गरियो >
< start="319.152" dur="3.703"> भित्रबाट यो भित्र राख्नुहोस् >
< start="320.953" dur="3.537"> घर NURSING। >
< start="322.989" dur="3.303"> अमेरिकी नौसेनालय शिप >
< start="324.624" dur="2.035"> "दयालु" हेडिंग टुवर्ड लॉस >
< start="326.425" dur="2.036"> एंगेल्स >
< start="326.792" dur="3.404"> मेडिकल क्रू तयारी तयारी बेडहरू >
< start="328.594" dur="3.47"> र उपकरण सार्नको लागि उपकरण >
< start="330.329" dur="2.102"> माथि 1,000 PATIENTS >
< start="332.197" dur="1.736"> अफशोर। >
< start="332.564" dur="5.272"> सहायता गर्न आज नयाँ प्रभाव >
< start="334.066" dur="4.972"> उत्तर क्यारोलिनाबाट कोलोराडोमा। >
< start="337.97" dur="2.169"> VETERINARIAN अहिले DONATING >
< start="339.171" dur="1.402"> चिकित्सा उपकरण समावेश >
< start="340.273" dur="1.501"> भेन्टिलेटरहरू। >
< start="340.706" dur="2.436"> >> यो केवल एक अधिक उदाहरण हो >
< start="341.908" dur="2.769"> एक सहयोग र हामीलाई भइरहेको छ >
< start="343.275" dur="2.603"> हाम्रो संग पार्टनर गर्न को लागी पर्याप्त छ >
< start="344.81" dur="2.67"> मानव पक्षमा साथीहरू। >
< start="346.011" dur="3.57"> >> रिपोर्टर: अब नयाँ तातो क्षेत्र >
< start="347.613" dur="4.304"> पपिंग गर्दै देश पार गर्नुहोस्। >
< start="349.715" dur="3.67"> आज डिसास्टर घोषणा >
< start="352.05" dur="3.037"> टेक्सास र लुइसियानाका लागि। >
< start="353.519" dur="3.17"> नयाँ अर्लिन्समा, मार्डी ग्रस जस्ट >
< start="355.22" dur="3.604"> हप्ताहरू यसकासाथ एउटा सेलेब्रेशन >
< start="356.822" dur="4.004"> ठूलो संख्यामा दिन र दिनहरू >
< start="358.957" dur="3.704"> पार्टीिंग एक कारण हुन सक्छ >
< start="360.959" dur="2.971"> कोरोनाभाइरस अब प्रशस्त छ >
< start="362.794" dur="2.003"> द्रुत यहाँ जे भए पनि >
< start="364.063" dur="3.737"> ग्रहमा। >
< start="364.931" dur="7.473"> >> मेरो EMS विभाग, O०% भन्दा बढि >
< start="367.933" dur="6.34"> मेरा मानिसहरू अहिले छन् >
< start="372.538" dur="2.836"> क्वारन्टीन, र यति मात्र हामी पनि >
< start="374.406" dur="2.937"> लक गरिएको थप स्रोतहरू >
< start="375.507" dur="3.404"> राज्य स्तर, राज्य क्यान >
< start="377.476" dur="2.335"> कुनै लामो समय बाहिर जानुहोस् >
< start="379.045" dur="1.701"> अतिरिक्त - फेडरल बिना >
< start="379.945" dur="1.702"> यस समयमा सहयोग गर्नुहोस्। >
< start="380.88" dur="1.401"> >> रिपोर्टर: र अब भाइरस >
< start="381.781" dur="2.201"> पहिले टोल लिँदै >
< start="382.415" dur="2.835"> जवाफ दिनेहरू। >
< start="384.116" dur="2.035"> >> यो एकदम व्यक्तिगत छ। >
< start="385.384" dur="6.74"> प्रत्येक र हरेक दिन म एक हुन्छु >
< start="386.285" dur="8.375"> रिपोर्ट र संख्या क्लाइम्ब। >
< start="392.258" dur="3.203"> >> रिपोर्टर: अधिक न्यू योर्क मा >
< start="394.793" dur="2.236"> NYPD भन्दा २०० सदस्यहरू >
< start="395.594" dur="1.768"> संग प्रभाव भएको छ >
< start="397.162" dur="1.835"> भाइरस। >
< start="397.496" dur="2.202"> कम दुई अधिकारीहरु मा DETROIT मा >
< start="399.131" dur="2.103"> मरेको छ। >
< start="399.832" dur="3.504"> र अमेरिकी सेनाको लागि >
< start="401.367" dur="3.97"> नयाँ संगै काम गर्न >
< start="403.469" dur="3.537"> गृह डेलिभरीहरूमा केस गर्नुहोस्, केसहरू >
< start="405.47" dur="4.171"> भाइरसको अब रिपोर्ट गरियो >
< start="407.139" dur="5.138"> NINE AMAZON WAREHOUSES। >
< start="409.775" dur="4.571"> >> र टम लालामास हामीलाई अब सम्मिलित गर्दछ। >
< start="412.411" dur="3.237"> टम, न्यू योर्क सरकार एन्ड्रयू >
< start="414.48" dur="2.368"> कुमो आज उसले भन्यो राज्य हो >
< start="415.781" dur="2.402"> अब होटस्पट अधिकार। >
< start="416.982" dur="2.403"> IT स्रोतको आवश्यकता छ तर IT >
< start="418.316" dur="3.504"> अर्कोलाई मद्दत गर्न तयार >
< start="419.518" dur="2.669"> तथ्या .्कहरू जब तिनीहरू नयाँ हुन्छन् >
< start="421.954" dur="1.468"> HOTSPOTS। >
< start="422.321" dur="1.435"> >> रिपोर्टर: हो, त्यो सही छ, >
< start="423.556" dur="1.368"> LINSEY। >
< start="423.889" dur="2.135"> ऊ A का लागि भनिरहेको छ >
< start="425.057" dur="2.636"> अब दिन को कपल। >
< start="426.158" dur="2.936"> जरूरी छ कि ऊ बनाउन चाहन्छ >
< start="427.826" dur="2.636"> निश्चित गर्नुहोस् उनीहरूले यो समस्या ठीक गर्न सक्छन्, >
< start="429.228" dur="2.502"> मद्दत बाहिर महामारी र >
< start="430.595" dur="2.937"> एकचोटि तिनीहरू सबै सिक्छन् >
< start="431.864" dur="4.505"> CAN, र एक मात्र अन्य हट زونहरू >
< start="433.666" dur="3.603"> लुसिआना जस्ता पप्पिंग सुरू गर्नुहोस्, >
< start="436.502" dur="1.568"> तिनीहरू केहि स्थानान्तरण गर्न सक्छन् >
< start="437.403" dur="2.068"> उपकरण, केही ज्ञात >
< start="438.204" dur="2.202"> र आशाले अरूलाई मद्दत गर्नुहोस् >
< start="439.604" dur="3.304"> देशबाट तथ्या .्क। >
< start="440.54" dur="3.202"> >> अब केहि को लागी जानु पर्छ >
< start="443.041" dur="3.237"> आशावादी समाचारहरू >
< start="443.875" dur="3.838"> अस्पतालमा दरहरू छन् >
< start="446.411" dur="1.869"> नयाँ यार्कको कारण तल झेलिदै >
< start="447.846" dur="2.736"> सामाजिक आपतकालिन। >
< start="448.414" dur="2.969"> त्यो ट्र्यान्डलाई अनुभवी छ >
< start="450.716" dur="1.869"> जारी राख्नुहुन्छ? >
< start="451.517" dur="3.403"> >> रिपोर्टर: हो, तपाईलाई थाहा छ, >
< start="452.718" dur="4.037"> यो एक सानो सिल्भर लाइनिंग र हो >
< start="455.053" dur="2.837"> सरकार कुमो, हरेक रात उहाँ >
< start="456.888" dur="2.303"> मलाई बताउँछ उहाँ सबैलाई हेर्नुहुन्छ >
< start="458.023" dur="2.336"> तथ्या AND्क र डेटा र PRESENTS >
< start="459.325" dur="1.434"> अर्को समाचार कन्फरेन्सहरूमा >
< start="460.493" dur="2.268"> DAY >
< start="460.893" dur="2.235"> यो एक SILVER लाइनिंग उहाँ हुनुहुन्छ >
< start="462.894" dur="1.67"> म्यान्टेड। >
< start="463.261" dur="2.837"> अस्पताल दर गयो >
< start="464.697" dur="2.669"> हल्का तल बट, फेरि, उहाँ >
< start="466.231" dur="2.603"> अझै भन्दछ हामी नजिकै छौं दुई >
< start="467.499" dur="4.671"> सबै हप्ताबाट तीन हप्ता >
< start="468.968" dur="4.671"> केस जब तिनीहरूले हिट >
< start="472.304" dur="4.137"> अस्पतालहरु, त्यसैले हामी धेरै, धेरै >
< start="473.772" dur="3.036"> नयाँ योर्क शहरमा शुरुमै >
< start="476.575" dur="0.567"> प्यान्डमिक। >
< start="477.276" dur="3.804"> >> NONETHELESS, हामी लिनेछौं >
< start="480.612" dur="2.636"> चादीको घेरा। >
< start="481.214" dur="3.77"> टम लालामास, धन्यवाद। >
< start="483.382" dur="2.67"> >>> धेरै अमेरिकीका लागि यो छ >
< start="485.117" dur="6.44"> तथ्याIC्कहरूको बारेमा लामो समय सम्म >
< start="486.185" dur="6.073"> वास्तविक परिवार र विक्टिम यसमा >
< start="492.391" dur="1.902"> । >
< start="492.625" dur="3.169"> अनमोरमा थप्दै >
< start="494.427" dur="2.602"> हृदय BREAK, धेरै बिरामी छन् >
< start="495.928" dur="2.702"> अब शारीरिक रूपमा अलग बाट >
< start="497.162" dur="2.47"> तिनीहरूको यो लडाई मन परेको छ >
< start="498.764" dur="1.669"> पृथकमा लडाई। >
< start="499.765" dur="3.737"> अन्य परिवारहरू भाईरसको पहिले नै >
< start="500.566" dur="4.705"> फैलिएको छ। >
< start="503.636" dur="3.336"> हाम्रो म्याट गटम्यानले यी साझेदारी गर्दछ >
< start="505.404" dur="2.636"> हार्ट बन्चिंग स्टोरीहरू। >
< start="507.106" dur="2.368"> >> रिपोर्टर: आज राती >
< start="508.174" dur="2.335"> 17-वर्ष पुरानो खरीद LOS बाट >
< start="509.608" dur="1.968"> एG्गलहरू युवा बनेका छन >
< start="510.642" dur="3.37"> व्यक्ति हुनको लागि देश मा >
< start="511.71" dur="5.138"> COVID १ TER पछि मरे। >
< start="514.146" dur="3.203"> >> यस समुदायमा सबै मारिए, >
< start="516.982" dur="1.902"> तिनीहरू बढेका छन्। >
< start="517.482" dur="3.104"> मान्छेहरू गृह रहन सक्दछन्। >
< start="519.017" dur="2.47"> म अर्को गुमाउन गइरहेको छु >
< start="520.719" dur="1.969"> यस शहरमा बच्चा। >
< start="521.62" dur="2.369"> >> रिपोर्टर: सीडीसी आज रात छ >
< start="522.821" dur="1.869"> को कारण भित्र हेर्दै >
< start="524.123" dur="3.369"> TEENAGER को मृत्यु। >
< start="524.824" dur="3.035"> उनको फादर, एक उबर ड्राइभर, पनि >
< start="527.626" dur="2.803"> प्रभावित >
< start="527.993" dur="2.936"> र SAN DIEGO मा, दुई सूचनाहरू >
< start="530.562" dur="1.035"> सकारात्मक परीक्षण गर्दै। >
< start="531.063" dur="1.902"> र डक्टरहरूबाट चेतावनी >
< start="531.73" dur="2.97"> आज राती >
< start="533.099" dur="3.769"> >> बिरामीहरू भित्र आउँदैछन् >
< start="534.833" dur="3.17"> धेरै अलग संग साधारणतया >
< start="537.002" dur="2.603"> उजुरीहरू, तर धेरै जसो >
< start="538.137" dur="1.801"> कम, गाह्रो र छोटो >
< start="539.738" dur="2.336"> BREATH >
< start="540.072" dur="3.037"> म वास्तवमै त्यो कुरा सम्झन्छु >
< start="542.208" dur="3.403"> चाखलाग्दो, बिरामीहरू आउँदैछन् >
< start="543.242" dur="5.672"> नौसिआ संग, बान्ता र >
< start="545.745" dur="4.37"> DARRHEA, केहि हामी गर्छौं >
< start="550.683" dur="1.768"> RESPIRATORY का साथ अनुभव गर्नुहोस् >
< start="552.184" dur="2.303"> ILLNESSES। >
< start="552.584" dur="3.804"> >> रिपोर्टर: उनको 40s मा टेरी >
< start="554.62" dur="3.971"> र भाइरस सम्म सक्रिय गर्नुहोस् >
< start="556.521" dur="7.008"> यसमा फेला पर्‍यो। >
< start="558.724" dur="7.24"> >> म जिममा काम गर्दै थिएँ >
< start="563.662" dur="2.603"> र फेबेर र नौसेलाले लात हाले >
< start="566.098" dur="1.668"> IN >
< start="566.398" dur="1.802"> >> रिपोर्टर: दिन ती She थियो >
< start="567.9" dur="2.202"> अस्पतालमा राखिएको। >
< start="568.333" dur="2.403"> >> ठीक छ, मसँग यो मेरोमा गइरहेको छ >
< start="570.236" dur="1.568"> १ 16 औं दिन अब। >
< start="570.87" dur="1.801"> >> रिपोर्टर: पूर्ण समय उनले >
< start="571.937" dur="1.768"> उसको पतिलाई देख्दैन र >
< start="572.805" dur="2.235"> तीन बच्चाहरु >
< start="573.839" dur="3.537"> >> उसले ढोकामा खानेकुरा छोड्छ। >
< start="575.174" dur="5.204"> मसँग मेरो परिवारको साथ सन्तुष्टि छ। >
< start="577.51" dur="3.669"> र मेरो बच्चाहरु नोटहरू छोड्नुहोस् र >
< start="580.512" dur="3.07"> सानो - मेरो लागि सानो शिल्पहरू >
< start="581.313" dur="7.708"> ढोकामा। >
< start="583.716" dur="6.039"> तर मसँग तिनीहरू छुइनको छैन वा >
< start="589.155" dur="2.568"> यससँग उनीहरूसँग कुनै पनि समय खर्च गर्नुहोस् >
< start="589.889" dur="2.668"> पूर्ण क्वारेन्टाइन। >
< start="591.857" dur="2.369"> >> रिपोर्टर: एक हो >
< start="592.691" dur="3.937"> SYMPTOMS, SMELL LOSS, WHICH >
< start="594.36" dur="4.004"> साथै YVETTE लाई सम्पन्न भयो। >
< start="596.762" dur="3.503"> >> रिपोर्टर: एउटा कुरा >
< start="598.497" dur="2.903"> मैले सूचना परिवर्तन गरेँ, I >
< start="600.398" dur="1.303"> मेरो भावना पूर्ण रूपमा हराउनुहोस् >
< start="601.534" dur="1.601"> SELL। >
< start="601.834" dur="1.701"> >> रिपोर्टर: र यो धेरै भयो >
< start="603.268" dur="2.036"> विश्व >
< start="603.669" dur="2.069"> यो -०-वर्ष पुरानो सेना VET थियो >
< start="605.437" dur="1.835"> अस्पतालमा राखिएको। >
< start="605.871" dur="3.304"> उनी रिलीज र वास्तवमै थियो >
< start="607.406" dur="3.336"> भाइरस सम्म अझ राम्रो लाग्छ >
< start="609.308" dur="3.103"> ट्रिगर न्यूमोनिया। >
< start="610.876" dur="4.905"> अन्ततः उनी भन्छन् डाक्टरहरु उनको >
< start="612.545" dur="4.905"> एक एन्टि-मलियियल ड्रग कल >
< start="615.914" dur="2.77"> HYDROXYCHLOROQUINE A को भागको रूपमा >
< start="617.583" dur="2.903"> प्रयोगसाला परिक्षण। >
< start="618.818" dur="4.204"> मिसूरी पाँच परिवार सदस्यहरू >
< start="620.619" dur="2.769"> तपाईं यो चित्रमा देख्नुभयो >
< start="623.155" dur="3.403"> भाइरस। >
< start="623.522" dur="4.004"> पहिलो, विवाह जेन वाइनहाउस। >
< start="626.692" dur="1.568"> JASON, भाई, बहन-भित्र-कानून >
< start="627.659" dur="2.102"> र बुबा माइक। >
< start="628.394" dur="3.403"> तिनीहरू सबै आईरहेछन्। >
< start="629.895" dur="2.302"> ती पनी तीन जनाले अनुभव गरिरहेका छन् >
< start="631.93" dur="2.569"> निमोनिया। >
< start="632.33" dur="4.105"> भाइरस पनि तिनीहरू मार्फत >
< start="634.633" dur="4.605"> एरिकाको परिवार। >
< start="636.569" dur="4.404"> एबीसीको कुराकानी गर्दै "यहाँ सुरू गर्नुहोस्" >
< start="639.371" dur="4.638"> पोडकास्ट उनी अनुसन्धान गर्दछन् >
< start="641.106" dur="7.474"> हराएको उसको हसबन्ड जर्वे >
< start="644.143" dur="4.837"> केवल उहाँको दिनहरू अघि .th औं दिन >
< start="648.713" dur="0.835"> BIRTHDAY। >
< start="649.114" dur="2.803"> >> म सहयोग महसुस गर्दछु। >
< start="649.681" dur="3.737"> म के गर्न चाहन्छु? >
< start="652.051" dur="3.003"> >> रिपोर्टर: एकचोटि उहाँ परिक्षण गर्नुभयो >
< start="653.552" dur="2.269"> सकारात्मक, चिकित्सकहरू अलग >
< start="655.187" dur="1.635"> तिनीहरूका दुई बच्चाहरूबाट जर्वे र >
< start="655.955" dur="5.071"> एरिकाबाट >
< start="656.956" dur="5.271"> उनीसँग राम्रो भन्न को लागी कहिल्यै छैन। >
< start="661.16" dur="1.401"> >> विभिन्न DUFFICULT STOIES TO >
< start="662.361" dur="2.535"> सुन्नुहोस्। >
< start="662.694" dur="4.505"> हामी अब म्याट गुटम्यानद्वारा सम्मिलित छौं। >
< start="665.03" dur="4.071"> म्याट, तपाईं COVID-19 रिपोर्ट >
< start="669.234" dur="2.403"> अझ राम्रो र फेरि बिरामी पर्दछ। >
< start="670.97" dur="1.501"> केहि तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ >
< start="671.771" dur="2.902"> बेच्ने तरंगहरू बारे? >
< start="672.605" dur="3.936"> >> रिपोर्टर: हामी छौं। >
< start="674.807" dur="4.204"> मान्छे रोलरमा कल गर्दैछन् >
< start="676.675" dur="3.27"> कोस्टर प्रभाव उनीहरू कहाँ सोच्दछन् >
< start="679.144" dur="3.07"> तिनीहरू मेंडमा छन्, हुनसक्छ >
< start="680.078" dur="5.906"> हप्ता वा दस दिन वा दुई हप्ता >
< start="682.347" dur="5.339"> पहिले GETTING SYMPTOMS AND पछि >
< start="687.819" dur="1.736"> केही दिन पछि उनीहरू पछि >
< start="688.654" dur="1.201"> यस द्वारा फेरि एकैसाथ जानुहोस् >
< start="689.688" dur="1.201"> भाइरस। >
< start="689.988" dur="2.37"> फेरि, यो धेरै समस्या हो >
< start="691.022" dur="3.471"> यसका साथ रोप्ने कुरा >
< start="692.491" dur="2.803"> डाक्टरहरू कसरी सिक्ने छन् >
< start="694.627" dur="2.402"> यो भाइरस व्यवहार गर्दछ। >
< start="695.428" dur="1.901"> >> के बारे मा कि गुमाउँछ >
< start="697.463" dur="2.302"> चाखेर पनि हार्दिक हार। >
< start="698.563" dur="1.936"> ती हुन् लक्षणहरू हुन् >
< start="699.898" dur="3.47"> संग सम्बद्ध हुन विश्वास छ >
< start="700.632" dur="3.737"> यो भाइरस। >
< start="703.502" dur="2.135"> >> रिपोर्टर: तिनीहरू हुन्, र >
< start="704.502" dur="2.771"> त्यो ती चीजहरू मध्ये एक हो त्यो हो >
< start="705.771" dur="2.435"> यस भाइरसको बारेमा सोरपिस गर्दै, >
< start="707.406" dur="3.67"> तर डाक्टरहरूले वास्तवमै यसो भन्छन् >
< start="708.34" dur="3.77"> होइन कि सर्पिस गर्दैछ। >
< start="711.21" dur="2.102"> विभिन्न लक्षणहरू। >
< start="712.244" dur="2.636"> हामी हृदयका मानिसहरू बान्ता गर्दैछौं >
< start="713.445" dur="4.605"> र नौसेआ र हेडचेस एंड >
< start="715.013" dur="4.438"> BACK ACHES, र OBVIOUSLY >
< start="718.183" dur="4.771"> न्यूमोनिया सामान्य, तर म के >
< start="719.585" dur="4.838"> यहाँ सेन्सेड प्रोभेष्टमा बताइएको थियो। >
< start="723.088" dur="2.369"> जोसेफ मेडिकल केन्द्र त्यो हो >
< start="724.556" dur="1.802"> ESSENTIALLY भाइरस को आक्रमण >
< start="725.59" dur="2.803"> तपाईंको सम्पूर्ण प्रणाली। >
< start="726.492" dur="4.07"> त्यसो गरेर, यो जरूरी छ >
< start="728.526" dur="2.436"> तपाइँको अमानवीय प्रणाली पठाउनुहोस् >
< start="730.695" dur="2.202"> हाइपरड्राइभ। >
< start="731.096" dur="2.402"> यो OVERREACTAS र तपाइँलाई आक्रमण गर्छ >
< start="733.031" dur="2.169"> आफ्नै शरीर >
< start="733.632" dur="2.269"> हामी किन धेरैजना देखिरहेका छौं >
< start="735.334" dur="3.136"> यसको लागि VARIED SYMPTOMS >
< start="736.034" dur="3.838"> खास भाइरस। >
< start="738.604" dur="3.337"> हामी केहि बिन्दुमा आशा गर्न सक्छौं >
< start="740.005" dur="3.704"> एउटा खोप लगाउनुहोस् र ती पाउनुहोस् >
< start="742.074" dur="1.935"> उपचारहरू जुन हामी जान्दछौं >
< start="743.842" dur="0.501"> काम >
< start="744.476" dur="1.969"> >> सबै सही। >
< start="744.944" dur="2.235"> म्याट गुटमान, तपाईंको लागि धन्यवाद >
< start="746.578" dur="1.102"> रिपोर्ट गर्दै। >
< start="747.313" dur="2.469"> हामी यसको कदर गर्छौं। >
< start="747.813" dur="4.371"> >>> अब रिपल प्रभावहरूको >
< start="749.915" dur="4.438"> यो भाइरस टाढा छन्। >
< start="752.317" dur="3.404"> हामी भन्दै थियौं, धेरै परिवार >
< start="754.486" dur="3.704"> सदस्यहरू यहाँबाट राखिन्छन् >
< start="755.854" dur="4.038"> तिनीहरूको पुरानो प्रेमले हामीलाई >
< start="758.323" dur="3.003"> घरहरु NURSING र सहायता >
< start="760.025" dur="3.003"> हप्ताको लागि अहिले जीवित केन्द्रहरू। >
< start="761.46" dur="2.235"> त्यो जेल र को लागी केस हो >
< start="763.161" dur="2.203"> पछिल्लो टेलर। >
< start="763.829" dur="1.969"> तपाइँलाई धन्यवाद दिन चाहानुहुन्छ >
< start="765.497" dur="1.201"> अमेरिकामा सामेल। >
< start="765.931" dur="2.869"> >> तपाइँलाई अमेरिकाको लागि धन्यवाद। >
< start="766.832" dur="2.335"> >> हामीलाई अमेरिकाका लागि धन्यबाद, >
< start="768.934" dur="2.903"> LINSEY। >
< start="769.301" dur="4.171"> >> जेल, तपाईंको आमा चार्लोट एमा >
< start="771.971" dur="4.237"> नयाँ जर्सी जीवित सहयोग >
< start="773.606" dur="3.77"> केन्द्रले उनको th th औं मान्यता प्राप्त गर्‍यो >
< start="776.341" dur="2.436"> जन्म र आज तपाईंले सिक्नु भयो >
< start="777.509" dur="1.668"> उनले पोजिटिभ परीक्षण गरे >
< start="778.91" dur="2.036"> कोरोनाभाइरस। >
< start="779.31" dur="4.138"> हामीलाई भन्नुहोस् उहाँ कसरी समाप्त हुनुभयो >
< start="781.08" dur="2.969"> परीक्षण गरिएको छ। >
< start="783.582" dur="1.668"> उसको लक्षण के थियो? >
< start="784.182" dur="5.939"> तपाइँ यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्दै हुनुहुन्छ >
< start="785.383" dur="5.473"> केवल केही घण्टा देखि रिभोलिएसन >
< start="790.255" dur="0.934"> अब त्यो भाइरस छ कि? >
< start="790.989" dur="0.968"> >> हो। >
< start="791.323" dur="2.169"> SATURDAY मा तँ मेरो बोल्छ >
< start="792.09" dur="4.805"> आमा, र मैले त्यो याद गरें >
< start="793.625" dur="4.438"> केवल एक सानो साथ ध्वनि। >
< start="797.029" dur="2.902"> एकदम थकित। >
< start="798.197" dur="2.569"> म फोनमा उसलाई होल्ड गर्दिन >
< start="800.065" dur="3.17"> लामो, तर मलाई केहि थाहा थियो >
< start="800.899" dur="4.438"> बिभिन्न >
< start="803.369" dur="3.202"> आइतबार मैले सुनें >
< start="805.47" dur="4.938"> घर पालना, तिनीहरूले मलाई भने >
< start="806.705" dur="7.874"> उनीसँग लगभग १०० को कम छ। >
< start="810.542" dur="5.105"> र मैले भने, HMM, OkAY, >
< start="814.713" dur="1.935"> कसैको आज्ञाकारी हुँदै गइरहेको छ। >
< start="815.781" dur="3.103"> उनीहरूले मलाई पत्र लेखे >
< start="816.782" dur="3.903"> तापमान TOAT सम्म तल गयो। >
< start="819.018" dur="5.938"> सोमबार तिनीहरूले मलाई भेटे उनीहरू >
< start="820.819" dur="8.642"> १०२ लाई छनौट गरियो। >
< start="825.09" dur="5.573"> त्यसो भए म डाक्टरलाई बोलाउँदछु र म >
< start="829.595" dur="3.002"> बोले, सूचीबद्ध, तीन कुराहरु, >
< start="830.796" dur="3.636"> उनी 89।, उनी भर्खरै छिन >
< start="832.731" dur="3.637"> घर र उनी एक कम छन। >
< start="834.566" dur="4.471"> म उसको जाँच गर्न चाहान्छु। >
< start="836.502" dur="4.003"> त्यसैले उहाँ सहमत हुनुहुन्छ। >
< start="839.171" dur="5.271"> र तिनीहरूले मलाई आज मलाई बोलाइयो >
< start="840.639" dur="5.472"> मलाई त्यो सकारात्मक परीक्षण गरिएको छ। >
< start="844.576" dur="3.537"> त्यसोभए, म शकमा छु। >
< start="846.245" dur="4.337"> म स्तब्ध छु। >
< start="848.247" dur="5.072"> मलाई लाग्छ मेरो भाग थियो >
< start="850.715" dur="3.838"> त्यो टेस्ट सोच्नुहुन्न >
< start="853.452" dur="3.336"> पछाडि पोजिटिभ कारण हुनु पर्छ >
< start="854.687" dur="4.404"> हेरचाह गर्ने घर, तिनीहरू छन् >
< start="856.921" dur="4.338"> एक जोडी को लागी रोकिन्छ >
< start="859.224" dur="3.17"> हप्ताको अब। >
< start="861.393" dur="2.936"> मैले हेर्ने मौका पाएँ >
< start="862.528" dur="3.27"> उनको, मेरो हसबन्ड र म, उनको >
< start="864.463" dur="1.902"> BIRTHDAY, तर हामी अलग थियो >
< start="865.931" dur="0.801"> ग्लास द्वारा। >
< start="866.498" dur="0.934"> >> ठीक। >
< start="866.865" dur="2.702"> >> त्यसो त कुनै शारीरिक थिएन >
< start="867.566" dur="6.306"> सम्पर्क गर्नुहोस्। >
< start="869.701" dur="4.571"> त्यसो भए म मात्र हुँ, तपाइँलाई थाहा छ, >
< start="874.005" dur="0.701"> शंकित >
< start="874.405" dur="1.602"> म दुखि छु; मलाई पिर परेको छ। >
< start="874.84" dur="3.637"> तर हामी ईसाई र मानिसहरू हौं >
< start="876.141" dur="4.071"> विश्वासको, यति हामी विश्वास गर्छौं >
< start="878.61" dur="3.437"> प्रार्थनाको शक्ति, तर निश्चित रूपमा >
< start="880.345" dur="2.569"> धेरै संकुचित। >
< start="882.181" dur="2.769"> >> र तपाईंको आमा हुनुहुन्छ >
< start="883.048" dur="4.671"> अन्डरलिइनिंग सर्तहरू। >
< start="885.084" dur="3.303"> त्यसो भए अब त्यो लागि मार्गनिर्देशन हो >
< start="887.853" dur="3.236"> उनले स्ट्याट पुट वा खोज्नु पर्छ >
< start="888.52" dur="4.705"> अस्पतालमा उपचार गर्नुहोस्? >
< start="891.223" dur="5.238"> >> त्यसो हो, तर यो जस्ट >
< start="893.358" dur="5.639"> सुरू भयो, उनी पट्टि लाग्नेछन्। >
< start="896.595" dur="6.139"> अहिले नै उसको प्रतीकहरू छन् >
< start="899.131" dur="3.937"> चाँडो र मात्र उनको भावना >
< start="902.867" dur="2.837"> थकित। >
< start="903.201" dur="3.737"> मेरो आमा दुई पटक ल L्ग क्यान्सर हुनुहुन्छ >
< start="905.838" dur="4.036"> सर्भर >
< start="907.072" dur="3.97"> उनी पनि डायबेटिक। >
< start="910.008" dur="1.702"> त्यसैले, पाठ्यक्रम को, त्यहाँ छ, तपाईं >
< start="911.176" dur="5.205"> थाहा छ, कि मा ठूलो ध्यान >
< start="911.843" dur="5.206"> क्षेत्र, र हामी संग परामर्श गरेका छौं >
< start="916.515" dur="2.802"> एक प्रभावशाली रोग >
< start="917.182" dur="4.205"> विशेष। >
< start="919.451" dur="3.337"> त्यसैले ऊ मनमा केहि चीजहरू छन् >
< start="921.52" dur="3.636"> र हामी जान्दछौं, कुराकानी गर्नुहोस् >
< start="922.921" dur="4.604"> उहाँसँगको अझ बढीमा। >
< start="925.29" dur="4.838"> तर अब उनी पट्टि लाग्नेछन्। >
< start="927.659" dur="4.104"> उनी सुस्पष्ट छ। >
< start="930.262" dur="4.37"> उनीसँग एउटा रोमिटेट छ कि >
< start="931.897" dur="5.571"> उसको घरबाट हटाइएको छ। >
< start="934.766" dur="4.137"> >> र यो असुविधाजनक हुनेछ >
< start="937.602" dur="2.336"> समाचारहरू, OWVIOUSLY अन्डर कुनै पनि >
< start="939.037" dur="2.003"> CIRCUMSTANCE, तर कसरी अधिक >
< start="940.071" dur="1.736"> विविध यो हुन्छ जस्तो छ >
< start="941.173" dur="5.305"> तपाईं वास्तविक रूपमा हेर्न सक्षम हुनुहुन्न >
< start="941.941" dur="6.706"> र उनीसँग भेट्न आउनुहोस्? >
< start="946.612" dur="3.069"> >> त्यो हो - हो, यो छ >
< start="948.78" dur="3.337"> नहुनुको सबैभन्दा बेग्लाबेग्लै भाग >
< start="949.814" dur="4.072"> यहाँ उनको साथ हुन सक्ने। >
< start="952.251" dur="3.17"> मेरो आमाको जोडी बिरामी परेको थियो >
< start="954.019" dur="2.402"> महिना अगाडि र म त्यहाँ सबै थिए >
< start="955.554" dur="3.703"> एकल दिन >
< start="956.555" dur="4.304"> दिनभरि। >
< start="959.391" dur="3.87"> उनी वास्तवमै हुनु पर्छ >
< start="960.992" dur="3.938"> अस्पताल र ट्रान्सपोर्ट गरिएको >
< start="963.395" dur="2.068"> मेरो हसबन्ड र म, हामी सबै खर्च गर्छौं >
< start="965.063" dur="3.47"> उनको साथ दिन। >
< start="965.597" dur="5.639"> त्यसोभए हामी वास्तवमै ह्यान्ड्स अन गर्छौं। >
< start="968.667" dur="4.404"> म NURSES मा कुरा गर्न पाएँ, >
< start="971.37" dur="2.902"> डाक्टरहरू, तपाईंलाई थाँहा छ, म वास्तवमै थियो >
< start="973.204" dur="3.204"> ठीक चीजहरूमा दर्ता गर्नुहोस्, त्यसैले म >
< start="974.405" dur="5.006"> वास्तवमै उनको आवाज हुन। >
< start="976.542" dur="5.037"> मेरी आमा पनि डेमेन्टीआ छ। >
< start="979.545" dur="6.239"> त्यसो त वास्तवमै हो, साँच्चै >
< start="981.713" dur="5.505"> DOFFICULTO हुन सक्षम हुनु हुँदैन >
< start="985.918" dur="4.403"> त्यहाँ, तपाइँलाई थाहा छ, समर्थन गर्नुहोस् >
< start="987.352" dur="4.337"> उनको र पनि उनको आवाज हुन। >
< start="990.455" dur="4.672"> >> र अर्को चरणहरू के हुन्? >
< start="991.823" dur="7.074"> के प्रकारको नियन्त्रण तपाइँ गर्नुहुन्छ >
< start="995.26" dur="6.473"> एक डिस्टान्स देखि ALBEIT, छ? >
< start="999.031" dur="3.67"> >> त्यसो हो, धेरै छैन, वास्तवमा। >
< start="1001.867" dur="3.77"> अब तपाइँ थाँहा, ठीक, अब, फेरि, >
< start="1002.834" dur="5.705"> उनी स्टेबल छन्। >
< start="1005.771" dur="3.469"> तिनीहरू उसका लक्षणहरूको उपचार गर्दैछन्, >
< start="1008.673" dur="2.77"> तपाइँ जान्नुहुन्छ, टाइलनाल र चीजहरू >
< start="1009.374" dur="3.437"> जस्तो मन पराउनुहोस्। >
< start="1011.577" dur="3.102"> उनीहरू मलाई भन्दछन् कि उनले पनि >
< start="1012.945" dur="2.468"> एक यूटीआई छ। >
< start="1014.813" dur="3.57"> त्यसोभए उनीहरूसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ >
< start="1015.547" dur="4.638"> स्वागत छ। >
< start="1018.517" dur="3.436"> तर यो केवल सामग्री कलिंग, >
< start="1020.319" dur="2.302"> म NURSES कल गर्दै। >
< start="1022.087" dur="2.969"> मेरी आमा अचम्मको छ >
< start="1022.754" dur="4.571"> डाक्टर >
< start="1025.19" dur="3.904"> ऊ उनको लागि नयाँ छ। >
< start="1027.459" dur="2.469"> ऊ उनीसँग भएको थिएन >
< start="1029.227" dur="2.803"> उनको प्रेमीको रूपमा लामो, >
< start="1030.061" dur="4.605"> तर यो GUY म वास्तवमै मन पराउँछु। >
< start="1032.164" dur="3.069"> ऊ - जब तपाईं यस नम्बरमा कल गर्नुहुन्छ, >
< start="1034.799" dur="3.237"> ऊ फोनको जवाफ दिन्छ। >
< start="1035.367" dur="4.471"> त्यसोभए तपाईंलाई कस्तो लाग्छ भनेर जान्नुहोस्। >
< start="1038.17" dur="4.804"> तर वास्तवमा यो एक दोस्रो दोस्रोमा हो >
< start="1039.971" dur="5.572"> एक समय, एक दिन एक समय मा। >
< start="1043.108" dur="2.836"> हामी कसरी जान्छौं भन्ने छ >
< start="1045.677" dur="1.669"> अहिले। >
< start="1046.077" dur="3.637"> >> पास्टर टेलर, एक मानिस को रूपमा >
< start="1047.479" dur="4.004"> कपडा, कम्मर के शब्दहरू >
< start="1049.848" dur="1.969"> के तपाईं यसमा तपाईंको पत्नी दिदै हुनुहुन्छ? >
< start="1051.95" dur="3.47"> >> ठीक छ, फेरि, उनले हामीलाई भने >
< start="1052.785" dur="6.072"> विश्वासका मानिसहरू, त्यसैले हामी विश्वास गर्छौं >
< start="1055.553" dur="4.071"> प्रार्थना र हामीको शक्तिमा >
< start="1058.99" dur="2.703"> भएको छ, तपाईंलाई थाँहा छ, प्रार्थना गर्दै >
< start="1059.758" dur="2.669"> उनको। >
< start="1061.827" dur="3.87"> उनी एक कडा महिला, पनि, र >
< start="1062.561" dur="6.239"> उनी - म उनीसँग झगडा गर्छु भनेर विश्वास गर्दछु >
< start="1065.83" dur="4.938"> उनको, तर तपाईलाई थाहा छ, हामी हौं >
< start="1068.933" dur="2.87"> केवल हातमा यो राख्ने >
< start="1070.902" dur="2.536"> अब प्रभु ठीक हुनुहुन्छ। >
< start="1071.937" dur="3.036"> हामी वास्तवमै केही पनि होइनौं >
< start="1073.571" dur="1.735"> हामी गर्न सक्दैनौं >
< start="1075.106" dur="0.868"> THERE। >
< start="1075.44" dur="2.002"> हामी उनलाई हेर्न सक्दैनौं। >
< start="1076.108" dur="3.236"> हामीसँग निर्भर छौं >
< start="1077.575" dur="3.27"> कम्युनिकेसन। >
< start="1079.478" dur="3.736"> र म भन्न सक्दछु सुविधा छ >
< start="1080.978" dur="2.937"> तिनीहरूको सर्तहरूमा उत्कृष्ट पारियो >
< start="1083.348" dur="2.302"> अमेरिका संग कुराकानी, मा >
< start="1084.048" dur="2.27"> जेलको साथ खास। >
< start="1085.784" dur="2.268"> हामी केहि सोध्न सक्दैनौं >
< start="1086.451" dur="2.536"> अझ राम्रो। >
< start="1088.186" dur="1.268"> तर यो पर्याप्त छैन जस्तो हुँदै छ >
< start="1089.121" dur="2.168"> केहि देख्नको लागि। >
< start="1089.588" dur="3.87"> >> ठीक। >
< start="1091.423" dur="3.57"> >> हामी तपाईलाई धेरै पछी धन्यवाद दिन्छौं >
< start="1093.592" dur="1.901"> यस अवधिमा हामीसँग बोल्दै >
< start="1095.126" dur="0.834"> DIFFICULT TIME। >
< start="1095.627" dur="4.004"> >> धन्यबाद। >
< start="1096.094" dur="4.271"> >> हामी छिटो जाँच्दैछौं >
< start="1099.764" dur="1.101"> प्राप्ति र राम्रो स्वास्थ्य >
< start="1100.498" dur="1.635"> सम्पूर्ण परिवार। >
< start="1100.999" dur="1.535"> >> धन्यवाद, लाइन। >
< start="1102.267" dur="0.734"> धन्यवाद। >
< start="1102.667" dur="1.669"> >> धन्यबाद। >
< start="1103.134" dur="2.437"> >> र अब वाशिंगटन, कहाँ >
< start="1104.469" dur="3.47"> कONG्ग्रेस अहिले पनि हथौड़ा गर्दैछ >
< start="1105.704" dur="3.536"> त्यो $ २ ट्रिलियनको विवरण >
< start="1108.072" dur="2.837"> आर्थिक बचत गर्न बिल दिनुहोस्। >
< start="1109.374" dur="3.137"> सेनेट एक सम्झौता पुगेको >
< start="1111.042" dur="3.07"> स्वीपिंग डिलमा अधिक >
< start="1112.644" dur="2.936"> त्यो विश्वास प्रदान गर्नेछ >
< start="1114.245" dur="2.604"> लाखौं व्यक्तिलाई कठोर हिट द्वारा >
< start="1115.713" dur="1.836"> सबैभन्दा धेरै व्यवसायहरूको बन्द, >
< start="1116.982" dur="2.168"> प्रत्यक्ष भुक्तानहरू सम्मिलित गर्दै >
< start="1117.683" dur="3.603"> धेरै अमेरिकीहरू। >
< start="1119.284" dur="3.27"> तर सेनेट कुनै हिट थियो >
< start="1121.419" dur="4.605"> तिनीहरू प्राप्त गर्न को दौडको रूपमा रोडबल्क >
< start="1122.687" dur="5.339"> अमेरिकी मतदान जारी राख्नुहोस् >
< start="1126.157" dur="7.341"> पर्खनु। >
< start="1128.16" dur="6.105"> एबीसी समाचार छापा गोरा घर >
< start="1133.631" dur="1.435"> CORRESPONDENT जोनाथन कार्ल छ >
< start="1134.399" dur="1.268"> नागोशनमा भर्खरको। >
< start="1135.2" dur="1.267"> >> रिपोर्टर: आज राती >
< start="1135.8" dur="1.602"> कांग्रेसनल नेताहरू आशा गरिरहेका छन् >
< start="1136.601" dur="1.969"> सबैभन्दा ठूलो आर्थिक पास गर्न >
< start="1137.535" dur="2.636"> रिलीफ अमेरिकी इतिहासमा बिल। >
< start="1138.703" dur="1.802"> >> एक लडाई हाम्रो आयो >
< start="1140.305" dur="1.334"> शोरहरू। >
< start="1140.638" dur="5.139"> हामी यसलाई खोजेनौ। >
< start="1141.773" dur="5.405"> हामी यो चाहँदैनौं। >
< start="1145.911" dur="2.034"> तर अब हामी यसलाई जित्न गइरहेका छौं। >
< start="1147.311" dur="4.105"> >> रिपोर्टर: P २ को भागको रूपमा >
< start="1148.079" dur="6.174"> ट्रिलियन डिल, पीपुल्स ईर्निंग >
< start="1151.55" dur="8.675"> $ 75,000 एक वर्ष वा कम प्राप्त हुनेछ >
< start="1154.386" dur="8.441"> A $ 1,200 चेक प्लस $ 500। >
< start="1160.359" dur="4.237"> ती कमाई $ 99,000 मा >
< start="1162.96" dur="3.137"> वर्ष एक सानो चेक प्राप्त गर्नेछ। >
< start="1164.729" dur="2.636"> >> मद्दत तरीकामा छ। >
< start="1166.231" dur="2.469"> द्रुत सहायता, ठूलो सहयोग। >
< start="1167.499" dur="2.469"> >> रिपोर्टर: एलिजाबेथ को लागी, A >
< start="1168.833" dur="2.37"> हराउन एन्जलसमा RIT, IT'S >
< start="1170.101" dur="2.369"> एकैछिन पनि। >
< start="1171.336" dur="3.604"> >> मलाई थाहा हुनु पर्छ कि म गइरहेको छु >
< start="1172.604" dur="2.603"> ठीक छ र त्यसैले मेरो बच्चाहरु हुनेछ >
< start="1175.073" dur="1.768"> BE >
< start="1175.34" dur="1.802"> यदि हामी बिरामी हौं भने >
< start="1176.975" dur="1.468"> अब। >
< start="1177.275" dur="2.569"> >> रिपोर्टर: बिल अन्तर्गत >
< start="1178.576" dur="3.003"> मानिसहरू अनमोल प्राप्त गर्नेछन् >
< start="1179.978" dur="3.27"> T E हप्ताहरूका लागि लाभहरू >
< start="1181.712" dur="3.037"> २ 26 को स्थापना गर्नुहोस्, र आकार >
< start="1183.381" dur="3.27"> एक अनमोल चेक अप हुनेछ >
< start="1184.883" dur="2.435"> चार महिनासम्म $ 600 द्वारा। >
< start="1186.785" dur="2.368"> त्यहाँ सानो को लागी पनि मद्दत >
< start="1187.452" dur="3.204"> व्यवसायहरू। >
< start="1189.287" dur="3.637"> डायन र LLY स्वामित्वको पसल >
< start="1190.789" dur="4.27"> उत्तर क्यारोलिना। >
< start="1193.058" dur="4.037"> >> हामी सम्भवतः 20-प्लस थियो >
< start="1195.193" dur="3.27"> घटनाहरू रद्द गर्नुहोस् वा पोष्ट गर्नुहोस्। >
< start="1197.229" dur="3.503"> धेरै विवाहहरू। >
< start="1198.597" dur="4.07"> >> रिपोर्टर: बिल ए समावेश गर्दछ >
< start="1200.866" dur="2.835"> $ 7$7 बिलियन PROण कार्यक्रम को लागी >
< start="1202.8" dur="3.404"> थोरै कारोबार गर्ने व्यक्तिले Lण नलिएको >
< start="1203.835" dur="4.972"> तिनीहरूका कामदारहरू बन्द। >
< start="1206.338" dur="3.403"> र FOR 500 बिल को लागी ठूलो >
< start="1208.94" dur="1.502"> हार्ड-हिटमा कर्पोरेसनहरू >
< start="1209.875" dur="2.468"> इंडस्ट्रीज एयरलाइन्स मनपर्दछ र >
< start="1210.575" dur="3.738"> होटलहरू >
< start="1212.477" dur="3.237"> त्यहाँ $ १०० भन्दा बढि छ >
< start="1214.446" dur="2.502"> अस्पताल र अस्पतालको लागि सहयोगमा बिल >
< start="1215.847" dur="2.269"> स्वास्थ्य केयर प्रणाली, र पैसा >
< start="1217.081" dur="4.271"> तिनीहरूको तथ्या OF्कहरू मद्दत गर्न >
< start="1218.249" dur="5.139"> घाटा। >
< start="1221.486" dur="2.303"> >> र जोन कार्ल अब हामीलाई सामिल हुन्छन् >
< start="1223.522" dur="1.868"> वाशिंगटन। >
< start="1223.922" dur="3.103"> जोन, त्यसोभए स्ट्यान्ड गर्नुहोस् >
< start="1225.524" dur="2.803"> अब यसमा एक समय भोटमा अधिकार दिनुहोस् >
< start="1227.159" dur="2.602"> बिल र राष्ट्रपति के हो >
< start="1228.46" dur="1.701"> यो पालनाको बारेमा भन्दै >
< start="1229.894" dur="3.103"> अन्तिममा? >
< start="1230.295" dur="4.805"> >> ठीक छ, यो मन पर्छ यो अन गरिरहेको छ >
< start="1233.131" dur="3.47"> औसत केही अन्तिम-मिनेट >
< start="1235.233" dur="3.236"> HICCUPS त्यहाँ अफरको साथ छन् >
< start="1236.735" dur="3.77"> मुख्य कानुनीकरणका आधारहरू, तर >
< start="1238.603" dur="3.237"> मेरो संवेदना यो चलिरहेको छ >
< start="1240.638" dur="3.303"> तर्फ पासवर्ड, यदि आज छैन >
< start="1241.973" dur="5.138"> सेनेटमा टमोर्रोद्वारा। >
< start="1244.075" dur="4.004"> र त्यसपछि घर अनुसरण गर्नेछन् >
< start="1247.245" dur="2.102"> छोटो छोटो पछि। >
< start="1248.212" dur="2.336"> >> र धेरै अमेरिकीहरू छन् >
< start="1249.48" dur="1.468"> फ्रिस्ट्रेटेड कि यो लिदैछ >
< start="1250.682" dur="2.069"> धेरै पछि। >
< start="1251.082" dur="3.371"> म एउटा चार्ट राख्न चाहन्छु यदि हामी >
< start="1252.884" dur="3.304"> त्यो देखाउन सक्नुहुन्छ कि मोर्गन स्टेन्ली >
< start="1254.586" dur="2.903"> MIL लाख भन्दा बढीको पूर्वानुमान >
< start="1256.321" dur="1.935"> अमेरिकीहरूले फाइल गर्न सक्छन् >
< start="1257.622" dur="2.936"> बितेको समयमा बितेको दाबी >
< start="1258.39" dur="3.77"> हप्ता >
< start="1260.692" dur="2.435"> कांग्रेसलाई बुझ्दछ >
< start="1262.293" dur="1.568"> तत्काल त्यो धेरै अमेरिकी >
< start="1263.261" dur="2.235"> भावनाहरू छन् र तिनीहरूलाई सहयोग चाहिन्छ >
< start="1263.995" dur="3.037"> अहिले? >
< start="1265.63" dur="2.102"> >> ठीक छ, मँ थाहा छैन >
< start="1267.165" dur="1.835"> सबै कांग्रेस मा >
< start="1267.866" dur="2.102"> बुझ्दछु कि, तर म >
< start="1269.133" dur="1.902"> खासै विश्वासका आधारमा >
< start="1270.101" dur="2.87"> नेताहरूले बुझ्दछन् कि। >
< start="1271.169" dur="3.304"> म मतलब, LINSEY, यदि तपाईं लिनुहुन्छ >
< start="1273.104" dur="4.471"> पछाडि जानुहोस् र हेर्नुहोस् के हो >
< start="1274.606" dur="5.672"> यहाँ खुशी हुँदैछ, यो एक $ २ हो >
< start="1277.708" dur="4.005"> ट्रिलियन आर्थिक रिकवरी बिल। >
< start="1280.412" dur="2.002"> यो भन्दा धेरै ठूलो छ >
< start="1281.847" dur="2.301"> क EV्ग्रेसले कहिले पास भयो >
< start="1282.547" dur="2.536"> पहिले। >
< start="1284.282" dur="3.27"> तपाईंले कम्बर्सन >
< start="1285.216" dur="5.106"> औटो बेलआउटको साथ। >
< start="1287.686" dur="5.205"> यो एक हो - यो एउटा ठूलो हो >
< start="1290.455" dur="4.104"> यहाँ अन्तर्क्रिया गर्दै, TR २ ट्रिलियन >
< start="1293.024" dur="4.238"> र यो पास गर्दै छ >
< start="1294.692" dur="3.337"> काONG्ग्रेसल स्ट्यान्डर्डहरूसँग >
< start="1297.395" dur="2.202"> लाइटनिंग गति। >
< start="1298.163" dur="2.735"> यस्ता अनियमित सन्दर्भमा >
< start="1299.731" dur="2.836"> लाभ, यो एक मुख्य विशेषता >
< start="1301.032" dur="2.636"> बिल, जसरी मैले मन्तव्य गरेको थिएँ >
< start="1302.7" dur="2.67"> समयको लम्बाइ विस्तार गर्दै >
< start="1303.802" dur="3.169"> त्यो मान्छे सक्षम हुन सक्छ >
< start="1305.504" dur="3.67"> अनपेक्षित, तर पनि थप्दै >
< start="1307.105" dur="4.904"> EM 600 कि अनियमित जाँच गर्नुहोस् >
< start="1309.307" dur="4.337"> प्रत्येक महिना चार महिनाको लागि। >
< start="1312.143" dur="4.138"> त्यसो भए - यो एक ठूलो बिल हो। >
< start="1313.778" dur="4.738"> आईटीले विस्तृत ब्यापारिसन गर्दछ >
< start="1316.414" dur="3.237"> कांग्रेस मा समर्थन, तर केही छैन >
< start="1318.65" dur="1.735"> सँधै द्रुत रूपमा उद्धृत गर्छ >
< start="1319.784" dur="2.069"> तपाईलाई यो क्यापिटलमा मनपर्‍यो >
< start="1320.518" dur="3.804"> HILL। >
< start="1321.987" dur="2.635"> >> त्यो सही छ। >
< start="1324.455" dur="0.968"> ल। >
< start="1324.755" dur="1.535"> जोनाथान कार्ल अमेरिका को लागी >
< start="1325.556" dur="1.302"> IN WASHINGTON, DC >
< start="1326.424" dur="1.001"> धन्यवाद, जॉन। >
< start="1326.991" dur="3.204"> >> धन्यबाद। >
< start="1327.559" dur="4.071"> >> र जब हामी पछाडि आउछौं >
< start="1330.328" dur="2.403"> भिडियो तूफान चेसर्स ट्रिफाइ गर्दै >
< start="1331.763" dur="3.737"> डगिंग डेब्रिस एक टोरनाडो पछि >
< start="1332.864" dur="3.337"> दक्षिण मार्फत रिप्स। >
< start="1335.634" dur="2.101"> >>> प्रिन्स चार्ल्स परीक्षण >
< start="1336.334" dur="2.102"> कोरोनाभाइरसका लागि सकारात्मक। >
< start="1337.869" dur="2.102"> कसरी उसको नजिक भयो? >
< start="1338.569" dur="4.405"> क्विन? >
< start="1340.105" dur="4.003"> >>> र हामी एक कूलर हेर्नेछौं >
< start="1343.108" dur="1.701"> प्रभाव मा गुप्त -१। >
< start="1344.242" dur="1.335"> इमरजेन्सी सानो छ >
< start="1344.942" dur="0.635"> व्यवसायहरू। >
< start="1485.817" dur="3.37"> >>> त्यो भन्दा बढि मेरो लागि >
< start="1487.652" dur="2.102"> मेरा सहकर्मीहरूको 30० वटा साथ >
< start="1489.32" dur="3.303"> औपचारिक ढंग बन्द >
< start="1489.887" dur="4.438"> INDEFINITELY। >
< start="1492.757" dur="3.871"> कम्पनीमा शून्य जवाफ थियो >
< start="1494.459" dur="4.271"> हाम्रो प्रश्नहरू को कुनै पनि, यसै गरी >
< start="1496.761" dur="2.269"> यो जान कती लामो जान्छ? >
< start="1498.863" dur="1.402"> को लागि? >
< start="1499.164" dur="2.201"> यस LAYOFF पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्दछ >
< start="1500.398" dur="2.402"> हाम्रो बाँच्ने तरिका। >
< start="1501.499" dur="3.403"> तपाइँ जान्नुहुन्छ, यो गाह्रो लाग्छ >
< start="1502.933" dur="4.338"> अब दुई आय प्राप्त गर्नुहोस्, तर अब >
< start="1505.035" dur="3.872"> ममाथि भरोसा राख्नको लागि योग्य हुन >
< start="1507.404" dur="3.437"> साझेदारी पूर्ण अनसेटिLIN छ। >
< start="1509.04" dur="2.836"> तपाईंलाई थाहा छ, तपाईं सोध्नुहोस् >
< start="1510.975" dur="2.502"> आफैलाई, हामी अब गइरहेका छौं >
< start="1512.009" dur="2.837"> खाना किन्नको लागि पर्याप्त छ? >
< start="1513.611" dur="2.803"> हामी भुक्तानी गर्न सक्षम भइरहेका छौं >
< start="1514.979" dur="1.769"> हाम्रो भाडा अन्तमा >
< start="1516.548" dur="2.235"> महिना? >
< start="1516.881" dur="3.871"> हामी सक्षम हुन गइरहेका छौं >
< start="1518.917" dur="2.936"> अफफोर्ड कार भुक्तानहरू, बीमा? >
< start="1520.885" dur="2.803"> कुनै पनि कर्मचारीलाई जुन त्यो हो >
< start="1521.986" dur="3.938"> ध्यान दिनुहोस् LAYOFFS, मेरो सल्लाह >
< start="1523.821" dur="5.005"> तपाइँ खुला र रूपमा हुनु पर्छ >
< start="1526.057" dur="3.136"> तपाईका रोजगारदाताहरूसँग नै आदर गर्नुहोस् >
< start="1528.959" dur="2.169"> POSSIBLE >
< start="1529.326" dur="4.706"> तिनीहरूलाई मार्गनिर्देशन दिनुहोस्। >
< start="1531.262" dur="4.138"> जसरी उनीहरुलाई सहयोग दिनुहोस् >
< start="1534.165" dur="2.47"> उनीहरूलाई आवश्यक रूपमा आवश्यक छ >
< start="1535.533" dur="2.87"> दिनको अन्त्यमा, >
< start="1536.768" dur="4.004"> यदि हामी बुझ्छौं कि तपाईं के हुनुहुन्छ >
< start="1538.536" dur="3.037"> यसका माध्यमबाट जाँदैछ, र हामी सबैलाई सोध्छौं >
< start="1540.905" dur="1.369"> फिर्ती त्यो हो जुन तपाईं बुझ्नुहुन्छ >
< start="1541.706" dur="3.069"> हामी के माध्यम बाट जाँदैछौं >
< start="1542.407" dur="3.704"> स्वागत छ। >
< start="1544.909" dur="3.537"> >> सबै द्वारा धेरै बन्धित >
< start="1546.244" dur="4.104"> यो र केहि खोज्दै >
< start="1548.579" dur="3.171"> क C्ग्रेस अन्तिम रूपमा प्रतिस्पर्धा >
< start="1550.482" dur="1.868"> त्यो $ २ ट्रिलियन आर्थिक >
< start="1551.883" dur="2.569"> उत्तेजक योजना। >
< start="1552.484" dur="3.203"> तिनीहरू प्राप्त गर्न दौडिरहेका छन् >
< start="1554.586" dur="3.27"> व्यवसायहरूलाई धेरै आवश्यक छ >
< start="1555.82" dur="2.435"> त्यो 500 भन्दा कम रोजगार >
< start="1557.989" dur="2.569"> कामदारहरू। >
< start="1558.389" dur="4.004"> अमेरिकाको MIL० मिलियन सानो >
< start="1560.691" dur="3.57"> क्याटरिO शपका व्यवसायहरू, >
< start="1562.526" dur="4.872"> वेब डिजाईन एफआईआरएम, बुकस्टोर >
< start="1564.395" dur="5.839"> र, हो, इभान आज्ञा क्लब्स। >
< start="1567.532" dur="6.206"> डेभन ड्वायर पत्ता लगायो >
< start="1570.367" dur="4.138"> कोरोनाभाइरस टोल लिदैछ >
< start="1573.871" dur="3.804"> ती जोहरु प्राथमिक उद्देश्यमा >
< start="1574.639" dur="3.803"> हामीलाई हाँसो बनाउनु हो। >
< start="1577.808" dur="1.969"> >> रिपोर्टर: स्ट्यान्ड-यूपी आज्ञा छ >
< start="1578.576" dur="1.602"> राष्ट्रको चुपचापमा जानुहोस् >
< start="1579.911" dur="0.834"> ठूला >
< start="1580.311" dur="1.702"> >> यो रमाईलो छैन। >
< start="1580.878" dur="2.136"> त्यो स्पष्ट हुनु हुँदैन। >
< start="1582.146" dur="3.27"> >> रिपोर्टर: महामारी नम्बर >
< start="1583.147" dur="4.605"> सानो व्यवसायहरुका लागि जोक >
< start="1585.549" dur="3.638"> ALSON JAFFE जस्तो छ जो भयो >
< start="1587.885" dur="2.97"> मानिसहरूलाई उनीहरूको सहयोगमा हाँसो >
< start="1589.32" dur="2.736"> उनको डीसी कमेडी क्लब मा तनाव >
< start="1590.988" dur="3.003"> करीव २० बर्षको लागि। >
< start="1592.189" dur="4.371"> >> यो स्वस्थ हुनको लागि पनि छैन >
< start="1594.124" dur="4.939"> कुल डर र आतंकमा, तपाइँ >
< start="1596.694" dur="2.836"> थाँहा छ, यो अधिक गर्न गइरहेको छ >
< start="1599.197" dur="0.701"> तपाईंलाई हानि। >
< start="1599.664" dur="1.668"> >> हो। >
< start="1600.031" dur="3.069"> >> भाइरस दुखमा गइरहेको छ >
< start="1601.466" dur="3.036"> तपाईं, तर त्यो महसुस गर्न गइरहेको छ >
< start="1603.234" dur="2.336"> तपाइँलाई पनि चोट पुर्‍याउनुहोस्। >
< start="1604.636" dur="2.402"> >> रिपोर्टर: NOVEL पछि >
< start="1605.703" dur="3.771"> कोरोनाभाइरस हिट, उनले रद्द गर्नुभयो >
< start="1607.171" dur="5.005"> अपकमिंग ऐक्टहरू, फिर्ती टिकहरू >
< start="1609.607" dur="3.537"> र उनको सबै 50 बाहिर >
< start="1612.309" dur="1.202"> कर्मचारीहरू, समावेश सहित >
< start="1613.278" dur="3.003"> हसबन्ड। >
< start="1613.645" dur="4.404"> >> हामी जान्दछौं तर म आउँदैछु >
< start="1616.414" dur="4.371"> JUST, तपाइँ जान्नुहुन्छ, यो गर्नुभयो र उहाँ >
< start="1618.182" dur="3.404"> भन, ठीक छ, यो पहिलो हो >
< start="1620.918" dur="1.702"> समय मैले यस महिना राखेँ, हो >
< start="1621.719" dur="2.302"> तपाईं जानुहुन्छ। >
< start="1622.754" dur="3.203"> तपाईलाई के हुन्छ >
< start="1624.154" dur="2.637"> कमेडी क्लब र विवाहमा काम गर्नुहोस् >
< start="1626.09" dur="3.603"> एक COMEDIAN। >
< start="1626.925" dur="3.169"> तिनीहरू जस्तै छन् - जुन >
< start="1629.827" dur="1.235"> मजाको थियो। >
< start="1630.227" dur="2.47"> SO म SAD थियो र त म हाँसे >
< start="1631.195" dur="2.569"> र तब म मन पराउँछु, सबै ठीक, >
< start="1632.831" dur="3.035"> हामी यसलाई मार्फत प्राप्त गर्दछौं। >
< start="1633.898" dur="3.404"> यो एक रातको भयो। >
< start="1636" dur="2.169"> यो भएको थियो - म मात्र - शब्द >
< start="1637.435" dur="3.67"> त्यो मसंग बोल्दै र भनिरहेछु >
< start="1638.303" dur="3.97"> होर्फिक छ। >
< start="1641.239" dur="2.402"> >> रिपोर्टर: धेरै अमेरिकी सानो >
< start="1642.407" dur="2.835"> व्यवसायिकहरू भन्छन् उनीहरू धेरै छन् >
< start="1643.774" dur="2.47"> बचाउको बारेमा चिन्तित। >
< start="1645.376" dur="3.17"> अनुभवहरू विश्वास मानेर >
< start="1646.377" dur="3.737"> ती डरहरू डरलाग्दो छ >
< start="1648.679" dur="2.97"> अहिले अमेरिकी अर्थव्यवस्था स्थिर गर्दै >
< start="1650.248" dur="3.203"> नि: शुल्क मा। >
< start="1651.783" dur="3.903"> >> यो संकट एक हो >
< start="1653.584" dur="2.836"> सबैभन्दा खराब चीजहरू जुन म सधैँ देखेको छु >
< start="1655.819" dur="2.103"> सानो कारोबार। >
< start="1656.554" dur="2.069"> >> रिपोर्टर: क्यारेन मिलहरू एलईडी >
< start="1658.056" dur="1.668"> अमेरिकी लघु व्यवसाय >
< start="1658.756" dur="3.37"> महान माध्यम बाट प्रशासन >
< start="1659.858" dur="3.702"> प्राप्ति र प्राप्ति। >
< start="1662.26" dur="4.904"> >> आईटी वास्तवमा टाढा बाहेक >
< start="1663.694" dur="4.839"> हामीले २०० IN मा भएको समस्या >
< start="1667.298" dur="2.903"> र यसको कारणले आधा हुन्छ >
< start="1668.666" dur="2.169"> मानिसहरू जो यस देशमा काम गर्छन् >
< start="1670.335" dur="1.467"> सानो वा सानो को लागी काम >
< start="1670.969" dur="3.236"> व्यवसाय। >
< start="1671.936" dur="5.239"> आधा हाम्रो नौकरी छ। >
< start="1674.339" dur="3.17"> र तिनीहरूले धेरै कम नगद छ >
< start="1677.308" dur="2.836"> BUFFERS। >
< start="1677.642" dur="3.103"> औसतमा, तिनीहरू २ 26 को बारेमा छन् >
< start="1680.277" dur="2.003"> दिनको क्यास >
< start="1680.879" dur="4.637"> >> त्यसैले यो वास्तवमै एक हो - यो >
< start="1682.413" dur="3.971"> बाँच्नको लागि वास्तवमै एक दौड हो। >
< start="1685.65" dur="2.068"> >> बिल्कुल। >
< start="1686.517" dur="2.569"> जब तपाईं नकद बाहिर भाग्नु हुन्छ >
< start="1687.852" dur="1.701"> सानो व्यापारको रूपमा, तपाईं हुनुहुन्छ >
< start="1689.22" dur="2.202"> मरेको। >
< start="1689.687" dur="3.937"> >> रिपोर्टर: क्यास क्रन्च >
< start="1691.555" dur="2.87"> WORRIES ADAM, एक प्रयोग गरिएको बुकस्टोर >
< start="1693.758" dur="2.202"> DC मा मालिक >
< start="1694.559" dur="2.502"> उनले केवल एउटा प्रमुख पूर्ण गरे >
< start="1696.093" dur="3.003"> उनको पसल र यसको नविकरण >
< start="1697.195" dur="4.638"> सानो रिजर्भमा बचत गर्दै। >
< start="1699.23" dur="4.004"> >> मान्छेहरू आउँदैछन् >
< start="1701.966" dur="5.138"> स्पेसको लागि आवश्यक छ >
< start="1703.367" dur="5.005"> स्वास्थ्य र सुरक्षा, तर यो >
< start="1707.237" dur="2.203"> नाटकीय रूपमा बन्द छ। >
< start="1708.506" dur="2.802"> >> नाटक कसरी छ >
< start="1709.574" dur="2.302"> व्यवसाय बन्द ड्रप? >
< start="1711.442" dur="1.068"> %०%? >
< start="1712.01" dur="2.401"> %०%? >
< start="1712.644" dur="2.068"> >> म सम्भवतः बन्द गर्न चाहन्छु >
< start="1714.545" dur="1.535"> % 75%। >
< start="1714.845" dur="2.102"> >> रिपोर्टर: उनले चारवटा बन्द छ >
< start="1716.213" dur="1.869"> यस महिनालाई रोजगार दिनुहोस्। >
< start="1717.081" dur="3.236"> उहाँ सबै गरिरहनु भएको छ >
< start="1718.216" dur="3.737"> तीन अन्य पेरलमा। >
< start="1720.451" dur="3.504"> उनी लिने बारे अनन्त छन् >
< start="1722.086" dur="2.603"> नयाँ Wण संग अधिक ,ण, तर >
< start="1724.088" dur="2.169"> भन्छन् कि नयाँ प्रोत्साहन योजना >
< start="1724.823" dur="3.402"> मद्दत। >
< start="1726.391" dur="3.336"> >> आईटी जस्तो लाग्न सक्छ >
< start="1728.359" dur="2.102"> हुन्छन्, जुन मलाई लाग्छ >
< start="1729.86" dur="2.069"> महत्त्वपूर्ण तिनीहरू प्राप्त गर्दै >
< start="1730.594" dur="1.769"> छोटा प्रविधिको सानो >
< start="1732.063" dur="0.967"> व्यवसायहरू। >
< start="1732.496" dur="2.303"> >> रिपोर्टर: कONG्ग्रेस छ >
< start="1733.164" dur="3.103"> SE AN$० भन्दा बढी पठाउनको लागि अनुभवी >
< start="1734.932" dur="2.57"> बिलियन आपातकालीन Lण मा >
< start="1736.4" dur="2.836"> लघु व्यवसायिकहरू र A सँग >
< start="1737.635" dur="4.905"> प्रमुख PERK। >
< start="1739.37" dur="4.138"> तिनीहरू पछाडि भुक्तान गर्न सक्दैनन् >
< start="1742.673" dur="4.471"> सरकार यदि तिनीहरू पैसा प्रयोग गर्छन् >
< start="1743.641" dur="4.271"> भाडा तिर्न वा तिनीहरूका कामदारहरूलाई। >
< start="1747.278" dur="3.304"> >> मँ लिन्छु कि कुनै पनि दिन सम्झौता >
< start="1748.045" dur="4.371"> हामीलाई ती कार्यहरू गर्न अनुमति दिनुहोस् >
< start="1750.715" dur="2.102"> Bण लिनेहरू तिनीहरू हुनेछन् >
< start="1752.55" dur="1.401"> क्षमा गर्नुहोस्। >
< start="1752.95" dur="2.769"> >> रिपोर्टर: उनी मध्ये एक छ >
< start="1754.085" dur="4.304"> केवल महिला-स्वामित्व डिस्टिलियर्स भित्र >
< start="1755.853" dur="3.571"> विश्व >
< start="1758.523" dur="2.435"> उनी उनको शिल्प भोड्का र बनाउँछिन् >
< start="1759.557" dur="2.603"> को छायाँ मा BOBON >
< start="1761.091" dur="3.371"> अमेरिकी क्यापिटल जहाँ उनले प्रयोग गरे >
< start="1762.293" dur="3.937"> सेनाको प्रमुख को रूप मा काम >
< start="1764.595" dur="3.237"> कONG्ग्रेसवोमन गाभी गिफर्डहरू। >
< start="1766.364" dur="3.771"> >> क्राइसिस मैनेजमेन्ट मेरो भयो >
< start="1767.966" dur="3.436"> जीवनको कलिंग र, तपाईलाई थाहा छ, >
< start="1770.268" dur="2.335"> स्ट्याइ C कलम निश्चित रूपमा हुन्छ >
< start="1771.535" dur="4.004"> महत्वपूर्ण कारक। >
< start="1772.737" dur="5.405"> कसरी मोमन्तेहरू फेला पार्ने आउट >
< start="1775.673" dur="5.439"> स्पष्ट रूपमा अर्को - तर >
< start="1778.275" dur="5.606"> प्रश्न छोटो आत्मा हो >
< start="1781.245" dur="3.737"> उत्पादकहरू हामीलाई बचाउन मनपराउँछन्? >
< start="1784.015" dur="2.402"> अवलोकन गर्न सकिन्छ। >
< start="1785.116" dur="2.936"> >> रिपोर्टर: अब बचाउनका लागि >
< start="1786.55" dur="3.404"> मतलब हात SANITIZER बनाउने। >
< start="1788.186" dur="3.369"> >> हामी अद्वितीय स्थानमा छन् >
< start="1790.087" dur="3.804"> एक हुनको लागि हातमा छ >
< start="1791.688" dur="2.57"> मुख्य बनाउने हातहरूमा >
< start="1794.025" dur="1.935"> सफा गर्नुहोस्। >
< start="1794.392" dur="3.37"> >> रिपोर्टर: डिस्टिलरी >
< start="1796.093" dur="4.404"> सानो बोल्डहरू बन्द आउट गर्दै >
< start="1797.895" dur="3.47"> होममेड जेल, भर्नुहोस् A >
< start="1800.631" dur="2.169"> 1,000-गैलन अर्डर यो बस >
< start="1801.498" dur="2.169"> डीसी सरकार बाट हप्ता >
< start="1802.933" dur="4.038"> पुलिस र ईएमएस को लागी। >
< start="1803.801" dur="5.673"> >> मानिसहरू तलतिर जान्छन् >
< start="1807.104" dur="4.104"> नि: शुल्क र भाइरस फैलनुहोस्, त्यस्तै >
< start="1809.607" dur="2.002"> म एउटा सानो व्यापारी हुँ जो हो >
< start="1811.342" dur="2.202"> SUFFERING। >
< start="1811.742" dur="3.17"> म धेरै हुन, धेरै खुसी छु >
< start="1813.677" dur="2.836"> सुनिश्चित गर्नुहोस् कि हामी जारी राख्छौं >
< start="1815.045" dur="1.802"> हामी यसलाई मार्दैनौं तब सम्म बन्द गर्नुहोस् >
< start="1816.647" dur="1.034"> THING। >
< start="1816.98" dur="2.37"> >> रिपोर्टर: सेतो घर र >
< start="1817.815" dur="3.137"> केही अर्थशास्त्रीहरू धकेल्छन् >
< start="1819.483" dur="2.736"> व्यवसाय बन्द रूप मा लिफ्ट >
< start="1821.085" dur="2.002"> जति सक्दो चाडो। >
< start="1822.353" dur="3.203"> राष्ट्रपति ट्रम्प लक्ष्य सेट >
< start="1823.22" dur="3.604"> ईस्टरको, अप्रिल १२, हप्ता >
< start="1825.689" dur="3.103"> धेरै सार्वजनिक स्वास्थ्य को अहेड >
< start="1826.957" dur="3.003"> मद्दतहरू सुरक्षित हुन सक्छ। >
< start="1828.926" dur="2.235"> >> के तपाईं समर्थन गर्नुहुन्छ? >
< start="1830.094" dur="2.068"> >> मँ केही भन्न चाहान्दिन। >
< start="1831.295" dur="2.97"> यो सुरक्षित छैन। >
< start="1832.296" dur="3.837"> म चाहन्न - त्यो म हैन >
< start="1834.398" dur="2.169"> मेरो लागि उत्तरदायी सोच्नुहोस् A को रूपमा >
< start="1836.267" dur="1.101"> व्यवसायिक। >
< start="1836.7" dur="1.835"> मलाई थाहा छैन त्यो ट्रम्पको गइरहेको छ >
< start="1837.501" dur="2.77"> त्यो जान्न। >
< start="1838.669" dur="3.103"> म सुन्न चाहन्छु सुन्नुहोस् - मँ >
< start="1840.404" dur="3.237"> डीसी बाट RATHER सुन्न >
< start="1841.906" dur="3.203"> म मुख्य कुरा सुन्न चाहन्छु >
< start="1843.774" dur="2.669"> BOWSER र अन्य DC स्वास्थ्य >
< start="1845.242" dur="2.536"> औपचारिकहरु म उसलाई चाहन्थें। >
< start="1846.577" dur="2.636"> >> के तपाईं यस आतंकमा हेर्दै हुनुहुन्छ? >
< start="1847.912" dur="2.002"> त्यो तपाईं जानुहुन्छ >
< start="1849.346" dur="2.804"> राम्रोको लागि बन्द गर्नुहोस्? >
< start="1850.048" dur="2.835"> >> त्यसोभए, मँ धेरै बाँच्न कोशिस गर्दैछु >
< start="1852.283" dur="1.268"> सकारात्मक >
< start="1853.017" dur="2.202"> म पावरमा विश्वास गर्दछु >
< start="1853.684" dur="3.771"> COMEDY >
< start="1855.353" dur="4.57"> आईटी अवलोकन गर्न निराश छ >
< start="1857.588" dur="4.104"> पूर्ण खाली, तर म त्यो जान्छु >
< start="1860.057" dur="3.437"> हामी सधैं यो हुदैनौं। >
< start="1861.826" dur="3.17"> >> रिपोर्टर: त्यो आत्मा >
< start="1863.627" dur="2.569"> D सँग DETERMINATION A सम्मिलित गरियो >
< start="1865.129" dur="4.204"> सरकारबाट वित्तीय बढावा, >
< start="1866.33" dur="4.071"> ख्यातिप्राप्त ऑप्टिमिज्म को लागी खर्च। >
< start="1869.467" dur="3.203"> एक वित्तीय शरीर झुकाव छोड्नुहोस् >
< start="1870.534" dur="2.804"> भाइरसबाट, लघु व्यवसायहरू >
< start="1872.804" dur="2.502"> बचाउन र जारी राख्न सक्नुहुन्छ >
< start="1873.471" dur="3.603"> फलफूल >
< start="1875.44" dur="3.035"> >> मलाई थाहा छ हामी भर्न सकौं >
< start="1877.207" dur="3.204"> मान्छेहरू फेरि हुन चाहन्छन् >
< start="1878.609" dur="3.437"> यहाँ, त्यो हाँस्न चाहन्छ कि, त्यो >
< start="1880.544" dur="2.669"> हँसिनु पर्छ, र म अगाडि हेर्छु >
< start="1882.18" dur="1.567"> त्यो दिन >
< start="1883.347" dur="1.135"> >> मलाई पनि। >
< start="1883.881" dur="2.102"> >> र आशावादी रूपमा अर्को >
< start="1884.615" dur="1.669"> पछि >
< start="1886.117" dur="0.8"> हो। >
< start="1886.417" dur="2.536"> >> मलाई पनि। >
< start="1887.051" dur="3.37"> >> रिपोर्टर: एबीसी समाचार लाइभ को लागी, >
< start="1889.086" dur="2.803"> म वासनिंगमा डेभन ड्वायर हुँ। >
< start="1890.554" dur="2.269"> >> हो, हामी सबै सर्तमा पर्छौं >
< start="1892.022" dur="1.735"> राम्रो हाँसो प्रयोग गर्नुहोस्। >
< start="1892.957" dur="3.136"> हाम्रो लागी धन्यवाद। >
< start="1893.891" dur="2.503"> हामी अझ धेरै प्राप्त गर्न सक्दछौं >
< start="1896.227" dur="1.001"> INTO। >
< start="1896.527" dur="2.369"> >>> यो अर्को होरिफिक भयो >
< start="1897.361" dur="1.835"> बढि इU्गालीसँग दिन >
< start="1899.029" dur="1.302"> मरेको। >
< start="1899.329" dur="2.169"> आज हामी डाक्टरहरूसँग बोल्छौं >
< start="1900.465" dur="1.868"> ITALY मा। >
< start="1901.632" dur="2.836"> के उनीहरूको अनुहार। >
< start="1902.467" dur="3.269"> के के पाठहरु को लागी उनीहरु छन् >
< start="1904.601" dur="1.769"> यहाँ उनीहरुका सहयोगीहरु >
< start="1906.504" dur="3.17"> >>> त्यहाँ धेरै छ >
< start="1908.238" dur="1.803"> MISINFORMATION यस दौरान >
< start="1909.807" dur="1.569"> OUTBREAK। >
< start="1910.174" dur="1.569"> हामी BREAK तथ्यबाट तल झर्दछौं >
< start="1911.509" dur="0.968"> FICTION। >
< start="1911.876" dur="1.534"> >>> तर पहिलो, हाम्रो TWEET को >
< start="1912.61" dur="4.17"> DAY >
< start="1913.544" dur="4.939"> एप्पलको ठूलो संख्या। >
< start="1916.914" dur="4.104"> >> हामी तपाईंलाई यो बताउन चाहन्छौं >
< start="1918.616" dur="4.905"> बिहान कि एप्पलको स्रोत छ, >
< start="1921.151" dur="3.271"> प्रोक्वार्ड गरिएको छ र १० हो >
< start="1923.654" dur="17.718"> मिलियन मेडिकलमा मास्क गर्दछ >
< start="1924.555" dur="16.817"> संयुक्त राज्य मा कम्युनिटी। >
< start="2024.255" dur="3.77"> >>> हेलो, सबै। >
< start="2026.724" dur="6.139"> म इलिजाबेथ मेजिया हुँ। >
< start="2028.159" dur="5.705"> म एक सर्भर हुँ र भित्र छु >
< start="2032.997" dur="1.168"> लगभग आठ को लागी कम्पनी >
< start="2033.998" dur="1.602"> बर्ष >
< start="2034.298" dur="2.369"> मैले पाठ सन्देश प्राप्त गर्‍यो >
< start="2035.733" dur="1.968"> प्रबन्धक कि रेस्टोरन्ट >
< start="2036.8" dur="2.036"> बन्द हुनेछ। >
< start="2037.835" dur="1.301"> अर्को आउन नभुल्नुहोस् >
< start="2038.969" dur="3.904"> काम >
< start="2039.269" dur="5.339"> घरमै बस। >
< start="2043.007" dur="3.169"> सुरक्षित रहनुहोस्। >
< start="2044.742" dur="3.336"> एचआर हामीलाई अमेरिका जान्न दिनुहोस् रेगर्डिंग >
< start="2046.31" dur="2.502"> LAYOFFS, काम गर्न पछाडि जानुहोस्, >
< start="2048.212" dur="1.801"> SANITIZE, केही, तर यो छ >
< start="2048.946" dur="3.236"> चार दिन भयो। >
< start="2050.147" dur="3.704"> मलाई उत्तरहरू चाहिन्छ। >
< start="2052.316" dur="3.837"> मलाई थाहा छ कि म गइरहेको छु >
< start="2053.985" dur="4.303"> ठीक छ र मेरो बच्चाहरू भइहाल्छ। >
< start="2056.287" dur="2.669"> यदि हामी बिरामी हौं भने >
< start="2058.422" dur="1.201"> अब, हामी स्वास्थ्य छैन >
< start="2059.089" dur="2.202"> बीमा र हामीसँग छैन >
< start="2059.756" dur="2.269"> पैसा >
< start="2061.425" dur="3.737"> ब्यागहरू, स्वास्थ्य बीमा, हामीलाई आवश्यक छ >
< start="2062.159" dur="4.638"> IT >
< start="2065.296" dur="2.836"> >> धेरै धेरै अमेरिकी स्ट्रगलिंग >
< start="2066.93" dur="1.97"> द्वारा अनियमित कारणले >
< start="2068.266" dur="2.702"> COVID-19, र केहि प्रतीक्षा गर्दै >
< start="2069.033" dur="3.337"> कांग्रेसबाट विश्वास गर्नुहोस्। >
< start="2071.102" dur="2.735"> बिलको विवरणहरू हुन् >
< start="2072.503" dur="2.902"> अझै IRONED आउट भइरहेको छ, यो हुनेछ >
< start="2073.97" dur="2.637"> ठूलो हुनुहोस्। >
< start="2075.539" dur="2.135"> त्यसोभए हामी के हेर्छौं >
< start="2076.741" dur="2.602"> नम्बरहरू द्वारा जान्नुहोस्। >
< start="2077.808" dur="4.17"> नजिकैको TR २ ट्रिलिजन सम्बन्ध >
< start="2079.476" dur="4.471"> प्याकेज पछाडि ठूलो हुनेछ >
< start="2082.112" dur="3.037"> । १.4 ट्रिलिजन विच्छेदन >
< start="2084.081" dur="1.968"> पूरा को लागी योजना >
< start="2085.283" dur="2.836"> २०२० मा फेडरल सरकार। >
< start="2086.183" dur="3.703"> यो $ 7$7 भन्दा बढि हो >
< start="2088.252" dur="2.302"> बिलियन स्टिमूलस प्लान पास >
< start="2090.02" dur="3.003"> २०० THE लाई महान लडाई गर्न >
< start="2090.687" dur="4.205"> RECESSION। >
< start="2093.157" dur="3.904"> वर्तमान बिलको केन्द्र >
< start="2095.025" dur="3.07"> प्रत्यक्ष AY ०% को भुक्तानीहरू >
< start="2097.194" dur="2.436"> ER १,२०० को साथ अमेरिकी टेक्सपेयरहरू >
< start="2098.228" dur="4.439"> प्रत्येक व्यक्ति जो कमाउँछन् >
< start="2099.764" dur="6.673"> $ 75,000 भन्दा कम वा4२4०० को लागि >
< start="2102.8" dur="6.44"> CO १,000,००० सम्म कमाईको एक जोडी। >
< start="2106.571" dur="4.503"> र $ 500 सम्म बच्चाहरू थप्नेछ >
< start="2109.373" dur="3.403"> अरू पनि दिनुहोस्। >
< start="2111.208" dur="2.47"> । २IL बिलियन एक मा जान्छ >
< start="2112.909" dur="3.371"> नाटकको विस्तार >
< start="2113.811" dur="4.637"> अनपेक्षित लाभ, अतिरिक्त >
< start="2116.414" dur="3.77"> १ UN हप्ता द्वारा वर्तमान अनियमितता >
< start="2118.582" dur="3.137"> बढावा दिएका लाभहरू। >
< start="2120.318" dur="3.503"> अधिक $ B$ बिलियन जान्छ >
< start="2121.852" dur="4.638"> सानोको लागि आपातकालीन Oणहरू >
< start="2123.954" dur="4.371"> व्यवसायहरू र $ 425 बिल बिल >
< start="2126.624" dur="2.903"> फन्ड गर्नुहोस् र ठूलोमा नगद दिनुहोस् >
< start="2128.458" dur="3.104"> कम्पनीहरू, एएन समावेश गर्दै >
< start="2129.66" dur="3.303"> थप $ 75 बिलियनको लागि >
< start="2131.695" dur="2.637"> उद्योगहरू HIT HARDEST, >
< start="2133.096" dur="3.371"> एयरलाइन र होटलहरू समावेश गर्दै >
< start="2134.465" dur="2.369"> कडा सर्तहरूको साथमा >
< start="2136.6" dur="1.735"> अवलोकन >
< start="2136.967" dur="3.003"> COMPARISON द्वारा, २०० A बेलआउट >
< start="2138.468" dur="3.07"> अमेरिकन अटो उद्योगको >
< start="2140.103" dur="2.603"> पछिल्लोमा $ B० बिलियनको बारेमा खर्च गर्नुहोस् >
< start="2141.672" dur="1.801"> सामान्यतया पैसा तिर्ने को लागि >
< start="2142.839" dur="2.236"> सरकार। >
< start="2143.607" dur="2.803"> हामी सुरक्षित रहनको लागि सुरक्षित रहनेछौं >
< start="2145.208" dur="2.269"> बिलको रूपमा भर्खरको विवरणहरू >
< start="2146.543" dur="3.604"> फाइनलाइज्ड हुन्छ। >
< start="2147.611" dur="3.236"> >>> र हामी अझै धेरै गर्छौं >
< start="2150.281" dur="2.135"> प्राप्त गर्न। >
< start="2150.981" dur="4.104"> अरु क्राइज इमरजेन्सी। >
< start="2152.55" dur="4.704"> P 77 मानिसहरू यसमा फेलिनेछन् >
< start="2155.218" dur="3.071"> FLU-LIKE SYMPTOMS ANDE OFF >
< start="2157.387" dur="1.969"> दक्षिण अमेरिका को कस्ट, >
< start="2158.422" dur="1.735"> फ्लोरिडा गर्नका लागि यसको मार्ग बनाउँदै। >
< start="2159.49" dur="2.702"> जहाजले केहि पनि गर्दैन >
< start="2160.291" dur="4.27"> COVID-१ T परीक्षा बोर्डमा। >
< start="2162.326" dur="3.103"> >>> र क्रसिकल मेडिकल >
< start="2164.695" dur="3.236"> इटालीमा कम आपूर्तिहरू। >
< start="2165.563" dur="3.503"> हामी केहि निर्णयहरु सुन्नेछौं >
< start="2168.065" dur="3.17"> डक्टरहरु त्यहाँ बनाउन को लागी >
< start="2169.199" dur="2.737"> तिनीहरूले आफ्नो वीर लडाई राख्नुहोस् >
< start="2171.368" dur="2.135"> जीवित बचत गर्न। >
< start="2172.069" dur="2.536"> >>> तर पहिले, यहाँ केहि हुन् >
< start="2173.637" dur="2.837"> ट्रेन्डिंग हेडलाईनहरू सक्रिय छन् >
< start="2174.738" dur="1.736"> ABCNEWS.COM। >
< start="2387.418" dur="4.504"> >>> सेनेट सहायता गर्न कार्य गर्दछ >
< start="2390.253" dur="2.37"> यस देशका मानिसहरु >
< start="2392.055" dur="2.236"> यस आँधीबेहरी। >
< start="2392.756" dur="2.636"> >>> क्यापिटोल हिलमा, सेनेट >
< start="2394.424" dur="2.77"> नेताहरू क TO्ग्रेसका लागि चिन्तित छैनन् >
< start="2395.526" dur="3.536"> र व्हाइट हाउस एक पुग्यो >
< start="2397.327" dur="3.37"> एक असीमित ON २ मा सम्झौता >
< start="2399.196" dur="4.004"> ट्रेलि SP प्याकेज पेज खर्च गर्दछ >
< start="2400.83" dur="3.704"> कामदारहरूलाई विश्वास प्रस्ताव गर्नुहोस् >
< start="2403.333" dur="2.102"> व्यवसायिक अन्तर्गत SUPFERING >
< start="2404.668" dur="2.335"> गोप्य १ P प्यान्डिक। >
< start="2405.568" dur="3.571"> >> यो प्रस्ताव, अनपेक्षित >
< start="2407.137" dur="3.437"> बीमामा बीमा हुनेछ >
< start="2409.272" dur="2.837"> सबैभन्दा ठूलो विस्तार >
< start="2410.707" dur="1.735"> अनपेक्षित लाभहरू >
< start="2412.242" dur="1.301"> DECADES। >
< start="2412.576" dur="3.37"> सामाजिक सुरक्षा नेट वाइड >
< start="2413.677" dur="3.904"> लाखौं पकड्न उत्साह दिनुहोस् >
< start="2416.079" dur="2.703"> अमेरिकी कामदारहरू जो हुन् >
< start="2417.714" dur="2.436"> अनपेक्षित वर्चुअल ओभरनेइट। >
< start="2418.916" dur="2.536"> >> त्यो मार्केट अपको लागि हो >
< start="2420.283" dur="2.603"> दोस्रो दृढ दिन, तर >
< start="2421.585" dur="3.203"> लामाकर्मीहरू त्यहाँ जाँदैछन् >
< start="2423.019" dur="3.304"> ड्राफ्ट र रिपोर्टर गर्दै छन् >
< start="2424.921" dur="4.004"> एक खण्डमा भाषा। >
< start="2426.457" dur="3.102"> >> यो बिल तपाईंलाई अधिक तिर्दैन >
< start="2429.059" dur="3.637"> यदि तपाइँ हुनुहुन्थ्यो भने काम गर्न >
< start="2429.693" dur="4.471"> काम गर्दै >
< start="2432.83" dur="2.769"> >> कोभिड १ P प्यान्डिक >
< start="2434.297" dur="2.503"> यसका अग्रि बढाएर जारी राख्नुहोस् >
< start="2435.732" dur="2.669"> एक्रोस अमेरिका र पछाडि। >
< start="2436.934" dur="2.101"> सब भन्दा चाँडो सूचना >
< start="2438.535" dur="3.37"> दर राज्य मा छ >
< start="2439.169" dur="3.47"> लुइसियाना >
< start="2442.039" dur="2.469"> >> हामीमा छौं कि यात्रा >
< start="2442.773" dur="3.17"> धेरै समस्याग्रस्त छ। >
< start="2444.642" dur="4.037"> हामीसँग ग्रोथ दर >
< start="2446.076" dur="3.437"> क्षमता देखीरहेको छ >
< start="2448.812" dur="2.169"> वितरण स्वास्थ्य देखभाल। >
< start="2449.647" dur="2.868"> >> स्वास्थ्य अधिकारीहरु पनि सशस्त्र >
< start="2451.115" dur="1.767"> नयाँमा प्रभाव दर >
< start="2452.649" dur="2.503"> यार्क सिटी। >
< start="2453.016" dur="3.938"> न्यू योर्क, को एपीसेन्टर >
< start="2455.285" dur="3.503"> CONONAVIRUS OUTBREAK, ACCOUNTS >
< start="2457.087" dur="2.769"> यसको आधा भन्दा बढीको लागि >
< start="2458.922" dur="2.803"> राष्ट्रको ,000०,००० केस। >
< start="2459.99" dur="3.003"> राज्य सरकार एन्ड्रयू >
< start="2461.858" dur="4.004"> कुमो भन्छन् उनीका हस्ताक्षरहरू, >
< start="2463.126" dur="4.204"> सोच्नुहोस्, त्यो दृढ अडानमा >
< start="2465.996" dur="1.668"> गृह उपायहरू सुरू हुँदैछन् >
< start="2467.464" dur="1.168"> काम >
< start="2467.797" dur="2.503"> >> न्यू योर्कको मेडिकल परिक्षक >
< start="2468.765" dur="3.571"> टेम्पोररी सेट अप शुरू भयो >
< start="2470.434" dur="3.703"> MANGUES MANHATTAN, TEMPORARY >
< start="2472.469" dur="2.869"> टेन्ट्स र रेफ्रिजरेसन ट्रक, >
< start="2474.271" dur="2.503"> यदि आवश्यक छ भने। >
< start="2475.472" dur="2.035"> न्यू योर्क 30०,००० पुष्टि भएको छ >
< start="2476.907" dur="2.703"> कोरोनाभाइरस केसहरू। >
< start="2477.641" dur="3.603"> अन्य तथ्या AL्कहरू पनि यस्तै छन् >
< start="2479.743" dur="3.637"> परीक्षण विस्तार रूपमा उठ्नुहोस्। >
< start="2481.378" dur="4.705"> >>> CR 77 मानिस बोर्डमा एक क्रस >
< start="2483.514" dur="3.636"> फ्लोरिडा क्षेत्रका लागि शिप हेडिंग >
< start="2486.216" dur="3.104"> फ्लू-जस्तो लक्षणहरूसँग बिरामी छ। >
< start="2487.284" dur="3.67"> >> PASSENGERS तिनीहरू भन्छन् >
< start="2489.453" dur="2.502"> जहाजबाहेक अरू धेरै छैन >
< start="2491.087" dur="2.436"> दस दिन >
< start="2492.089" dur="2.469"> तिनीहरूको भोजन प्रत्यक्ष वितरण गरियो >
< start="2493.657" dur="1.968"> तिनीहरूको रूमहरूमा। >
< start="2494.692" dur="2.034"> उत्तरमा धेरै प्रतीक्षा गर्दै >
< start="2495.759" dur="2.803"> आउने दिनहरू। >
< start="2496.86" dur="3.704"> >> तिनीहरूको 70 को दशकमा र धेरै मानिसहरू >
< start="2498.695" dur="5.072"> यो शिपमा s० दशक। >
< start="2500.697" dur="5.306"> >>> -१-वर्ष पुरानो प्रिन्स चार्ल्स, >
< start="2503.9" dur="3.671"> ब्रिटिश सिंहासनको उत्तराधिकारी >
< start="2506.136" dur="2.068"> चिन्ता लिनु भयो उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ >
< start="2507.705" dur="2.468"> COVID-19 को लागी। >
< start="2508.338" dur="3.036"> ऊ मिलको प्रदर्शन गर्दैछ >
< start="2510.307" dur="2.703"> SYMPTOMS, तर अरू नै रहन्छ >
< start="2511.508" dur="2.436"> राम्रो स्वास्थ्य र उहाँ हुनुहुन्छ >
< start="2513.143" dur="2.469"> घर बाट काम गर्दै >
< start="2514.078" dur="3.202"> अन्तिम दिनहरू प्रयोगको रूपमा। >
< start="2515.745" dur="3.204"> एक स्पोकेस्मैन एडिंग प्रिन्स >
< start="2517.414" dur="3.637"> चार्ल्स 'वाइफ क्यामिला, द >
< start="2519.082" dur="3.604"> CORNWALL को खरीद, पनि छ >
< start="2521.184" dur="1.935"> परीक्षण गरिएको छ तर छैन >
< start="2522.819" dur="3.003"> भाइरस। >
< start="2523.253" dur="4.505"> >> ट्रयाकि SE विभिन्न तूफानहरू। >
< start="2525.956" dur="2.769"> कन्फर्मेड EF-1 टच डाउन >
< start="2527.891" dur="8.442"> मिसिसिपी र इलिनोइस। >
< start="2528.859" dur="8.041"> यी बाहिरबाट समाचारहरू हुन् >
< start="2536.466" dur="3.37"> TUPELO, MISSISSIPPI >
< start="2537.034" dur="3.536"> >> पछाडि स्वागत छ। >
< start="2539.97" dur="2.235">3683 आज इटलीमा हराउँछ >
< start="2540.704" dur="4.037"> एक्लो >
< start="2542.339" dur="5.406"> चिकित्सक र मा नैउर्स >
< start="2544.874" dur="3.638"> फोर्टफ्रन्ट एक भरपर्दो लडाई, >
< start="2547.878" dur="2.602"> तिनीहरूको लाइभ लाइनमा राख्ने >
< start="2548.645" dur="3.37"> को बचत गर्न को लागी को >
< start="2550.613" dur="1.736"> PATIENTS कि उहाँ बाट आउँछ >
< start="2552.149" dur="2.001"> ढोका। >
< start="2552.482" dur="4.304"> म्याग्गी रुली यो रिपोर्ट छ। >
< start="2554.284" dur="4.805"> >> रिपोर्टर: विगत केहीका लागि >
< start="2556.92" dur="3.704"> हप्ता यो भेटियो इटाली हराइरहेको थियो >
< start="2559.222" dur="3.27"> युद्ध अदृष्य शत्रु संग, >
< start="2560.758" dur="3.069"> तर पछिल्ला तीन दिनहरूमा, >
< start="2562.625" dur="1.535"> इटालीका रिपोर्ट गरिएका केसहरू छन् >
< start="2563.96" dur="3.104"> खाली। >
< start="2564.294" dur="6.039"> आशाको लागि एक ग्लिमर >
< start="2567.197" dur="3.904"> परिस्थिति सधैंको लागि डायरेक्ट छ। >
< start="2570.467" dur="2.369"> अधिक 70०,००० संक्रमित, बढी >
< start="2571.234" dur="3.037"> 7,000 मृत। >
< start="2572.97" dur="2.001"> यो एक अन्तर्राष्ट्रिय लिन्छ >
< start="2574.404" dur="2.803"> EFFORT सुरु गर्न सुरु गर्नुहोस् >
< start="2575.105" dur="4.004"> ITALY का केसहरू। >
< start="2577.341" dur="2.168"> चाइनीज उनीहरूको >
< start="2579.242" dur="1.068"> भेन्टिलेटरहरू। >
< start="2579.642" dur="2.169"> रसियनहरूले औषधि निकाले र >
< start="2580.443" dur="2.069"> आपूर्ति। >
< start="2581.945" dur="4.037"> अमेरिकी पोस्ट गरियो >
< start="2582.645" dur="4.005"> फ्रन्ट लाइनहरु। >
< start="2586.116" dur="3.604"> >> हामी केवल समाप्त >
< start="2586.783" dur="3.904"> महिलाको युद्ध, दिदै >
< start="2589.853" dur="2.203"> बिहानका औषधिहरू। >
< start="2590.82" dur="2.37"> हामी उनीहरूलाई जान दिन सक्षम छैनौं >
< start="2592.189" dur="3.136"> का लक्षणहरू सम्म >
< start="2593.323" dur="3.003"> कोरोनाभाइरस समाधान भयो। >
< start="2595.459" dur="2.735"> त्यसोभए उनीहरू यहाँ छन् >
< start="2596.459" dur="2.436"> केहि समय छोड्नुहोस्। >
< start="2598.328" dur="2.636"> जसको लागि चुनौती दिन सकिन्छ >
< start="2599.028" dur="3.971"> उनीहरु। >
< start="2601.098" dur="3.67"> अब हामी भित्र पप हुँदै जान्छौं >
< start="2603.133" dur="2.402"> आईसीयू र तिनीहरूलाई जाँच गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् >
< start="2604.901" dur="2.402"> उनीहरू के गर्दै छन् र कस्तो प्रकारको छन् >
< start="2605.669" dur="2.802"> तिनीहरूलाई आवश्यक छ। >
< start="2607.437" dur="1.702"> >> रिपोर्टर: एक प्रतिस्पर्धी जाति >
< start="2608.605" dur="1.701"> यसका लागि राख्नुहोस् >
< start="2609.272" dur="5.806"> यस लडाईको फोरफ्रन्ट। >
< start="2610.44" dur="5.573"> हरेक मिनेट क्रिटिकल। >
< start="2615.212" dur="2.736"> >> अनुवादक: म त्यो भन्न चाहन्छु >
< start="2616.146" dur="2.169"> हामी हाम्रो अन्त्यमा छौं >
< start="2618.081" dur="1.769"> प्रतिबन्ध >
< start="2618.448" dur="2.636"> हामी सफ्टवेयर गर्दैनौं >
< start="2619.983" dur="2.536"> संसाधन र विशेष स्टाफ >
< start="2621.218" dur="2.603"> सबैबाट अपार्टमेन्ट बनाउनुहोस् >
< start="2622.653" dur="2.168"> ELSE, अब कर्मचारी छन् >
< start="2623.954" dur="1.868"> सिक्न सुरु गर्नुहोस् >
< start="2624.955" dur="2.201"> >> रिपोर्टर: र आपूर्ति संग >
< start="2625.956" dur="2.102"> सधै कम चलिरहेको, सबै >
< start="2627.29" dur="3.037"> निर्णय सल्लाह। >
< start="2628.192" dur="3.536"> यस केसमा, आईटीको मतलब छ >
< start="2630.46" dur="2.536"> अर्डरमा आधारभूत आवश्यकताहरू सुरक्षित गर्दै >
< start="2631.862" dur="6.305"> जीवित बचत गर्न। >
< start="2633.13" dur="7.107"> >> हरेक अस्पताल रासन छ >
< start="2638.301" dur="3.805"> संरक्षणको यी दिनहरूमा, >
< start="2640.37" dur="2.036"> जस्तै मुखौटा, को लागी आवरणहरू >
< start="2642.239" dur="4.237"> जूत्ता। >
< start="2642.539" dur="5.305"> हामी सक्दैनौं, उदाहरणका लागि, DURING >
< start="2646.61" dur="2.001"> हाम्रो शिफ्ट शौचालयमा जानुहोस् >
< start="2647.977" dur="3.304"> किनकि यसले परिवर्तन गर्न सक्दछ >
< start="2648.745" dur="4.604"> र फेरि परिवर्तन गर्न। >
< start="2651.415" dur="3.97"> र यो म कसरी भन्न सक्छु >
< start="2653.483" dur="2.903"> संरक्षणको ठूलो। >
< start="2655.519" dur="2.836"> >> रिपोर्टर: मद्दत दिनुहोस् >
< start="2656.519" dur="2.169"> अरूबाट, यो अझै पनी छैन >
< start="2658.488" dur="1.435"> अत्यन्तै। >
< start="2658.822" dur="5.105"> इटाली पासनर शिप सार्दै >
< start="2660.057" dur="4.604"> एक फ्लोटिंग अस्पतालमा। >
< start="2664.061" dur="2.368"> >> हामी खासै ठाउँहरू पाउँदैनौं >
< start="2664.795" dur="3.003"> सबैका लागि। >
< start="2666.563" dur="2.235"> >> रिपोर्टर: तर यो धेरै छ >
< start="2667.931" dur="3.37"> स्थानहरु जुन बिरामीको ख्याल राख्छन् >
< start="2668.932" dur="2.769"> त्यो को लागी बेड हुन को लागी >
< start="2671.434" dur="1.702"> जानकारी। >
< start="2671.835" dur="2.302"> धेरैको जीवन लिँदै >
< start="2673.27" dur="2.369"> राष्ट्रका क्यारेक्टरहरू। >
< start="2674.271" dur="3.636"> इटालीमा, कम्तिमा DO० डाक्टरहरू >
< start="2675.772" dur="4.004"> मरिसकेपछि आउनुहोस् BREAK। >
< start="2678.041" dur="2.736"> औपचारिक चेतावनी दिईएको थियो A >
< start="2679.909" dur="2.002"> समयको मामला स्प्यान से >
< start="2680.91" dur="3.47"> तिनीहरूको नम्बर स्काइरोकेट, पनि। >
< start="2682.045" dur="4.171"> र तिनीहरू छन्। >
< start="2684.514" dur="2.37"> देश रिपोर्टिST एस्टाउन्डि। >
< start="2686.35" dur="2.502"> संख्या त्याग्नुहोस् >
< start="2687.017" dur="4.304"> लक गर्नुहोस्। >
< start="2688.986" dur="3.102"> करीव ,000०,००० केस, ती मध्येका >
< start="2691.454" dur="3.404"> स्वास्थ्य देखभाल कामदारहरूको हजारौं >
< start="2692.222" dur="3.837"> प्रभावित >
< start="2694.992" dur="2.669"> >> अनुवादक: जब म त्यो गर्छु >
< start="2696.193" dur="2.769"> लिनको १२ घण्टाको साथ >
< start="2697.794" dur="2.369"> तिनीहरूले मलाई कल गर्दै थिए जाँच गर्नुहोस्, म >
< start="2699.095" dur="2.402"> थाहा पाउनुहोस् केहि सही थिएन र >
< start="2700.297" dur="3.003"> त्यो म सकारात्मक थियो। >
< start="2701.631" dur="3.103"> >> रिपोर्टर: यो भिडियो >
< start="2703.433" dur="2.169"> सामाजिक मीडियामा सर्कलिंग, >
< start="2704.867" dur="3.137"> यसको फर्शमा धैर्यताहरू >
< start="2705.735" dur="3.604"> अस्पताल, केहि हृदय कगिंग। >
< start="2708.138" dur="2.836"> FIELD HSPSPALALS कि मन पर्छ >
< start="2709.472" dur="4.138"> तिनीहरू अब युद्ध क्षेत्र मा सम्बन्धित A >
< start="2711.107" dur="3.371"> साधारण हस्ताक्षर त्यहाँ, पनि। >
< start="2713.744" dur="3.436"> र युरोप तयारी को लागी >
< start="2714.611" dur="4.938"> खराब आउन। >
< start="2717.314" dur="2.602"> इटाली प्रमाण हो कि यो हो >
< start="2719.683" dur="2.402"> तात्कालिक >
< start="2720.05" dur="3.77"> त्यो असुविधा देशहरूले अझ बढी प्राप्त गर्दछ >
< start="2722.219" dur="3.07"> परीक्षण, थप बेडहरू, अधिक >
< start="2723.954" dur="5.104"> डक्टरहरु, अधिक उनीहरु लाई आपूर्ति >
< start="2725.422" dur="9.242"> उस्तै उस्तै FATE र >
< start="2729.192" dur="8.475"> उही समान हृदयको काम हेर्नुहोस् >
< start="2734.797" dur="3.571"> कास्केटका दृश्यहरू चुपचाप बसिरहेका छन् >
< start="2737.801" dur="4.037"> आराम गर्नु लाई पल्टेको। >
< start="2738.502" dur="4.104"> >> म्याग्गी रुली हामीलाई अब सम्मिलित हुन्छ। >
< start="2741.972" dur="1.435"> MAGGIE, JUST AWFUL SITUATION >
< start="2742.739" dur="1.701"> त्यहाँ र आराम गर्न चेतावनी >
< start="2743.54" dur="1.534"> संसारका डाक्टरहरुका लागि >
< start="2744.574" dur="2.47"> फ्रन्ट लाइनहरु। >
< start="2745.208" dur="3.837"> अब पुनःप्रदर्शनमा, उनीहरूले सोच्नुहोस् >
< start="2747.177" dur="3.336"> तिनीहरूले केहि गर्न सकेन >
< start="2749.178" dur="2.57"> थप तिनीहरूलाई तयार पार्नुहोस्? >
< start="2750.647" dur="2.903"> >> रिपोर्टर: ये, लाइन, तपाई >
< start="2751.882" dur="2.736"> मलाई थाहा छ, म यी केहि संग स्पोकु >
< start="2753.683" dur="4.371"> आज सुरुका चिकित्सकहरू। >
< start="2754.751" dur="3.937"> दुई मिलियन अस्पताल बाहिर >
< start="2758.187" dur="1.502"> त्यो यत्ति कठोर छ। >
< start="2758.821" dur="2.17"> उनीहरूले मलाई पनि भने >
< start="2759.823" dur="2.869"> कुरा, तिनीहरू संग अधिक थियो >
< start="2761.124" dur="1.869"> समय तयार गर्न, AEAD प्राप्त गर्न >
< start="2762.826" dur="1.368"> यो >
< start="2763.126" dur="2.169"> तिनीहरूले थप बेडहरू चाहिन्छ। >
< start="2764.328" dur="2.568"> उनीहरूले बढि वेंटलिटरहरू चाहिन्छ। >
< start="2765.429" dur="2.201"> उनीहरूले त्यो व्यक्तिको बढी चाहिन्छ >
< start="2767.03" dur="1.868"> संरक्षण उपकरण >
< start="2767.764" dur="2.569"> उनीहरूले बढि डाक्टरहरू चाहिन्छ। >
< start="2769.032" dur="2.135"> अधिक तालिम पाएको नुरसहरू। >
< start="2770.467" dur="2.335"> सबै भन्दा बढी। >
< start="2771.301" dur="2.703"> तिनीहरू केवल थकित छन्। >
< start="2772.936" dur="2.836"> वास्तवमै मेरो साथ के चिप्लन्छ, तपाई >
< start="2774.138" dur="2.736"> थाहा छ, अमेरिकामा हेर्दै, >
< start="2775.905" dur="2.603"> EUROPE को आराममा हेर्दै, >
< start="2777.007" dur="2.969"> तपाईं तयारी गर्न समय छ, >
< start="2778.641" dur="2.737"> यसमा पुग्नको लागि समय। >
< start="2780.11" dur="2.168"> तपाइँले अझ बढी भवन बनाउनु पर्छ >
< start="2781.511" dur="2.002"> अस्पताल भर्खरै। >
< start="2782.412" dur="2.536"> तपाईं अधिक प्राप्त गर्न पर्छ >
< start="2783.646" dur="2.87"> यी आईसीयू बेडहरू। >
< start="2785.082" dur="2.769"> तपाईले अरु धेरै पाउनुहुन्छ >
< start="2786.649" dur="1.669"> भेन्टिलियर्स, अधिक प्रशिक्षण >
< start="2787.984" dur="1.569"> नर्स >
< start="2788.452" dur="2.702"> त्यसोभए उनीहरूले वास्तवमै क्षति पुर्‍यायो >
< start="2789.686" dur="3.17"> मुख्य बुँदा, अब समय छ >
< start="2791.288" dur="2.869"> आईटी तयारी गर्न। >
< start="2792.99" dur="2.034"> यो अझ ढिलो छैन। >
< start="2794.291" dur="1.969"> तर यो त्यहाँ भइरहेको छ। >
< start="2795.158" dur="2.503"> यदि तपाईं यी चीजहरू गर्नुहुन्न भने, >
< start="2796.393" dur="3.236"> तपाईं सम्भवतः समाप्त गर्न गइरहनु भएको छ >
< start="2797.794" dur="2.435"> इटाली जस्तै। >
< start="2799.762" dur="1.836"> टुअग टु हियर, लाइन। >
< start="2800.363" dur="2.235"> >> सुन्न टुग गर्नुहोस्, तर हामीमा शब्दहरू दिनुहोस् >
< start="2801.731" dur="1.902"> सम्भावना सुन्नु आवश्यक छ >
< start="2802.732" dur="4.271"> तयार पार्नु। >
< start="2803.767" dur="4.07"> म्याग्जी, स्विच गियर। >
< start="2807.137" dur="2.502"> हामी सुन्दा एउटा चेतावनी दिइरह्यौं >
< start="2807.971" dur="3.036"> विश्व स्वास्थ्य संगठनको बारेमा >
< start="2809.772" dur="1.836"> देशहरू सम्भावित पुन: खोल्दै >
< start="2811.14" dur="1.102"> अति नै पहिले। >
< start="2811.741" dur="2.169"> >> रिपोर्टर: यो छ >
< start="2812.375" dur="2.603"> चाखलाग्दो, LINSEY। >
< start="2814.044" dur="2.703"> विश्व स्वास्थ्य संगठन आउँदै >
< start="2815.112" dur="2.969"> औंल्याउनको लागि वास्तवमा क्रमबद्ध गर्नुहोस् >
< start="2816.88" dur="2.736"> देशहरूमा फिंगर उनीहरूले भनिरहेका छन् >
< start="2818.215" dur="2.902"> प्रारम्भिक खोल्न चाहन्छ। >
< start="2819.749" dur="2.403"> सम्झाउने देशहरू यो सहमति जनाउँदछन् >
< start="2821.25" dur="1.769"> सम्भावित खतरनाक हुनुहोस्। >
< start="2822.285" dur="2.202"> अधिक मानिसहरूलाई प्रभाव पार्नुहोस्। >
< start="2823.153" dur="3.002"> यो तिनीहरूको लागि सहयोगी हुनेछैन >
< start="2824.62" dur="1.802"> विश्व यदि देशहरू खोल्न सुरु हुन्छ >
< start="2826.289" dur="1.535"> UP >
< start="2826.556" dur="2.436"> तिनीहरूले वास्तवमा घरलाई चोट पुर्‍याए >
< start="2827.958" dur="3.47"> औंल्याउनुहोस् जुन देशहरूलाई चाहिन्छ >
< start="2829.125" dur="3.103"> बन्द रहनुहोस्, तिनीहरूलाई आवश्यक छ >
< start="2831.561" dur="2.202"> अभ्यास सामाजिक छुट, >
< start="2832.362" dur="2.436"> अभ्यास स्वयं-अलग। >
< start="2833.897" dur="2.302"> यो उनीहरूको अनुरूप हो >
< start="2834.931" dur="1.902"> हामी केवल सुरु गर्न गइरहेका छौं >
< start="2836.333" dur="1.367"> यो भाइरस पिट्नुहोस्। >
< start="2836.966" dur="2.203"> >> सबै सही। >
< start="2837.834" dur="2.102"> अमेरिकामा लन्डनमा म्याग्गी रुली। >
< start="2839.303" dur="3.803"> धन्यवाद, MAGGIE। >
< start="2840.07" dur="4.737"> >>> र बढेको समयको साथ >
< start="2843.239" dur="3.003"> धेरै मानिस हामीसँग छन्, तिमी मसँगै छौ >
< start="2844.941" dur="2.536"> थप समय खर्च गर्नुहोस् >
< start="2846.376" dur="2.336"> फेसबुक, ट्वीटर र यूट्यूब, >
< start="2847.61" dur="2.403"> तपाईंको फीडमा मनपराउने मानिसहरू छन् >
< start="2848.845" dur="2.636"> कोरोनाभाइरसको बारेमा पोष्ट गर्दै, >
< start="2850.146" dur="5.406"> तर तपाईं कसरी तथ्य छुट्याउनुहुन्छ >
< start="2851.614" dur="10.645"> FROM FICTION? >
< start="2855.686" dur="7.173"> हाम्रो डायना एमए डायन मास >
< start="2862.392" dur="2.836"> >> ईभन कसरी जाँच गर्न >
< start="2862.993" dur="4.504"> कोरोनाभाइरस। >
< start="2865.362" dur="3.102"> उनीहरूको समस्या धेरै >
< start="2867.63" dur="2.937"> सत्य छैन। >
< start="2868.598" dur="3.504"> यो मौलिक पोष्ट दावी >
< start="2870.7" dur="3.737"> पानी पिए १ M मिनेट >
< start="2872.235" dur="2.936"> तपाईंको भित्र भाइरस फ्ल्यास हुनेछ >
< start="2874.571" dur="0.867"> STOMACH, जहाँ एसिड मार्नेछ >
< start="2875.305" dur="2.002"> IT >
< start="2875.572" dur="3.904"> सत्य -- >
< start="2877.44" dur="4.772"> >> त्यसो भए, त्यो मान्यता वास्तवमै गर्दैन >
< start="2879.609" dur="4.905"> प्यान आउट आउट यो IT को अधिक >
< start="2882.345" dur="2.77"> A को लागी जवाफ दिनुहोस् >
< start="2884.647" dur="2.37"> RESPIRATORY समस्या। >
< start="2885.248" dur="3.136"> >> अन्य भाइरल पोष्ट दाबी >
< start="2887.15" dur="2.77"> विशेष पानी पिए >
< start="2888.518" dur="3.036"> भाइरसको बिरूद्ध प्रभावकारी छ। >
< start="2890.053" dur="2.969"> >> मलाई लाग्छ कि मानिसहरु आउँछन् >
< start="2891.688" dur="3.47"> यो सम्भावनाको कारणले अपग्रेड गर्नुहोस् >
< start="2893.156" dur="2.703"> त्यहाँ केहि कुराकानी भएको छ >
< start="2895.291" dur="3.003"> भाइरस प्रतिलिपि अधिकार भित्र >
< start="2895.992" dur="4.238"> हाम्रो थ्रोट्स। >
< start="2898.428" dur="2.536"> तर फेरि, यो भाइरस एक हो >
< start="2900.363" dur="2.703"> RESPIRATORY भाइरस। >
< start="2901.097" dur="4.638"> >> पिउने पानीको स्थापना गर्नुहोस्, >
< start="2903.199" dur="3.37"> यो पोष्ट गलत दाबी ग्यारेजि। >
< start="2905.869" dur="2.869"> नुन पानी वा VINEGAR संग >
< start="2906.702" dur="3.638"> भाइरसको ELIMINATES। >
< start="2908.872" dur="2.969"> >> सर्ट उत्तर हैन, तर म >
< start="2910.473" dur="3.437"> मानिसहरू जो फोर-फोर छन् >
< start="2911.975" dur="3.103"> थ्रोट्स, जुन एउटा लक्षण हुन सक्छ >
< start="2914.043" dur="3.071"> COVID-19 भाइरस को, खोज्नुहोस् >
< start="2915.212" dur="2.235"> यो मद्दतको लागी उनीहरुको लागी >
< start="2917.247" dur="2.602"> थ्रोट्स। >
< start="2917.581" dur="4.438"> यदि त्यो केस हो भने, आईटीको लागि जानुहोस्। >
< start="2919.983" dur="3.303"> >> केहि YUUTUBE SUGGEST मा >
< start="2922.152" dur="3.103"> चमत्कारिक खानु पिउने >
< start="2923.419" dur="3.804"> समाधान वा MMS जो हो >
< start="2925.388" dur="3.403"> जरूरी क्लोरीन डायऑक्साइड। >
< start="2927.357" dur="3.403"> >> मार्न इयान डायऑक्साइड हत्याहरू >
< start="2928.925" dur="2.703"> हरेक पठान, सबै भाइरस, >
< start="2930.893" dur="4.672"> कोरोनाभाइरस समावेश गर्दै। >
< start="2931.761" dur="7.007"> >> तर FDA WARNS INGESTING >
< start="2935.698" dur="4.906"> यो उत्पादन पियक्कड जस्तो छ >
< start="2938.901" dur="3.204"> ब्लीच र सम्भाव्य छ >
< start="2940.737" dur="2.736"> जीवन-धम्की दिने पक्ष प्रभावहरू। >
< start="2942.239" dur="2.435"> तपाइँ के चाहानुहुन्छ यदि तपाइँलाई थाहा छ >
< start="2943.606" dur="2.47"> भाइरस छ? >
< start="2944.808" dur="4.204"> एउटा सबैभन्दा धेरै मन्त्रीहरू तपाईंले लिनुपर्दछ >
< start="2946.209" dur="4.939"> एक ड्राई कग र कुनै भाग्यमान छैन। >
< start="2949.146" dur="3.97"> तर हाम्रो आफ्नै KAYLEE हार्टंग जो >
< start="2951.281" dur="3.17"> भाइरस को लागी सकारात्मक परीक्षण गरिएको >
< start="2953.249" dur="3.07"> स्पष्ट छ कि सत्य छैन। >
< start="2954.584" dur="3.537"> >> आईटी वास्तवमै सबैको साथ शुरू हुन्छ ए >
< start="2956.452" dur="4.038"> भाग्यमानी नाक एक हप्ता अघि, र >
< start="2958.255" dur="3.57"> त्यो म पछि चार दिन थियो >
< start="2960.623" dur="1.535"> हप्ताको अवधिमा फर्कियो >
< start="2961.958" dur="2.069"> स्याटल >
< start="2962.292" dur="3.203"> मेरो लागि के नोटिबल थियो म >
< start="2964.16" dur="2.102"> लक्षणहरू थिएनन् >
< start="2965.628" dur="2.069"> यहाँ नजिकै एक संगठित भएको थियो >
< start="2966.396" dur="2.035"> कोरोनाभाइरस संग। >
< start="2967.831" dur="2.402"> म कुनै प्रकारको AAV गर्दै थियो >
< start="2968.565" dur="3.403"> ड्राई कउ। >
< start="2970.367" dur="1.934"> मसँग कुनै छोटो कुरा थिएन >
< start="2972.101" dur="0.968"> BREATH >
< start="2972.435" dur="2.502"> म कुनै दबाब महसुस गर्दिन >
< start="2973.202" dur="3.17"> छाती। >
< start="2975.071" dur="3.603"> त्यसोभए पहिले मेरो लागि सहज थियो >
< start="2976.506" dur="2.902"> सोच्न यो केही होईन। >
< start="2978.808" dur="2.302"> यो केहि हुनु हुँदैन >
< start="2979.542" dur="4.438"> बारेमा चिन्तित। >
< start="2981.244" dur="3.436"> >> एक आपातकालीन भौतिक चिकित्सकको रूपमा, >
< start="2984.113" dur="2.436"> मैले देखेको छु मानिसहरूसँग >
< start="2984.814" dur="3.471"> सम्पूर्ण प्रकारका लक्षणहरू, समावेश सहित >
< start="2986.683" dur="3.804"> SELL को अभाव, DARRHEA, त्यसैले >
< start="2988.418" dur="3.603"> छोटो उत्तर छ, प्रत्येक व्यक्ति >
< start="2990.62" dur="2.87"> सम्भवतः भिन्नता छ >
< start="2992.154" dur="3.271"> COVID-19 भाइरस को प्रतीक, >
< start="2993.623" dur="2.136"> धेरै जसो हुन सक्छ >
< start="2995.559" dur="1.668"> मिल >
< start="2995.892" dur="3.437"> >> अर्को पोष्ट झूटा दाबी >
< start="2997.36" dur="3.203"> तपाईं प्रभाव पार्न सक्नुहुन्न यदि तपाईं सक्नुहुन्छ >
< start="2999.462" dur="2.636"> अझ बढीको लागि तपाईंको ब्रिटो होल्ड गर्नुहोस् >
< start="3000.696" dur="3.037"> दस कगडी बिना दोस्रो। >
< start="3002.232" dur="3.102"> >> केवल केही देशहरू हुन् >
< start="3003.866" dur="3.204"> एक जोडको साथ प्रस्तुत गर्दै। >
< start="3005.468" dur="2.502"> म मान्छे गर्न चाहन्न >
< start="3007.204" dur="2.435"> तिनीहरूको लामो पकड। >
< start="3008.104" dur="3.17"> यदि तपाईंले फेला पार्नुभयो लक्षणहरू >
< start="3009.772" dur="3.47"> SIMLAR एक FLU वा COLD, मा >
< start="3011.407" dur="3.604"> यस समयमा यो पोइन्ट, केवल सहायक >
< start="3013.376" dur="2.236"> तपाईलाई कभिड १ 19 र छ >
< start="3015.145" dur="1.234"> आफूलाई अलग राख्नुहोस्। >
< start="3015.745" dur="2.369"> >> त्यसो त धेरै जानकारी संग >
< start="3016.513" dur="1.902"> बाहिर, कसरी तपाईं स्पट एक >
< start="3018.248" dur="2.202"> नक्कली? >
< start="3018.548" dur="3.27"> पहिलो ड्राफ्ट समाचारमा हाम्रा पार्टनरहरू >
< start="3020.584" dur="3.37"> कसरी आफैलाई सोध्नुहोस् >
< start="3021.951" dur="3.871"> सन्देश तपाईंलाई महसुस गर्छ? >
< start="3024.087" dur="3.737"> के यो तपाईंलाई खरीद गर्न चाहन्छ >
< start="3025.956" dur="2.268"> केहि, मनपर्‍यो, यस बारे साझेदारी गर्नुहोस् >
< start="3027.957" dur="1.769"> सदस्यता लिने हो? >
< start="3028.358" dur="2.869"> यो तपाइँलाई डर वा घृणा बनाउँछ >
< start="3029.859" dur="2.636"> केही या तपाईं मजा लाग्छ >
< start="3031.361" dur="2.669"> वा शक गर्दै? >
< start="3032.629" dur="2.769"> यी प्रत्येकको रूपमा ए सेवा गर्न सकिन्छ >
< start="3034.163" dur="3.003"> चेतावनी दिँदै कि तपाईलाई हेर्दै हुनुहुन्छ >
< start="3035.531" dur="3.838"> MISINFORMATION, र WHENEVER मा >
< start="3037.3" dur="4.672"> POSSIBLE, तपाईंको जानकारी A बाट प्राप्त गर्नुहोस् >
< start="3039.502" dur="3.337"> Vedted मेडिकल स्रोत लाई मन पर्छ >
< start="3042.105" dur="2.269"> सीडीसी, विश्व स्वास्थ्य संगठन >
< start="3042.972" dur="1.736"> वा राष्ट्रीय संस्थाहरूको >
< start="3044.507" dur="1.669"> स्वास्थ्य >
< start="3044.841" dur="2.969"> >> एउटा अधिक तपाई गर्न सक्नुहुन्छ >
< start="3046.309" dur="1.935"> को आपूर्ति गरिएको स्रोत जाँच गर्नुहोस् >
< start="3047.944" dur="1.735"> जानकारी। >
< start="3048.377" dur="2.903"> पोष्टहरू मध्ये एक हामी मन्टेनेशन गर्दछौं >
< start="3049.812" dur="3.804"> STANFORD बाट आउनका लागि दावी >
< start="3051.414" dur="3.437"> अस्पताल, तर तपाईं जानुहुन्छ भने >
< start="3053.75" dur="2.936"> स्ट्यानफोर्डको फेसबुक पृष्ठ, तपाइँ >
< start="3054.984" dur="3.67"> यो सन्देश हेर्नुहोस्, पोष्ट गर्नुभयो >
< start="3056.819" dur="3.671"> स्टानफोर्ड मेडिसिनबाट आउँदैन। >
< start="3058.788" dur="9.943"> त्यसोभए यदि तपाईंसँग प्रश्नहरू छन् >
< start="3060.624" dur="10.043"> COVID-१,, जानुहोस् कडा A >
< start="3068.864" dur="2.137"> रिपोर्टेबल स्रोत वा आफैलाई सोध्नुहोस् >
< start="3070.8" dur="0.534"> डाक्टर >
< start="3071.468" dur="2.836"> >> सुपर सहयोगी सल्लाहहरु। >
< start="3072.569" dur="3.203"> हामी तपाईंलाई धन्यवाद, DIANE। >
< start="3074.437" dur="2.469"> जब हामी फर्कन्छौं, एउटा आवश्यक >
< start="3075.905" dur="2.203"> व्यवसाय किपिंग पीपल फेड >
< start="3077.039" dur="1.069"> खाद्य सेवा उद्योग रीलहरू। >
< start="3083.747" dur="3.636"> >>> यी केहि पागल समयहरू छन्, >
< start="3086.882" dur="1.736"> तपाईंलाई थाहा छ, रेस्टोरन्ट >
< start="3087.516" dur="2.837"> उद्योग सबैभन्दा बढी द्वारा प्रभावित छ >
< start="3088.752" dur="2.001"> त्यो, र म तपाईंलाई भन्न सक्छु कि >
< start="3090.486" dur="1.169"> FIRSTHAND >
< start="3090.886" dur="3.104"> म लगभग AY० को बिदा गर्न छु >
< start="3091.788" dur="4.604"> एक दिनमा रोजगार। >
< start="3094.124" dur="3.069"> र तिनीहरूबाट एक्रोस सिट गर्दै, I >
< start="3096.525" dur="4.639"> नसोच्नुहोस् म कहिले क्रिसित छु >
< start="3097.326" dur="4.572"> मेरो सम्पूर्ण जीवनमा धेरै। >
< start="3101.298" dur="1.668"> तपाईंलाई थाहा छ, मानिसहरूलाई बताउनुहोस् >
< start="3102.032" dur="2.202"> तपाईं उनीहरूको साथ राख्दै हुनुहुन्छ >
< start="3103.099" dur="2.936"> अनौठो जब तिनीहरू हुन् >
< start="3104.367" dur="3.703"> आउने पछाडि केहि छ कि म >
< start="3106.168" dur="4.539"> कुनै पनि गर्न चाहनुहुन्न। >
< start="3108.204" dur="5.305"> हामीसँग ID भन्दा बाहिर आधिकारिक छ >
< start="3110.84" dur="3.437"> विगतमा लाखौ कर्मचारीहरू >
< start="3113.643" dur="3.47"> हप्ता, सोच्न को लागी पागल हो >
< start="3114.41" dur="4.505"> बारेमा। >
< start="3117.247" dur="5.806"> रेस्टोरन्टहरू यस्तो अवस्थामा अपरेट गर्दछन् >
< start="3119.048" dur="5.672"> सानो रेजर-थिन मार्जिनहरू >
< start="3123.186" dur="6.806"> कुनै पनि आउन नसक्ने दुई हप्ता >
< start="3124.854" dur="6.974"> मोस्टका लागि विकास गर्दै। >
< start="3130.126" dur="3.103"> यो के हो मलाई साँच्चिकै स्क्यारिंग गर्न >
< start="3131.961" dur="1.568"> सही अब भविष्य छ, तपाईं >
< start="3133.362" dur="2.17"> थाहा? >
< start="3133.663" dur="4.338"> मलाई लाग्छ कि मानिसहरू जाँदैछन् >
< start="3135.665" dur="3.437"> एक धेरै राम्रो, आउनुहोस् >
< start="3138.134" dur="2.403"> बढी SUF-SUFFICIENT। >
< start="3139.235" dur="2.636"> तपाईंलाई थाहा छ, यी चीजहरू जुन हामी हौं >
< start="3140.67" dur="3.203"> मान्छे तिर्न को लागी, को लागी >
< start="3142.005" dur="3.47"> यो लन्ड्री वा कपालहरू, हामी हौं >
< start="3144.007" dur="2.569"> अब कसरी गर्ने सिक्ने >
< start="3145.608" dur="1.702"> हाम्रो सेवाहरू, र ती हुन् >
< start="3146.709" dur="2.069"> केहि सकारात्मक अवस्था बाट लिनुहोस् >
< start="3147.443" dur="3.47"> यो >
< start="3148.912" dur="19.82"> तर हामी सँगै आउन आवश्यक छ >
< start="3151.046" dur="17.686"> एक मानिस र हुन >
< start="3256.586" dur="2.035"> >>> हामी कसरी धेरै संकुचित छौं >
< start="3257.953" dur="3.671"> हामी हाम्रो बिल भुक्तान गर्न गइरहेका छौं र >
< start="3258.754" dur="4.738"> हाम्रो स्वास्थ्य बीमा गुमाउँछ। >
< start="3261.758" dur="3.236"> वास्तवमा, हामी यसका साथ मोलतोल गर्दैछौं >
< start="3263.626" dur="4.572"> कम्पनी हामी कसरी गइरहेका छौं >
< start="3265.127" dur="4.505"> हाम्रो स्वास्थ्य बीमा राख्नुहोस्, >
< start="3268.331" dur="1.702"> केहि हुँदैन जुन कहिले पनि हुँदैन >
< start="3269.766" dur="1.434"> खुशी हुँदैछ। >
< start="3270.166" dur="2.302"> यो वास्तवमै SAD छ। >
< start="3271.334" dur="3.203"> यो वास्तवमै धेरै भन्दा धेरै छ >
< start="3272.602" dur="2.903"> सेवा र वर्ष को >
< start="3274.671" dur="3.67"> रेस्टोरन्ट - सर्वश्रेष्ठ मध्ये एक >
< start="3275.638" dur="3.57"> शहरमा रेस्टोरन्टहरू, तपाईं >
< start="3278.475" dur="4.537"> थाहा छ, यो टाँसको मात्र प्रकारको छ >
< start="3279.342" dur="4.471"> तपाइँको पछाडि तपाइँ, तपाइँलाई थाहा छ? >
< start="3283.146" dur="3.403"> यो छुने प्रकारको हो। >
< start="3283.947" dur="3.37"> म उनीहरूको जवाफको लागि कुर्दै छु। >
< start="3286.683" dur="4.437"> र म आशा गर्छु केहि राम्रो आउँछ >
< start="3287.45" dur="5.773"> यो बाहिर। >
< start="3291.254" dur="5.338"> म नयाँ कम्पनीहरूलाई लाग्छ >
< start="3293.356" dur="3.937"> अमेरिकामा मद्दत गर्नेछ, त्यसैले म आशा गर्दछु >
< start="3296.725" dur="2.803"> तिनीहरू माथि उठ्छन् र अगाडि आउँछन् >
< start="3297.426" dur="4.038"> हाम्रो लागि। >
< start="3299.662" dur="4.872"> >> जब हामी आवश्यक बारे सुन्न सक्छौं >
< start="3301.597" dur="4.438"> काम गर्नेहरू जो उनीहरुमा छन >
< start="3304.667" dur="2.77"> यी ईमर्जन्सीको क्रममा रोजगारहरू >
< start="3306.169" dur="4.103"> अर्डरहरू, हामी सोच्दछौं >
< start="3307.57" dur="5.872"> चिकित्सक र पुलिस अफिसहरू, तर >
< start="3310.406" dur="6.207"> खाना खानु भन्दा पहिले के गर्ने? >
< start="3313.576" dur="4.671"> Lauren ACEA एक व्यवसाय चलाउँछ >
< start="3316.746" dur="2.602"> आवश्यक कामदारहरू को हुन् >
< start="3318.38" dur="2.002"> मान्छे फेड राख्नु। >
< start="3319.482" dur="2.736"> एकचोटी हेर्नु। >
< start="3320.516" dur="3.337"> >> नमस्ते, म फाउन्डर र सीईओ हुँ >
< start="3322.351" dur="2.903"> नि: शुल्क र झुकावको, एक तयार >
< start="3323.986" dur="4.138"> खाना बनाउने कम्पनी EAT। >
< start="3325.388" dur="3.937"> यस समयमा DURING, यो एकदम हो >
< start="3328.258" dur="2.569"> केवल हामीलाई नभनको लागि आयात गर्नुहोस् >
< start="3329.458" dur="2.67"> हाम्रो सुरक्षा पक्का गर्नुहोस् >
< start="3330.96" dur="1.935"> EMPLOYEES BUT ALLO ENSures IN >
< start="3332.261" dur="2.97"> हाम्रो उत्पादनहरूको सुरक्षा जुन हामी गर्छौं >
< start="3333.029" dur="3.603"> हाम्रो ग्राहकहरु लाई वितरण गर्दै छन्। >
< start="3335.365" dur="2.302"> हामी एक आवश्यक व्यवसाय हो, त्यसोभए >
< start="3336.766" dur="3.637"> यो समयमा हामी लिँदै छौं >
< start="3337.8" dur="4.171"> त्यो धेरै गम्भीर कुरा हो। >
< start="3340.537" dur="2.635"> हामी धेरै हौं, धेरै सुन्दर >
< start="3342.104" dur="3.57"> हामी छौं भनेर स्थिति मा रहनुहोस् >
< start="3343.305" dur="4.139"> एक आवश्यक व्यवसाय हुनुमा। >
< start="3345.808" dur="3.537"> समुदायको साथ, हामी गर्छौं >
< start="3347.577" dur="2.535"> धेरै अन्य व्यवसायहरू छन् >
< start="3349.478" dur="2.703"> र कम्पनीहरूलाई चाहिन्छ >
< start="3350.246" dur="3.537"> तिनीहरूको ढोका बन्द गर्न। >
< start="3352.315" dur="2.802"> र त्यहाँ धेरै मानिसहरू छन् >
< start="3353.916" dur="1.935"> त्यो रोजगारको आवश्यकता छ। >
< start="3355.251" dur="2.369"> भनिएको छ साथ, हामी छौं >
< start="3355.985" dur="3.537"> हेयरिंग। >
< start="3357.754" dur="3.369"> यी कठिन समयमा, हामी >
< start="3359.655" dur="3.671"> को लागी यहाँ हुन >
< start="3361.256" dur="3.671"> अमेरिकी जनता र हामी गर्छौं >
< start="3363.459" dur="4.205"> हाम्रो उत्तम सुनिश्चित गर्न हामी के हौं >
< start="3365.06" dur="3.604"> बाहिर पुटिंग गर्दै छन् सुरक्षित छ >
< start="3367.797" dur="1.435"> र त्यो हामी पुनःनिर्माण गर्दैछौं >
< start="3368.798" dur="8.808"> सबैको सुरक्षा। >
< start="3369.365" dur="10.477"> धन्यवाद। >
< start="3377.74" dur="3.47"> >> र लरेन अमेरिका बस्दछ। >
< start="3379.975" dur="2.604"> >> तपाइँलाई मेरो लागी धन्यवाद। >
< start="3381.343" dur="3.17"> >> विस्थापित धेरै >
< start="3382.712" dur="3.203"> उद्योग कानून पाउँदैछन् >
< start="3384.647" dur="2.602"> तपाईंको कम्पनी बन्द छ। >
< start="3386.049" dur="2.902"> तपाईले धेरै भन्नु भयो। >
< start="3387.383" dur="1.835"> कस्तो प्रकारका रोजगारहरू तपाईं हेरिरहेका हुनुहुन्छ >
< start="3389.085" dur="1.468"> को लागि? >
< start="3389.352" dur="2.936"> >> हामी सबैको लागी हेरिरहेका छौं >
< start="3390.687" dur="3.837"> PRESUMPTION बाट, KITCHEN JOBS, >
< start="3394.657" dur="3.036"> यसमा पूर्ण कामदारहरू >
< start="3397.459" dur="1.035"> WAREHOUSE। >
< start="3397.826" dur="2.737"> JANITORIAL, SANITATION। >
< start="3398.628" dur="3.47"> त्यसोभए हामी प्रशस्त हेरी गर्दैछौं >
< start="3400.696" dur="3.537"> हरेक स्थिति >
< start="3402.231" dur="2.737"> प्लान्ट वर्तमानमा विनिर्माण। >
< start="3404.367" dur="1.735"> >> तपाइँसँग कुनै पनि चिन्ता छ >
< start="3405.101" dur="1.768"> बारे मा स्टाफ गर्न सक्षम हुनु >
< start="3406.235" dur="1.902"> यो समयको अवधिमा वा तपाइँ सोच्नुहुन्छ >
< start="3407.003" dur="3.002"> यो सजिलो हुनेछ? >
< start="3408.271" dur="4.304"> >> म मतलब, यो कहिल्यै सजिलो छैन। >
< start="3412.709" dur="1.968"> तर, म मतलब, हामी यति धेरै छैनौं >
< start="3414.41" dur="1.535"> CONCERNED। >
< start="3414.811" dur="2.369"> मलाई लागिरहेको सबैको साथ लाग्छ >
< start="3416.079" dur="1.901"> सही अब हामी सुनुवाई गरिरहेछौं >
< start="3417.313" dur="1.335"> धेरै मानिसहरुका बारे छन्, >
< start="3418.114" dur="2.202"> अनौठो, उनको बन्द गर्नुहोस् >
< start="3418.781" dur="2.303"> ढोका। >
< start="3420.45" dur="2.168"> र यो कठिन समयको लागि हो >
< start="3421.217" dur="3.837"> धेरै मानिसहरू। >
< start="3422.752" dur="6.706"> त्यसोभए हामी चलाउँदैछौं, तपाईंले थाँहा दिनुहुन्छ >
< start="3425.187" dur="6.207"> हामी सहयोग गर्न सक्दछौं। >
< start="3429.592" dur="3.204"> हामी धेरै तरिकाले गर्न सक्छौं। >
< start="3431.527" dur="3.337"> >> यी दिनहरू हामी चाहँदैनौं >
< start="3432.929" dur="2.269"> कुक गर्न, हामी अर्डर गर्न OR मा >
< start="3434.997" dur="1.502"> उद्धारक। >
< start="3435.331" dur="2.636"> वास्तवमै तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ? >
< start="3436.633" dur="3.503"> अतिरिक्त हुन सक्छ तपाईं हुन सक्नुहुन्छ >
< start="3438.1" dur="5.773"> खाना बनाउने बनाउने >
< start="3440.269" dur="5.372"> डेलिभरीहरू तिनीहरू सुरक्षित छन् >
< start="3444.006" dur="3.403"> POSSIBLY हुन सक्छ? >
< start="3445.775" dur="3.703"> >> हामी वास्तवमै सरकार द्वारा सरकार एक हौं >
< start="3447.543" dur="3.971"> सरकार एजेन्सीहरूको धेरै >
< start="3449.612" dur="3.47"> दिन-देखि-दिन, हामी पछ्याउँछौं र >
< start="3451.647" dur="1.969"> धेरै सख्त खाना द्वारा एबेड गर्नुहोस् >
< start="3453.215" dur="2.269"> नियमहरू विनिर्माण। >
< start="3453.749" dur="3.937"> हाम्रो खाद्य सुरक्षा नम्बर एक हो। >
< start="3455.618" dur="4.471"> हाम्रो सबै प्लान्टहरूमा। >
< start="3457.82" dur="3.37"> हामी पनि त्यो दिन-देखि-दिन गर्छौं, >
< start="3460.222" dur="2.537"> औपचारिक रूपमा अब यो एक छ >
< start="3461.323" dur="3.671"> अतिरिक्त कन्सर्न, विशेषसँग >
< start="3462.892" dur="3.937"> सेना, त्यसोभए म त्यो गर्छु भनेर हामी भन्दछौं >
< start="3465.128" dur="2.702"> धेरै अतिरिक्त लिनुभयो >
< start="3466.962" dur="1.602"> हाम्रो स्टाफमा अभ्यास। >
< start="3467.964" dur="2.535"> सबैजनालाई जाँच गरियो जब तिनीहरू >
< start="3468.698" dur="5.104"> निर्माण भित्र आउनुहोस्। >
< start="3470.633" dur="4.805"> यदि कुनैले कुनै पनी प्रकार देखाईरहेछ भने >
< start="3473.936" dur="4.004"> SYMPTOMS, MECUSE ME, तिनीहरू हुन् >
< start="3475.571" dur="4.471"> घर पठाइयो र हामी तपाईलाई थाहा छ, >
< start="3478.073" dur="3.571"> CDC मार्गनिर्देशन र अनुसरण गर्दै >
< start="3480.175" dur="3.338"> हामी रहन सक्छौं धेरै काम गर्दै >
< start="3481.778" dur="3.503"> सुरक्षित, तर हामी अतिरिक्त लिइरहेका छौं >
< start="3483.646" dur="5.171"> उपायहरू जब यो सुरक्षामा आउँछ >
< start="3485.415" dur="5.538"> र HIGIENE, SANITATION र त्यहि >
< start="3488.951" dur="2.703"> अतिरिक्त सुरक्षा सुरक्षा। >
< start="3491.086" dur="2.837"> >> एक व्यक्तिगत मनपर्ने Go-TO >
< start="3491.787" dur="2.87"> खाना? >
< start="3494.057" dur="2.802"> >> म मतलब, हाम्रो सल्मन वास्तवमै हो >
< start="3494.791" dur="4.137"> राम्रो। >
< start="3496.993" dur="3.904"> म मतलब, हुन सक्छ म पूर्वाग्रहित छु, तर I >
< start="3499.061" dur="3.304"> सबै खाना खानुहोस् >
< start="3501.03" dur="2.169"> SINCE म मेरो समय को धेरै खर्च गर्दछन् >
< start="3502.498" dur="2.102"> यहाँ अफिस मा। >
< start="3503.333" dur="2.835"> हाम्रो साल्मन महान छ। >
< start="3504.733" dur="3.17"> हामी भेगन भोजमा विशेष प्रयोग गर्दछौं। >
< start="3506.302" dur="2.436"> हामीसँग धेरै नै असल छ >
< start="3508.036" dur="2.003"> मेनुमा स्टफ। >
< start="3508.871" dur="2.269"> >> तपाईलाई धेरै कुराको लागि धन्यवाद >
< start="3510.172" dur="1.401"> तपाईं गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईंको समय >
< start="3511.273" dur="0.834"> हामीलाई बताउँदै। >
< start="3511.707" dur="2.102"> हामी यसको कदर गर्छौं। >
< start="3512.241" dur="3.404"> >> तपाइँ धेरै धेरै धन्यवाद। >
< start="3513.943" dur="2.503"> >>> र एक पछिल्लो खाना आज >
< start="3515.778" dur="3.503"> हामी जानु अघि, हाम्रो छवि >
< start="3516.579" dur="4.038"> DAY >
< start="3519.415" dur="1.569"> आउटडोर खाने अवधि ए >
< start="3520.75" dur="1.969"> प्यान्डमिक। >
< start="3521.117" dur="4.17"> यी FINKS मा चीन रमाईलो ए >
< start="3522.852" dur="5.405"> पाल टाँगो तान्न पार्क। >
< start="3525.421" dur="5.673"> जुनसुकै यो प्रभावकारी वा हो >
< start="3528.391" dur="4.238"> हैन, हामी वास्तवमै भन्न सक्दैनौं, तर >
< start="3531.227" dur="1.735"> न्यूनतम तिनीहरू बनाउँदैछन् >
< start="3532.762" dur="1.768"> EFFORT। >
< start="3533.096" dur="3.736"> यो यस घण्टाको लागि हाम्रो शो हो। >
< start="3534.664" dur="3.47"> एबीसीमा रहनको लागि सुरक्षित हुनुहोस् >
< start="3536.966" dur="1.501"> समाचार विश्लेषण र शीर्षको लागि लाइभ >
< start="3538.267" dur="2.035"> स्टोरीहरू। >
< start="3538.601" dur="2.469"> म लाइन डेविस हुँ, धेरै धेरै धन्यवाद >
< start="3540.436" dur="2.736"> हामीसँग स्ट्रीमिINGको लागि र A हो >
< start="3541.203" dur="1.969"> महान रात। >